Latest MCN News!
129. ဂူထဲကနေ ကယ်တင်ခဲ့တဲ့ ထိုင်းကလေး ၁၂ ဦး နဲ့ နည်းပြတို့ ဆေးရုံ ကနေ ဆင်းမယ်	-MCN
#နိုင်ငံတကာသတင်း	(1d ago)
ဖွင့်ရန်။ ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းလိုဏ်ဂူအတွင်းကနေ ပြန်ကယ်ထုတ်ခဲ့တဲ့ ထိုင်းကလေး ၁၂ ဦး နဲ့ နည်းပြတို့ကို လာမယ့် သီတင်းပတ် မှာ ဆေးရုံမှ ဆင်းခွင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေဟာ တိုးတက်ကောင်းမွန်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက် ဇူလိုင် ၁၉ ရက်မှာ ဆေးရုံ ကနေ ဆင်းခွင့်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ ထိုင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး က ဆာကိုလ်ဆာတာရာထရွန်က ပြောပါတယ်။ ထိုင်းလူငယ်ဘောလုံးအသင်းက လူငယ် ၁၂ ဦး နဲ့ နည်းပြတို့ကို ဇူလိုင် ၁၀ ရက်ညပိုင်းက ဂူအတွင်းမှ ဘေးကင်းစွာ ကယ်ထုတ်ပြီးနောက် ချင်းရိုင် ဆေးရုံသို့တင်ပို့ထားပါတယ်။ အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ်ရှိ ကလေးငယ် တစ်ဦးက “ ကျန်းမာရေး ပြန်ကောင်းမွန်နေပါတယ်။ ကယ်တင်ပေးခဲ့လို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။” လို့ပြောပါတယ်။ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ဂူထဲကနေ ကယျတငျခဲ့တဲ့ ထိုငျးကလေး […]
128. ရုရှားက ရွေးကောက်ပွဲ စွက်ဖက်မှုကို ဆွေးနွေးမယ်လို့ အမေရိကန် သမ္မတပြော	-MCN
ဖွင့်ရန်။ အမေရိကန် သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့် က လာမယ့်သီတင်းပတ်မှာ ရုရှား သမ္မတ ပူတင် နဲ့ တွေဆုံချိန်အတွင်း အမေရိကန် ရွေးကောက်ပွဲ ကိုအနာဂတ်မှာ ရုရှားနိုင်ငံက ကြားဝင်စွက်ဖက်တာနဲ့ ပတ်သက်လို့ တွေဆုံဆွေးနွေးမယ်လို့ပြောပါတယ်။ အမေရိကန် သမ္မတ က ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိ ရွေးကောက်ပွဲတွေ နဲ့ အမေရိကန် သမ္မတ ရွေးကောက်ပွဲတွေကို ရုရှားနိုင်ငံက ကြားဝင်စွက်ဖက်တာနဲ့ ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးမယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အမေရိကန် ထောက်လှမ်းရေးအရာရှိတွေ က ရုရှားနိုင်ငံ ဟာ ကမ္ဘာတ၀ှမ်းရှိ ပြည်တွင်းရွေးကောက်ပွဲတွေကို ကြားဝင်စွက်ဖက်ဖို့ ကြိုးပမ်းမှုတွေ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ရုရှားက ရှေးကောကျပှဲ စှကျဖကျမှုကို ဆှေးနှေးမယျလို့ အမရေိကနျ သမ်မတပွော အမရေိကနျ သမ်မတဒျေါနယျထရမျ့ က လာမယျ့သီတငျးပတျမှာ ရုရှား သမ်မတ ပူတငျ […]
127. မလေးရှား ယူ ၁၉ အသင်း ကို ကျောက်ခဲ၊ ရေဘူးတွေနဲ့ ပစ်ပေါက်တိုက်ခိုက်	-MCN
ဖွင့်ရန်။ မလေးရှား ယူ ၁၉ ဘောလုံးအသင်းဟာ အာဆီယံ ယူ ၁၉ ချန်ပီယံရှစ် ပြိုင်ပွဲမှာ အိမ်ရှင်အင်ဒိုနီး ရှားအသင်းနဲ့ ကစားစဉ်အတွင်း ကျောက်တုံးများ၊ ပုလင်းများ နဲ့ ပစ်ပေါက်တိုက်ခိုက်ခံ ရတယ်လို့သတင်းတွေ ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ မလေးရှားအသင်း ဟာ ဇူလိုင် ၁၂ ရက်နေ့က အိမ်ရှင်အင်ဒိုနီးရှားအသင်း နဲ့ အကြိုဗိုလ်လုပွဲ ကစားချိန်အတွင်း အခုလိုမျိုးတိုက်ခိုက်ခံရတာဖြစ်ပြီး အဆိုပါ ပွဲမှာ မလေးရှားအသင်းက အိမ်ရှင် အင်ဒိုနီးရှားအသင်းကို ၃ ဂိုး ၂ ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရသွားခဲ့ပါတယ်။ ပွဲပြီးချိန်မှာ စိတ်ဆိုးနေတဲ့ အင်ဒိုနီးရှား ပရိသတ်တွေဟာ မလေးရှားအသင်းကို ပွဲကြည့်စင်မှနေပြီး ရေဘူးတွေ၊ ကျောက်ခဲတွေနဲ့ ပစ်ပေါက်ခံရတာဖြစ်ပြီး မလေးရှား ပရိတ်သတ်တွေဟာ အ၀တ်စားလဲခန်းကိုသွားရာ ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအတွင်း ထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။ မလေးရှား နည်းပြ ဟိုဒက်က […]
126. အင်္ဂလန် ကွင်းလယ်လူ ထရစ်ပီယာ ဘယ်လ်ဂျီယံနဲ့ ပွဲမှာ ပြန်ပါဖို့ အလားလာများ	-MCN
ဖွင့်ရန်။ အင်္ဂလန် ကွင်းလယ်လူ ထရစ်ပီယာ ဟာ အင်္ဂလန် နဲ့ဘယ်လ်ဂျီယံတို့ ကစားမယ့် ကမ္ဘာဖလား အကြိုဗိုလ်လုပွဲကို ပြန်ပါဝင်ဖို့ ကြံ့ခိုင်မှု ပြည့်ဝနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ထရစ်ပီယာ ဟာ အင်္ဂလန် နဲ့ ခရိုအေးရှားတို့ ကစားတဲ့ ကမ္ဘာဖလားအကြိုဗိုလ်လုပွဲမှာ ထမ်းဆင် နဲ့ ထုတ်ခံရပြီး ပေါင်ခြံဒဏ်ရာရသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အင်္ဂလန် ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ ဟန်ဒါဆန် နဲ့ဝေါ်ကာတို့ ရဲ့ ကြံခိုင်မှု အခြေနေကတော့ သံသယ ရှိစရာအခြေနေမျိုးရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး အဆိုပါ ကစားသမားနှစ်ဦးစလုံးဟာ ခရိုအေးရှား နဲ့ ကစားတဲ့ပွဲမှာ ဒဏ်ရာ တွေရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အင်္ဂလန်နည်းပြ ဆောက်ဂိတ် ဟာ ကမ္ဘာဖလား တတိယနေရာလုပွဲ နဲ့ ပတ် သက်လို့ ကစားသမားတွေကို အပြောင်းလဲ လုပ်သွားမှုရှိမရှိဆိုတာကို မပြောသေးပါဘူး။ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> […]
125. တရုတ် အထူးကိုယ်စားလှယ်က နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ တပ်ချုပ်တို့နဲ့ တွေ့ဆုံ	-MCN
#ပြည်တွင်းသတင်း	(1d ago)
ဖွင့်ရန်။ တရုတ်နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ အာရှရေးရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် စွန်းဂေါ်ရှန်းဟာ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့နဲ့ သီးခြားစီ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ (၂၁) ရာစု ပင်လုံညီလာခံ တက်ရောက်ဖို့ ရောက်ရှိနေတဲ့ တရုတ် အထူးကိုယ်စားလှယ်ဟာ မနေ့က ဇူလိုင် ၁၃ ရက်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ဆုံပြီး ပင်လုံညီလာခံနဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ် အရေးမှာ တရုတ်က ဆက်လက် ကူညီမယ့် ကိစ္စရပ်တွေကို ဆွေးနွေးပါတယ်။ တရုတ် အထူးကိုယ်စားလှယ်ဟာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ တွေ့ဆုံစဉ် နယ်စပ်ဒေသ တည်ငြိမ်ရေးနဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ် အရေးတွေကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> တရုတျ အထူးကိုယျစားလှယျက နိုငျငံတျော အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ၊ တပျခြုပျတို့နဲ့ တှဆေုံ့ တရုတျနိုငျငံခွားရေး ဝနျကွီးဌာန၊ အာရှရေးရာ […]
124. ပါကစ္စတန်ရွေးကောက်ပွဲလှုပ်ရှားမှုအတွင်း အသေခံဗုံးခွဲတိုက်ခိုက် လူ ၁၀၀ နီးပါးသေဆုံး	-MCN
ဖွင့်ရန်။ ပါကစ္စတန် ရွေးကောက်ပွဲအကြို မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး လှုပ်ရှားမှုအတွင်း အသေခံဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ခဲ့လို့ အနည်းဆုံးလူပေါင်း ၈၅ ဦးသေဆုံးပြီး ၁၅၀ ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ ဇူလိုင် ၁၃ ရက်နေ့က အနောက် တောင်ပိုင်းဒေသရှိ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး နေရာတစ်ခုကို တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး တိုက်ခိုိက်မှုကြောင့် မက်အမ် မြို့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ အခုတိုက်ခိုက်မှုဟာ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာ တစ်နှစ်အတွင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ တိုက်ခိုက်မှုတွေထဲမှာ အဆိုးရွားဆုံး တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နောက်ထပ် ပြုလုပ်မယ့် မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတွေမှာ လူသေဆုံးမှုတွေ ဖြစ်မှာ စိုးရိမ်နေပါတယ်။ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ပါကစ်စတနျရှေးကောကျပှဲလှုပျရှားမှုအတှငျး အသခေံဗုံးခှဲတိုကျခိုကျ လူ ၁၀ဝ နီးပါးသဆေုံး ပါကစ်စတနျ ရှေးကောကျပှဲအကွို မဲဆှယျစညျးရုံးရေး လှုပျရှားမှုအတှငျး အသခေံဗုံးခှဲတိုကျခိုကျမှုဖွဈခဲ့လို့ အနညျးဆုံးလူပေါငျး ၈၅ ဦးသဆေုံးပွီး ၁၅၀ ဦးဒဏျရာရခဲ့ပါတယျ။ ဇူလိုငျ ၁၃ ရကျနကေ့ အနောကျ […]
123. ရုရှားထောက်လှမ်းရေးအရာရှိ ၁၂ ဦးကိုအမေရိကန်စွဲချက်တင်	-MCN
ဖွင့်ရန်။ အမေရိကန် တရားရေးဌာနဟာ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ကကျင်းပခဲ့တဲ့ အမေရိကန် ရွေးကောက်ပွဲကို ဆိုက်ဘာ တိုက်ခိုက်မှု လုပ်တာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ရုရှား ထောက်လှမ်းရေးအရာရှိ ၁၂ ဦးကိုစွဲချက်တင်လိုက်ပါတယ်။ အထူးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် မူလာ ဦးဆောင်ပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်က ကျင်းပတဲ့ အမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲကို ရုရှားတို့ စွက်ဖက်မှုတွေ အပေါ် စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအရ လူပေါင်း ၂၀ နဲ့ ကုမ္ပဏီ ၃ ခုကို စွဲချက် တင်ခဲ့ပါတယ်။ ရုရှား ထောက်လှမ်းရေးအရာရှိတွေဟာ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မတ်လတည်းက ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုတွေ စတင်လုပ်ခဲ့ပြီး အမေရိကန်သမ္မတလောင်း ဟီလာရီကလင်တန် အတွက်မဲဆွယ်စည်းရုံးသူ၊ လုပ်အားပေးသူတွေရဲ့ အီးမေလ်း အကောင့်တွေကို တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ရုရှားထောကျလှမျးရေးအရာရှိ ၁၂ ဦးကိုအမရေိကနျစှဲခကျြတငျ အမရေိကနျ တရားရေးဌာနဟာ […]
122. အင်္ဂလန် – ဘယ်လ်ဂျီယံ	-MCN
ဖွင့်ရန်။ အင်္ဂလန် အသင်းဟာ ခရိုအေးရှားကို ရှုံးခဲ့သလို ဘယ်လ်ဂျီယံကလည်း ပြင်သစ်ကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့တာကြောင့် ကမ္ဘာဖလား တတိယလုပွဲကို ကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်သင်းစလုံး ဟာ အုပ်စုအတွင်းပွဲစဉ်က တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ဘယ်လ်ဂျီယံက အနိုင်ရထားပါတယ်။ နှစ်သင်းစလုံးဟာ ဂုဏ်သိက္ခာအတွက် ကစားကြမှာဖြစ်ပြီး နိုင်ပွဲရဖို့ အားထုတ်ကစားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အုပ်စုတွင်းပွဲစဉ် ကစားခဲ့ချိန်တုန်းက အရန်ကစားသမားတွေကို အသုံးပြုခဲ့ပေမယ့် အခုပွဲစဉ်မှာ အဓိက ကစားသမားတွေ အသုံးပြုလာဖို့များပါတယ်။ ဘယ်လ်ဂျီယံအသင်း ဟာ လူကာကူ၊ ဟာဇက် ၊ ဒီဘရိုင်း ၊ကွန်ပနီတို့ ဦးဆောင်မှုနဲ့ အင်္ဂလန်ကို ဖိအားပေးဖို့ ကစားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လ်ဂျီယံဟာ ပြင်သစ်ကို ရှုံးခဲ့ပေမယ့် ခြေစွမ်းပိုင်းကောင်းမွန်ခဲ့ပြီးအခွင့်ရေးကိုအသုံးမချနိုင်ခဲ့လို့ ရှုံးခဲ့ပေမယ့် အင်္ဂလန်နဲ့ပွဲမှာ ရရှိဖို့အခွင့်ရေး ကိုအသုံးချဖို့ ကြိုးစားမှာဖြစ်ပါတယ်၊ အင်္ဂလန် အသင်းကလည်း ဟာရီကိန်း၊ စတာလင် ၊ အလီတို့ […]
121. ငြိမ်းချမ်းရေး တတ်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေ ဖမ်းဆီးထောင်ချတာ မဖြစ်သင့် ( ရုပ်/သံ)	-MCN
ဖွင့်ရန်။ ငြိမ်းချမ်းရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားနေတဲ့ လူငယ်တွေကို ဖမ်းဆီးထောင်ချနေမှုတွေဟာ မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်း ဒေါက်တာ ညိုညိုသင်းက ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ဒီသတင်းကို MCN သတင်းထောက် မောင်ထက်က ပေးပို့ထားပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ စားပွဲဝိုင်းမှာထိုင်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးနေပေမယ့် တစ်ဖက်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားနေတဲ့ လူငယ်တွေကို ဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုတာတွေဟာ မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ ဒေါက်တာညိုညိုသင်းက ပြောပါတယ်။ ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့ Green Hill ဟိုတယ်မှာ လွတ်လပ်စွာ စီတန်းလှည့်လည်ခွင့်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ လူငယ်များရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး လှုပ်ရှားမှု သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ အခုလို ပြောခဲ့တာပါ။ Soundbites-လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်း ဒေါက်တာညိုညိုသင်း ဒါ့အပြင် လက်ရှိအခြေအနေမှာ အစိုးရ၊ လွှတ်တော်၊ တပ်မတော်တို့က ငြိမ်းချမ်းရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့ လူငယ်တွေရဲ့ အခွင့်အရေးနဲ့ အနာဂါတ်တွေကို ထည့်သွင်း စဉ်းစားပေးဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။ […]
120. စက္ကူကုန်ကြမ်းရှားလို့ ပြည်တွင်းစက်ရုံတွေ ရပ်နားရမယ့် အခြေအနေ ကြုံတွေ့ (ရုပ်/သံ)	-MCN
ဖွင့်ရန်။ စက္ကူကုန်ကြမ်းတွေကို ပြည်တွင်းဈေးနှုန်းထက် နှစ်ဆပေးပြီး တရုတ်နိုင်ငံက ဝယ်ယူနေတာကြောင့် ပြည်တွင်းစက်ရုံတွေ ရပ်နားရမယ့် အခြေအနေတွေနဲ့ ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ စက္ကူစက်ရုံပိုင်ရှင်တွေက ပြောပါတယ်။ ဒီသတင်းကို MCN သတင်းထောက် တင်မောင်ထွေးက ပေးပို့ထားပါတယ်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်က စတင်ပြီး ပြည်တွင်းက စက္ကူကုန်ကြမ်းတွေကို တရုတ်နိုင်ငံက ပြည်တွင်းဈေးနှုန်းထက် နှစ်ဆပေးပြီး ဝယ်ယူနေပါတယ်။ ပြည်တွင်းက စက္ကူစက်ရုံတွေအတွက် တစ်နှစ်ကို စက္ကူကုန်ကြမ်း တန်ချိန် ၄ သောင်းလိုအပ်နေပေမယ့် အခုလက်ရှိအချိန်မှာ တရုတ်နိုင်ငံက ဝယ်ယူနေတာကြောင့် ကုန်ကြမ်းရှားပါးပြီး ပြည်တွင်းစက္ကူစက်ရုံတွေ ရပ်နားရမယ့် အခြေအနေနဲ့ ကြုံတွေ့နေရတာပါ။ Soundbite ဦးအုန်းလွင် (စက္ကူစက်ရုံပိုင်ရှင်၊ ပဲခူးစက်မှုဇုန်) စက္ကူစက်ရုံတွေအတွက် အခုလို ကုန်ကြမ်းရှားပါးနေချိန်မှာ စက္ကူပျော့ဖတ်ပြုလုပ်ဖို့ လောင်စာထင်းတွေလဲ ရှားပါးလာနေတာကြောင့် စက်ရုံအချို့ ရပ်နားထားရတယ်လို့ စက္ကူစက်ရုံပိုင်ရှင်တွေက ပြောပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် […]
119. အမေရိကန်က ပြည်နှင်ဒဏ် ပေးသူတွေ ပြန်လက်ခံဖို့ မြန်မာအစိုးရ ဆုံးဖြတ်	-MCN
ဖွင့်ရန်။ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ ပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တာကြောင့် ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးလိုတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား ၃၁ ဦးကို ပြန်လည် လက်ခံဖို့ မြန်မာအစိုးရက ဆုံးဖြတ်ကြောင်း RFA သတင်းမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ပြစ်မှုကျူးလွန်လို့ ပြစ်ဒဏ် ကျခံရပြီးသူ ၄၇ ဦးအနက် ၁၆ ဦးကို ပြန်လည် လက်ခံခဲ့ပြီး ၃၁ ဦး ကျန်ရှိနေသေးတာ ဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာအစိုးရဘက်က စိစစ်ရာမှာ ကြန့်ကြာနေတာ ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန အမြဲတမ်း အတွင်းဝန် ဦးမြင့်သူက ပြောကြားထားပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဌာနနဲ့ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာနက ညွှန်ကြားရေးမှူးနဲ့ အထက်အဆင့် အရာရှိတွေကို ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးသူတွေ လက်ခံရေးမှာ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု မရှိဘူးဆိုပြီး အမေရိကန်က ဗီဇာကန့်သတ်မှု လုပ်ဆောင်မယ်လို့ ကြေညာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> […]
118. လူငယ်တွေ စာဖတ်အား လျော့နည်းလာ (ရုပ်/သံ)	-MCN
ဖွင့်ရန်။ ဒီနေ့ လူငယ်တွေ စာဖတ်အားလျော့နည်းလာတာကြောင့် စာဖတ်တဲ့အလေ့အထကို ပြန်လည်ပျိုးထောင်ပေးဖို့ လိုအပ်နေပါတယ်။ ဒီသတင်းကို MCN သတင်းထောက် အောင်သူက ပေးပို့ထားပါတယ်။ ဒီကနေ့ခေတ် လူငယ်တွေ လူမှု့ကွန်ယက်အသုံးပြုမှုတွေ ပိုမိုများပြားလာပြီး ဖျော်ဖြေရေးမီဒီယာတွေကို ပိုမိုစိတ်ဝင် စားလာတာကြောင့် စာဖတ်တဲ့အလေ့အထ မရှိသလောက် နည်းပါးလာနေပါတယ်။ အဲဒီလို စာဖတ်အားလျော့နည်းလာတဲ့အတွက် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအပါအ၀င် အစိုးရအနေနဲ့ စာဖတ်တဲ့အလေ့အထကို ပြန်လည်ပျိုးထောင်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံစာပေပြန့်ပွားရေးအသင်းက အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင် ဦးမျိုးသန့်ကပြောပါတယ်။ ဇူလိုင်လ (၁၃) ရက်နေ့က မြန်မာနိုင်ငံစာပေပြန့်ပွားရေးအသင်းရဲ့ ပဉ္စမအကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်အစည်း အဝေးကို ရန်ကုန်မြို့ ကုန်သည်လမ်းမှာရှိတဲ့ စာပေဗိမာန်မှာပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ Sound Bite———ဦးမျိုးသန့်(အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်) မြန်မာနိုင်ငံစာပေပြန့်ပွားရေးအသင်း အခုလို စာဖတ်အားလျော့နည်းလာတာကြောင့် အခြေခံပညာမူလတန်းအဆင့်ကနေစတင်ပြီး ကျောင်းသင်ခန်း စာအပြင် ရုပ်ပြဇတ်လမ်းတွေနဲ့ ပညာပေးကာတွန်းစာပေတွေ ဖတ်ရှုစေပြီး အခြေခံစာဖတ်တဲ့ အလေ့အထ ပြန်လည်ဦးမော့လာအောင် လုပ်ဆောင်ဖို့လည်း […]
117. (၂၁) ရာစုပင်လုံ တတိယ အစည်းအဝေး တတိယနေ့ ဆက်လက် ကျင်းပ	-MCN
ဖွင့်ရန်။ ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ – (၂၁) ရာစုပင်လုံ တတိယ အစည်းအဝေးကို မနေ့က ဇူလိုင် ၁၃ ရက် နေပြည်တော်ရှိ မြန်မာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း စင်တာ (၂) မှာ ဆက်လက် ကျင်းပပါတယ်။ နိုင်ငံရေးကဏ္ဍအစည်းအဝေး၊ စီးပွားရေးကဏ္ဍအစည်းအဝေး၊ လူမှုရေးကဏ္ဍအစည်းအဝေး၊ လုံခြုံရေးကဏ္ဍအစည်းအဝေး၊ မြေယာနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကဏ္ဍ အစည်းအဝေးတွေကို သတ်မှတ်နေရာတွေမှာ ကျင်းပကြပါတယ်။ အစိုးရ၊ လွှတ်တော်၊ တပ်မတော်၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ နိုင်ငံရေး ပါတီ အစုအဖွဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေက မူဝါဒ အဆိုပြုလွှာတွေကို အချက်တစ်ချက်ချင်းအပေါ် အလှည့်ကျ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> (၂၁) ရာစုပငျလုံ တတိယ အစညျးအဝေး တတိယနေ့ ဆကျလကျ ကငျြးပ ပွညျထောငျစုငွိမျးခမျြးရေးညီလာခံ – (၂၁) ရာစုပငျလုံ တတိယ […]
116. နေပြည်တော်ကို ရုပ်ရှင်မြို့တော်အဖြစ် တည်ဆောက်ချင်တယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြော	-MCN
ဖွင့်ရန်။ နေပြည်တော်ကို ရုပ်ရှင်မြို့တော်အဖြစ် တည်ဆောက်လိုပြီး ဒီလို တည်ဆောက်ခြင်းအားဖြင့် ရုပ်ရှင် အနုပညာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပြင် နေပြည်တော် ဖွံ့ဖြိ်ုးတိုးတက်မှု အတွက်လည်း ရရှိလာမယ်လို့ မျှော်လင့်ကြောင်း နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောပါတယ်။ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ဖေမြင့်က မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင် အစည်းအရုံးက ရုပ်ရှင်ပညာရှင်တွေနဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေကို တည်ခင်းဧည့်ခံတဲ့ ညစာစားပွဲကို တက်ရောက်စဉ် နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က ပြောကြားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နေပြည်တော်ရဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ သာယာလှပမှု၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အချက်အခြာကျမှု စတဲ့ အခြေခံကောင်းတွေကို အနုပညာအတွက် အသုံးပြုနိုင်ရေး စဉ်းစားဆောင်ရွက်ကြစေလိုတယ်လို့လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောသွားပါတယ်။ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> နပွေညျတျောကို ရုပျရှငျမွို့တျောအဖွဈ တညျဆောကျခငျြတယျလို့ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ ပွော နပွေညျတျောကို ရုပျရှငျမွို့တျောအဖွဈ တညျဆောကျလိုပွီး ဒီလို တညျဆောကျခွငျးအားဖွငျ့ […]
115. ရုရှားမှာ သံတမန် ရိုက်နှက်ခံရမှု ပိုလန်က ဖြေရှင်းချက် တောင်းဆို	-MCN
ဖွင့်ရန်။ ရုရှားမှာ ပိုလန် သံတမန် တစ်ဦး ရိုက်နှက်ခံရမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ မော်စကိုမြို့ရှိ ပိုလန် သံရုံးက ရုရှားအစိုးရကို ဖြေရှင်းချက် တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက်နေ့က ရုရှား အရှေ့ဖျားမြို့ အာကူတက်ခ် ကနေ မော်စကိုမြို့ကို လေယာဉ်စီးလာစဉ် လေယာဉ်ပေါ်မှာ ပိုလန်သံတမန် ရိုက်နှက်ခံရမှု ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ ဝါဆောမြို့ရှိ ပိုလန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနက ပြောပါတယ်။ ရိုက်နှက် စော်ကားသူကို အခင်းဖြစ်ပြီးနောက် ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ ပိုလန် သံတမန်ကို ဆေးစစ်တာတွေ ပြုလုပ်နေပြီး ပိုလန်ကို ပြန်ပို့ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ရုရှားမှာ သံတမနျ ရိုကျနှကျခံရမှု ပိုလနျက ဖွရှေငျးခကျြ တောငျးဆို ရုရှားမှာ ပိုလနျ သံတမနျ တဈဦး ရိုကျနှကျခံရမှုနဲ့ ပတျသကျလို့ မျောစကိုမွို့ရှိ […]
114. ၂၀၃၀ မှာ ဗြိတိန်ဟာ လျှပ်စစ်ကား ၁၁ သန်း အသုံးပြုလိမ့်မယ်	-MCN
ဖွင့်ရန်။ ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်မှာ ဗြိတိန်နိုင်ငံက လမ်းတွေပေါ်မှာ လျှပ်စစ်ကား ၁၁ သန်း မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး ၂၀၄၀ ပြည့်နှစ်မှာတော့ ၃၆ သန်းအထိ အသုံးပြုလာလိမ့်မယ်လို့ အစီရင်ခံစာ တစ်စောင်က ဖော်ပြပါတယ်။ နေရှင်နယ် ဂရစ်ဒ်က ထုတ်ပြန်တဲ့ အနာဂတ် စွမ်းအင် ခန့်မှန်းချက် နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာမှာ ကာဘွန်ကို လျှော့ချနိုင်ငံဖို့အတွက်လျှပ်စစ်ကားတွေဟာအနာဂတ်မှာ အဓိက အရေးပါလာလိမ့်မယ်လို့ ရေးသားထားပါတယ်။ စမတ် အားသွင်းတဲ့ နည်းပညာနဲ့ ယာဉ်နဲ့ လျှပ်စစ်ကြား အသုံးပြုမယ့် နည်းပညာတွေကြောင့် လျှပ်စစ်စွမ်းအင် လိုအပ်ချက်ဟာလည်း အလွန်အမင်း မြင့်လာဖွယ် မရှိဘူးလို့လည်း အစီရင်ခံစာက ဖော်ပြပါတယ်။ Pivot Power ရဲ့ အမှုဆောင် အရာရှိချုပ် မတ် အယ်လန်က ဒေသ ခေါင်းဆောင်တွေ အနေနဲ့ အရေအတွက် များလာမယ့် […]
113. သမ္မတ ထရမ့် ဗြိတိန်ကို အလည်အပတ် ရောက်ရှိ	-MCN
ဖွင့်ရန်။ အမေရိကန် သမ္မတ ဒေါ်နယ် ထရမ့်ဟာ ၄ ရက်ကြာ ခရီးစဉ်အဖြစ် ဗြိတိန်နိုင်ငံကို မနေ့က ဇူလိုင် ၁၂ ရက်မှာ ရောက်ရှိလာပြီး ဗြိတိန် ဝန်ကြီးချုပ် ထရီဆာ မေ၊ ဘုရင်မကြီး အဲလိဇဘက်တို့နဲ့ တွေ့ဆုံဖို့ ရှိပါတယ်။ ဘယ်ဂျီယံနိုင်ငံ၊ ဘရပ်ဆဲလ်မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ နေတိုး အစည်းအဝေးအပြီး အဲဖို့စ် ဝမ်း လေယာဉ်နဲ့ အက်ဆက်စ်ရှိ စတန်းစတက် လေဆိပ်ကို ရောက်ရှိလာတာ ဖြစ်ပြီး ဗြိတိန် နိုင်ငံတကာ ကုန်သွယ်ရေး ဝန်ကြီး လီယမ် ဖောက်စ်က ကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။ သမ္မတ ထရမ့်ဟာ ရဟတ်ယာဉ်နဲ့ လန်ဒန်ရှိ အမေရိကန် သံအမတ်ကြီး နေအိမ်ကို ဆက်သွားခဲ့ပါတယ်။ သမ္မတ ထရမ့်ရဲ့ ဗြိတိန် ခရီးစဉ်အတွင်း သူ့လုပ်ရပ်တွေကို မနှစ်သက်သူတွေက […]
112. ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ပြည်သူလူထု စိတ်ဝင်စားမှု နည်းပါး (ရုပ်/သံ)	-MCN
ဖွင့်ရန်။ လာမယ့် နိုဝင်ဘာလမှာကျင်းပမယ့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကို ပြည်သူလူထု စိတ်ပါဝင်စားမှု သုံးပုံတစ်ပုံသာ ရှိတယ်လို့ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ ဒီသတင်းကို MCN သတင်းထောက်ကေသွယ် ကပေးပို့ထားပါတယ်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၃ရက်နေ့မှာ ကျင်းပမယ့် လစ်လပ်မဲဆန္ဒနယ် ၁၂ နေရာ အတွက် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ မဲစာရင်းတွေကို သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်တွေမှာ စတင်ကြေညာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ မဲစာရင်းတွေ စတင်ကြေညာချက်ကပ်ထားပေမယ့် ပြည်သူတွေ စိတ်ပါဝင်စားမှု သုံးပုံတစ်ပုံသာရှိတာဖြစ်တယ်လို့ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ အစီအစဉ်မန်နေဂျာ ဦးဟန်စိုးထွန်းကပြောပါတယ်။ ဇူလိုင်လ ၁၃ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ Park Royal ဟိုတယ်မှာ ၂၀၁၈ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ အကြို စစ်တမ်းကနဦးတွေ့ရှိချက်အကြောင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ Soundbite ဦးဟန်စိုးထွန်း( စီမံကိန်းအစီအစဉ်မန်နေဂျာ) ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်တွေမှာ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်တွေ ကြိုတင်ကြေညာနိုင်ခဲ့တဲ့အပြင် ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလည်း […]
111. ပင်လုံညီလာခံအပြီး NCA လက်မှတ်ရေးထိုးမယ့် အဖွဲ့တွေ တိုးလာဖို့ရှိနေ (ရုပ်/သံ)	-MCN
ဖွင့်ရန်။ နေပြည်တော်မှာကျင်းပနေတဲ့ တတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင်လုံအပြီးမှာ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးမယ့် တိုင်းရင်းသားလက်နှက်ကိုင်အဖွဲ့တွေတိုးလာနိုင်တယ်လို့ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဇော်ဌေးက ပြောပါတယ်။ ဒီသတင်းကို MCN သတင်းထောက် တင်မောင်ထွေးက တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ နေပြည်တော်မှာကျင်းပနေတဲ့ တတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင်လုံ ဆွေးနွေးပွဲမှာ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၊ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တို့နဲ့ မြောက်ပိုင်း ၇ ဖွဲ့တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ် ။ ဒီလိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု အပြီးရလက်တွေအရ ပင်လုံညီလာခံအပြီး NCA လက်မှတ်ရေးထိုးမယ့် အဖွဲ့တွေတိုးလာဖို့ရှိနေတယ်လို့ ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင်လုံ ဒုတိယနေ့အစီစဉ်အပြီး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ဦးဇော်ဌေးကပြောကြားလိုက်တာပါ ။ အင်တာဗျူး- ဦးဇော်ဋ္ဌေး (ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်) နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး ဒါအပြင် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးရခြင်းမရှိသေးတဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နှက်ကိုင်တွေအနေနဲ့ အမြန်ဆုံးလက်မှတ် ရေးထိုးဖို့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာပါဝင်ကြဖို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကတိုက်တွန်းပြောဆိုထားပြီး […]
110. နေတိုးအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတွေကို ကာကွယ်ရေး အသုံးစရိတ် ၂ ဆ ထည့်ဖို့ ဒေါ်နယ်ထရမ့် ပြော	-MCN
ဖွင့်ရန်။ အမေရိကန် သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်က နေတိုးအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ ကတိပြုထားတဲ့ ကာကွယ်ရေး အသုံးစရိတ် ၂ ဆ ထည့်ဝင်ဖို့ တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ သမ္မတ ထရမ့်ဟာ နေတိုးအဖွဲ့ရဲ့ ၂ ရက်ကြာ ပြုလုပ်တဲ့ အစည်းအဝေးအတွင်း အခုလိုပြောလိုက်တာပါ။ နေတိုးအဖွဲ့ဝင်တွေဟာ ကာကွယ်ရေး အသုံးစရိတ်အတွက် နိုင်ငံရဲ့ ပြည်တွင်း အသားတင် ထုတ်လုပ်မှု တန်ဖိုး (GDP) ရဲ့ ၂ ရာခိုင်နှုန်း ထည့်ဝင်ဖို့ ကတိပြုပေမယ့် ပျက်ကွက်မှုတွေ ရှိနေကြောင်း အမေရိကန် သမ္မတက ဝေဖန်ပါတယ်။ ကာကွယ်ရေး အသုံးစရိတ်အတွက် ထည့်ဝင်မယ်လို့ ပြောထားတဲ့ နိုင်ငံ GDP ရဲ့ ၂ ရာခိုင်နှုန်း မထည့်တာကို ၄ ရာခိုင်နှုန်း တိုးမြှင့်ထည့်ဝင်ရမယ်လို့ အမေရိကန် သမ္မတက ပြောပါတယ်။ […]
109. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ မြောက်ပိုင်း မဟာမိတ် ၇ ဖွဲ့ တွေ့ဆုံ	-MCN
ဖွင့်ရန်။ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ မြောက်ပိုင်း တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် ၇ ဖွဲ့တို့ နှစ်သုတ်ခွဲပြီး မနေ့က ဇူလိုင် ၁၂ ရက် နေပြည်တော်မှာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဗဟိုဌာန (NRPC) မှာ လက်ခံတွေ့ဆုံတာ ဖြစ်ပြီး ပထမ အသုတ်မှာ UWSA ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျောက်ကော်အန်း၊ SSPP က နာယက ဦးဆေးထင်၊ မိုင်းလားအထူး (၄) NDAA က ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစံပေ့၊ KIO ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ(၁) အက်စ်ဂွမ်မော်တို့နဲ့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပါတယ်။ ဒုတိယ အသုတ်အဖြစ် TNLA က တားခူးလန်း၊ MNDAA က ဦးရန်ဝင်ကျုံးနဲ့ AA က […]
108. ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ ကုလ အထူးကိုယ်စားလှယ်တို့ တွေ့ဆုံ	-MCN
ဖွင့်ရန်။ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ ကုလသမဂ္ဂ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စ ခရစ္စတင်း ရှာရာနာ ဘာဂနာတို့ ဇူလိုင်လ ၁၂ ရက်နေ့က နေပြည်တော်မှာ တွေ့ဆုံကြပါတယ်။ ၂၁ ရာစု ပင်လုံညီလာခံ တတိယ အစည်းအဝေးကို တက်ရောက်လာတဲ့ အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စ ခရစ္စတင်း ရှာရာနာ ဘာဂနာနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်တို့ဟာ ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိရေးအတွက် အစိုးရနဲ့ တပ်မတော် ဆောင်ရွက်နေမှု၊ မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်ရေး ဆောင်ရွက်နေမှုတွေကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျနဲ့ ကုလ အထူးကိုယျစားလှယျတို့ တှဆေုံ့ တပျမတျော ကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျနဲ့ ကုလသမဂ်ဂ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ အထူးကိုယျစားလှယျ မစ်စ […]
107. သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့် ဟန်ဂေရီသံအမတ်ကြီး နဲ့ အိုင်ယာလန် သံအမတ်ကြီးကို တွေ့ဆုံ	-MCN
ဖွင့်ရန်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ဟာ တာဝန်ပြီးဆုံးလို့ ပြန်လည်ထွက်ခွာတော့မယ့် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ဟန်ဂေရီသံအမတ်ကြီး H.E. Dr. Peter JAKAB နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အိုင်ယာလန်သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Brendan Gerard Rogers တို့ကို နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဧည့်ခန်းမဆောင်မှာ သီးခြားလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဟန်ဂေရီသံအမတ်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် နှစ်နိုင်ငံသံတမန်ဆက်ဆံရေးနှင့် ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုတိုးမြှင့်ရေး၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီနှင့် အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ဆောင်ရွက်မှုများအား ထောက်ခံပေးနေမှု၊ ပညာရေးကဏ္ဍတွင် အကူအညီများ ပေးအပ်နေမှုနှင့် နှစ်နိုင်ငံအကြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပိုမိုတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်သွားရေး ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အိုင်ယာလန်သံအမတ်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရေး၊ လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှု အကူအညီများ ပေးအပ်နေမှုနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ […]
106. သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ပညာရှင် ဦးအုန်းကို ဒီနေ့ သဂြုင်္ိဟ်	-MCN
ဖွင့်ရန်။ ထင်ရှားတဲ့ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ပညာရှင် ဦးအုန်း (ကမ္ဘာမြေချစ်သူ) ဟာ ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက်နေ့က အသက် ၉၁ နှစ် အရွယ်မှာ ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီး ဒီနေ့မှာ သဂြုင်္ိဟ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့၊ ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း နေအိမ်မှာ လူကြီးရောဂါနဲ့ ကွယ်လွန်သွားတဲ့ ဦးအုန်း (ကမ္ဘာမြေချစ်သူ) ကို ရေဝေးသုဿန်မှာ ဒီနေ့ ဇူလိုင် ၁၃ ရက် ညနေ ၃ နာရီမှာ သဂြုင်္ိဟ်မှာဖြစ်တယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံသစ်တောအသင်း (MFA) က သတင်း ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ သစ်တောသယံဇာတ ပတ်ဝန်းကျင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ထိန်းသိမ်းရေးအသင်း (ဖရီဒါ) နာယက ဦးအုန်းဟာ ၁၉၅၁ ခုနှစ်မှာ B.Sc ဘွဲ့ ရခဲ့ပြီး ၁၉၅၆ ခုနှစ်မှာလည်း အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၊ […]
105. မောင်တောမှာ ကျပ်သိန်း ၃ ထောင် တန်ဖိုးရှိ စိတ်ကြွဆေးတွေ ဖမ်းမိ	-MCN
ဖွင့်ရန်။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောမြို့နယ်မှာ ငွေကျပ် သိန်း ၃ ထောင် တန်ဖိုးရှိတဲ့ စိတ်ကြွမူးယစ်ဆေးပြားတွေ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။ မောင်တောမြို့မ ရဲစခန်းက တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ ပါဝင်တဲ့ ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဟာ ဇူလိုင် ၁၁ ရက်နေ့က မောင်တောမြို့နယ်၊ ရွာသစ်ကေရပ်ကွက်၊ အလယ်ရွာနေ အီစမိုင်ရဲ့ အိမ်ကို ရှာဖွေရာမှာ သူ့ရဲ့ တူမဖြစ်သူ မအာစ်မာကို တွေ့ရှိရပြီး အိပ်ခန်းဗိရိုထဲက စိတ်ကြွဆေးပြား ၉ သောင်းခွဲနီးပါး ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မအာစ်မာ (၁၉ နှစ်) ကို ဖမ်းမိခဲ့ပြီး အီစမိုင်ကတော့ ထွက်ပြေးနေပါတယ်။ သူတို့ ၂ ဦးကို မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကို ပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးများဆိုင်ရာ ဥပဒေအရ အမှုဖွင့် အရေးယူထားပါတယ်။ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> မောငျတောမှာ ကပျြသိနျး ၃ ထောငျ […]
104. အလိုရှိနေတဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါ ကုန်သည်စာရင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက မြန်မာကို ပေးအပ်	-MCN
ဖွင့်ရန်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံက အလိုရှိနေတဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသူ စာရင်းကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက မြန်မာဘက်ကို ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံ၊ ဒါကာမြို့မှာ ကျင်းပနေတဲ့ နှစ်နိုင်ငံ နယ်ခြားစောင့်တပ် ညီလာခံမှာ အဲဒီ မူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းဝယ်နေသူတွေ စာရင်းကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ နယ်ခြားစောင့်တပ် (BGB) က မြန်မာနိုင်ငံ နယ်ခြားစောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ (BGP) ကို ပေးအပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရာဇဝတ်မှု ကျူးလွန်သူတွေ စာရင်းကို မြန်မာဘက်ကို ပေးအပ်ခဲ့ပြီး သူတို့ကို အရေးယူဖို့ ညှိနှိုင်းတာတွေ၊ ဆွေးနွေးတာတွေ ဆက်လုပ်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်လို့ BGB က တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောပါတယ်။ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> အလိုရှိနတေဲ့ မူးယဈဆေးဝါ ကုနျသညျစာရငျး ဘင်ျဂလားဒရှေျ့က မွနျမာကို ပေးအပျ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ နိုငျငံက […]
103. မြောက်ပိုင်း မဟာမိတ် ၇ ဖွဲ့နဲ့ NCA ထိုးနိုင်ရေး ပုံစံ ၂ မျိုးနဲ့ ချဉ်းကပ် တွေ့ဆုံမယ်	-MCN
ဖွင့်ရန်။ တိုက်ခိုက်မှုတွေ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ မြောက်ပိုင်း မဟာမိတ် ၇ ဖွဲ့နဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေး စာချုပ် (NCA) လက်မှတ် ရေးထိုးနိုင်ရေးအတွက် ပုံစံ ၂ မျိုးနဲ့ ချဉ်းကပ် တွေ့ဆုံမယ်လို့ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံရုံး ဝန်ကြီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဇော်ဌေးက ပြောပါတယ်။ မနေ့က ဇူလိုင် ၁၂ ရက် နေပြည်တော်၊ မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း ဗဟိုဌာန (၂) မှာ ပြုလုပ်တဲ့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရအနေနဲ့ မြောက်ပိုင်းတိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်း ၇ ဖွဲ့ကို ပုံစံ၂ မျိုးနဲ့ ချဉ်းကပ်မှာဖြစ်ပြီး ညီလာခံပြီးရင် တိုက်ပွဲလျော့ကျအောင်နဲ့ နှစ်ဖက်ယုံကြည် ရအောင် တတိယနဲ့ စတုတ္ထ ညီလာခံ […]
102. (၂၁) ရာစုပင်လုံ တတိယ အစည်းအဝေး ဒုတိယနေ့ ဆက်လက် ကျင်းပ	-MCN
ဖွင့်ရန်။ ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ- (၂၁) ရာစုပင်လုံ တတိယ အစည်းအဝေး ဒုတိယနေ့ အစုအဖွဲ့အလိုက် အစည်းအဝေးတွေကို မနေ့က ဇူလိုင် ၁၂ ရက်နေ့ နေပြည်တော်မှာ ဆက်လက် ကျင်းပပါတယ်။ အစိုးရအစုအဖွဲ့ အစည်းအဝေး၊ လွှတ်တော်အစုအဖွဲ့ အစည်းအဝေး၊ တပ်မတော်အစုအဖွဲ့ အစည်းအဝေး၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများ အစုအဖွဲ့ အစည်းအဝေး၊ နိုင်ငံရေးပါတီ အစုအဖွဲ့ အစည်းအဝေးတွေကို ကဏ္ဍအလိုက် ဆွေးနွေးကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ လုံခြုံရေး၊ မြေယာနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကဏ္ဍ ၅ ခုနဲ့ စပ်လျဉ်းတဲ့ မူဝါဒ အဆိုပြုလွှာတွေကို အစုအဖွဲ့ဝင်တွေက ဝိုင်းဝန်းအကြံပြု ဆွေးနွေးကြပါတယ်။ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> (၂၁) ရာစုပငျလုံ တတိယ အစညျးအဝေး ဒုတိယနေ့ ဆကျလကျ ကငျြးပ […]
101. ရခိုင်ပြည်နယ်ကို ကျွမ်းကျင်သူတွေ စေလွှတ်ဖို့ ကုလသမဂ္ဂ ပြင်ဆင်နေ	-MCN
ဖွင့်ရန်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဒုက္ခသည်စခန်းကနေ နေရပ်ပြန်မယ့်သူတွေကို ပြန်လည်လက်ခံရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ရခိုင်ပြည်နယ်ကို ကျွမ်းကျင်သူတွေ စေလွှတ်ဖို့ ပြင်နေတယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂ ဖွံ့ဖြိုးရေး အေဂျင်စီ အကြီးအကဲက ပြောပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် အာရှ-ပစိဖိတ် ဒေသဆိုင်ရာ ဒါရိုက်တာ ဟုန်လျန် ရှုက ၂၀၁၇ ခုနှစ် သြဂုတ်လနောက်ပိုင်း ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ကုလသမဂ္ဂ အရာရှိတွေကို ပထမဆုံးအကြိမ် လွတ်လပ်စွာ သွားလာခွင့် ပြုလိုက်တာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဒုက္ခသည်တွေ နေရပ်ပြန်ရေးအတွက် မြန်မာအစိုးရနဲ့ ကုလသမဂ္ဂ ဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် (UNDP)၊ ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး (UNHCR) တို့အကြား နားလည်မှု စာချွန်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ရခိုငျပွညျနယျကို ကြှမျးကငျြသူတှေ စလှေတျဖို့ ကုလသမဂ်ဂ ပွငျဆငျနေ […]
100. အသက်မပြည့်သေးတဲ့ အိမ်ဖော်ခေါ်ယူမှုနဲ့ စင်ကာပူ အေဂျင်စီ ဒဏ်ရိုက်ခံရ	-MCN
ဖွင့်ရန်။ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အရ အသက် ၂၃ နှစ် ဖြစ်ပေမယ့် တကယ်မှာ အသက် ၁၃ နှစ်သာ ရှိသေးတဲ့ မြန်မာအိမ်အကူကို ခေါ်ယူမှုနဲ့ စင်ကာပူ အေဂျင်စီတစ်ခုဟာ ဒဏ်ငွေ အရိုက်ခံလိုက်ရပါတယ်။ ဘန်ဒင်မီယာ လမ်းရှိ လူသားစွမ်းအင် ဝန်ကြီးဌာနမှာ မနှစ်က လက်ဗွေ ပုံနှိပ်တာနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါ အိမ်အကူ မိန်းကလေးရဲ့ အသက်အမှန် ပေါ်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်အကူ မိန်းကလေးကို ခေါ်ယူခဲ့တဲ့ ဗစ်စတာ အလုပ်အကိုင် ရှာဖွေရေး လုပ်ငန်းပိုင်ရှင် ခိုစီတီယန် (၃၅ နှစ်) ကို မနေ့က ဇူလိုင် ၁၂ ရက်နေ့မှာ ဒဏ်ငွေ စင်ကာပူ ဒေါ်လာ ၅ ထောင် ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> အသကျမပွညျ့သေးတဲ့ အိမျဖျောချေါယူမှုနဲ့ စငျကာပူ အဂေငျြစီ […]
99. ဆွစ်ဇာလန် ကွင်းလယ်လူ ရှာကွီရီကို လီဗာပူအသင်း ပေါင် ၁၇ သန်းကျော်နဲ့ ခေါ်မယ်	-MCN
ဖွင့်ရန်။ လီဗာပူအသင်းဟာ ဆွစ်ဇာလန်နဲ့ စတုတ်စီးတီး ကွင်းလယ်လူ ရှာကွီရီကို ခေါ်ယူဖို့ သဘောတူညီမှု ရရှိသွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ လီဗာပူအသင်းဟာ ရှာကွီရီကို ပြောင်းရွှေ့ကြေး ပေါင် ၁၃ ဒသမ ၇ သန်းနဲ့ ခေါ်ယူဖို့ သဘောတူညီမှု ရရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရှာကွီရီဟာ လာဇီယိုအသင်းရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှု ခံရပေမယ့် လီဗာပူအသင်းကိုသာ ပြောင်းဖို့ စိတ်အားထက်သန်နေပြီး ဒီနေ့ ဇူလိုင် ၁၃ ရက်မှာ ဆေးစစ်မှုတွေ ပြုလုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရှာကွီရီဟာ အေစီမီလန်၊ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်တို့ရဲ့ ကစားသမားဟောင်း ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့ဖလား ပြိုင်ပွဲမှာ ဆွစ်ဇာလန် အတွက် ခြေစွမ်းပြခဲ့သူတွေထဲက တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ရှာကွီရီဟာ လီဗာပူအသင်းမှာ ပုံမှန်ကစားခွင့်ရဖို့ မာနေး၊ ဆာလက်တို့နဲ့ အပြိုင်ကြိုးပမ်းရဖွယ် ရှိနေပါတယ်။ […]
98. တိုင်ဖွန်းမာရီယာကြောင့် တရုတ်မှာ လူ ၆ သိန်းကျော်ဘေးလွတ်ရာကို ပြောင်းထား	-MCN
ဖွင့်ရန်။ တရုတ်နိုင်ငံ ဖူဂျီအမ်ဒေသကို ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းက ဝင်တိုက်ခဲ့တဲ့ တိုင်ဖွန်း မာရီယာကြောင့် လူပေါင်း ၆ သိန်းကို ဘေးလွတ်ရာကို ရွှေ့ပြောင်းပေးထားရတယ်လို့ တရုတ်အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ လေတိုက်နှုန်းဟာ တစ်နာရီကို ကီလိုမီတာ ၁၅၀ နှုန်းဖြစ်ပြီး ငါးဖမ်းလှေတွေနဲ့ လမ်းတွေ ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ သတင်းတွေက ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဆန်ဒူ မြို့ရှိ ငါးကန် ၃ သောင်းကျော် ပျက်စီးခဲ့ပြီး နန်ဒီ မြို့မှာ အပင်ပေါင်း ၂ ထောင်ကျော် အမြစ်ကနေ ကျွတ်ပြီး လဲကျခဲ့ပါတယ်။ မုန်တိုင်းကြောင့် တရုတ်ပြည်နယ် အရှေ့ပိုင်းရှိ စာသင်ကျောင်းတွေ ပိတ်ထားရသလို အလုပ်ရုံတွေကိုလည်း ဆိုင်းငံ့ထားရတယ်လို့ တရုတ်သတင်းတွေက ဖော်ပြပါတယ်။ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> တိုငျဖှနျးမာရီယာကွောငျ့ တရုတျမှာ လူ ၆ သိနျးကြျောဘေးလှတျရာကို ပွောငျးထား တရုတျနိုငျငံ […]
97. ရန်ဂါတီနဲ့ ကောက်ဘဇားခရိုင်မှာ မြေပြိုလို့ ၁၂ ဦးသေ	-MCN
ဖွင့်ရန်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံ၊ ရန်ဂါမတီနဲ့ ကောက်ဘဇားမှာ မနေ့က ဇွန်လ ၁၂ ရက်နေ့က မိုးသည်းထန်ပြီး မြေပြိုတဲ့အတွက် သေဆုံးသူ အနည်းဆုံး ၁၂ ဦး ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကောက်ဘဇားမှာ သေဆုံးတဲ့ ၂ ဦးအနက် တစ်ဦးက အူကီယာ ဧရိယာ၊ ဂျမ်တိုလီစခန်းရှိ ဘင်္ဂါလီ မွတ်စလင် ဒုက္ခသည်တစ်ဦးဖြစ်သူ မိုဟာမက် အလီ (၂၀ နှစ်) ဖြစ်တယ်လို့ ဒါကာ ထရီဗျူး သတင်းစာက ဖော်ပြပါတယ်။ အလီဟာ သူ့တဲထဲမှာ ထိုင်နေစဉ် မြေပြိုလို့ အမြစ်ကျွတ်လာတဲ့ သစ်ပင်က သူ့တဲကို ပိမိပြီး သေဆုံးတာ ဖြစ်တယ်လို့ အူကီယာ ရဲစခန်းက ပြောပါတယ်။ နောက်တစ်ဦးက ကောက်ဘဇားနေ ဘာရှာ မီယာ (၃၅ နှစ်) ဖြစ်ပါတယ်။ […]
96. မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကလေးလုပ်သား ၁၂ သိန်း ရှိနေ	-MCN
ဖွင့်ရန်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အသက် ၅ နှစ်ကနေ ၁၇ နှစ် အကြား ကလေးသူငယ် ဦးရေ ၁၂ သန်းရှိတဲ့အနက် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တဲ့ ၁၂ သိန်းကျော်ဟာ ကလေးလုပ်သားတွေ ဖြစ်နေတယ်လို့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ့ (ILO) က ကြေညာပါတယ်။ မနေ့က ဇွန်လ ၁၂ ရက်နေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ နိုင်ငံတကာ ကလေးလုပ်အား ပပျောက်ရေးနေ့မှာ ထုတ်ပြန်တဲ့ ILO ရဲ့ ကြေညာချက်မှာ ကလေးလုပ်သား ၆ သိန်းလောက်က အသက်အန္တရယ် ကြုံရနိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ကိုင်နေကြရကြောင်း၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု၊ ပညာဆက် သင်ခွင့်မရမှုနဲ့ မိသားစုကို ထောက်ပံ့ဖို့ အလုပ်လုပ်နေကြရတာ ဖြစ်ပြီး ဘေးအန္တရာယ် ရှိတာကိုလည်း မသိနိုင်ကြဘူးလို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ကလေးလုပ်သားတွေဟာ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်၊ စားသောက်ဆိုင်၊ […]
95. မြန်မာနဲ့ ဆက်လက် ညှိနှိုင်းဆောက်ရွက်ဖို့ UNHCR ကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အကြံပြု	-MCN
ဖွင့်ရန်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ လုံခြုံပြီး ဘင်္ဂါလီ မွတ်စလင် ဒုက္ခသည်တွေ အဆက်မပြတ် နေရပ်ပြန်နိုင်ရေး ဖန်တီးနိုင်ရေး မြန်မာအစိုးရနဲ့ ဆက်လက်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့ ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး (UNHCR) ကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက အကြံပေးခဲ့ပါတယ်။ UNHCR ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဌာနေကိုယ်စားလှယ် ဂျိမ်းစ် လင့်ခ်ျက UNHCR, UNDP နဲ့ မြန်မာအစိုးရတို့ နားလည်မှု စာချွန်လွှာရေးထိုးတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြည်နယ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မက်ဒ် ရှာရီယာ အလမ်ကို အစီရင်ခံစဉ် အခုလို အကြံပေးခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ ဒေးလီးစတား သတင်းဌာနက ဖော်ပြပါတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံက ဘင်္ဂါလီ ဒုက္ခသည်တွေ နေရပ်ပြန်ရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတွက် UNHCR နဲ့ နားလည်မှု စာချွန်လွှာ ၂ ခု ရေးထိုးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> […]
94. ဂျပန်၊ တရုတ်၊ တောင်ကိုရီးယား ဗီဇာစနစ်တွေကို ဖြေလျှော့ပေးမယ်	-MCN
ဖွင့်ရန်။ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ အာဆီယံ+၃ နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ ဂျပန်၊ တရုတ်၊ တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံတွေက ဧည့်သည်တွေ ပိုမိုဝင်ရောက်လာစေဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး ဗီဇာစနစ်တွေကို ဖြေလျှော့ရေး စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီး ဖြစ်တယ်လို့ ဒုတိယ သမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူက ပြောပါတယ်။ နေပြည်တော်မှာ မနေ့က ဇွန်လ ၁၂ ရက်မှာ ကျင်းပတဲ့ မြန်မာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်း ကွန်ဖရင့် – ၂၀၁၈ ဖွင့်ပွဲမှာ ဒုတိယ သမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူက ပြောသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကို ဥရောပနိုင်ငံသားတွေ ဝင်ရောက်မှုကတော့ နည်းနေသေးတယ်လို့လည်း သူက ပြောပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကို ခရီးသည် အများဆုံး လာရောက်တဲ့ နိုင်ငံတွေကတော့ အရှေ့တိုင်းနိုင်ငံတွေမှာ တရုတ်၊ ဂျပန်၊ ကိုရီးယားနဲ့ ထိုင်းတို့ ဖြစ်ပြီး အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ အမေရိကန်၊ ပြင်သစ်၊ ဗြိတိန်နဲ့ […]
93. ရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့် စေတုတ္တရာ-ငဖဲ ကားလမ်းပိုင်း ပျက်စီး	-MCN
ဖွင့်ရန်။ မကွေးတိုင်း၊ စေတုတ္တရာ မြို့နယ် အတွင်းမှာ ဇွန်လ ၉ ရက်ကနေ ၁၂ ရက်အထိ မိုးဆက်တိုက် ရွာသွန်းပြီး ရေကြီးရေလျှံတဲ့အတွက် စေတုတ္တရာ-ငဖဲ လမ်းပိုင်း ပျက်စီးပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ပြတ်တောက်နေပါတယ်။ ကျောက်ဖူးကျေးရွာ ရေရှောင် လူသွားလမ်း ပျက်စီးပြီး စေတုတ္တရာ-ငဖဲ ကားလမ်း ထမင်းချက် ကျေးရွာအနီး ရေပြွန်ပျက်စီးတဲ့အတွက် လမ်းအကျယ် ပေ ၅၀ ခန့် ပျက်စီးပြီး အနက် ၁၀ ပေရှိ လမ်းပြတ်တောက်မှု ဖြစ်ပွားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ရေသောင်ကျေးရွာ အနောက်ဘက် ကျေးရွာတွင်းလမ်း ပေ ၂၀၀ ခန့် ပျက်စီးပါတယ်။ ထီးချောင်း ရေတိုက်စားမှုကြောင့် ကမ်းပါးအရှည် ပေ ၄၀၀ ပျက်စီးတဲ့အတွက် လူနေအိမ်နဲ့ ၁၀ ပေခန့်သာ ကျန်ရှိပြီး လူနေအိမ် […]
92. မြန်မာနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ညှိနှိုင်း ကင်းလှည့်	-MCN
ဖွင့်ရန်။ မြန်မာနိုင်ငံ နယ်ခြားစောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်ခြားစောင့်တပ်တို့ မိမိတို့နိုင်ငံ အသီးသီးအတွင်းရှိ နယ်စပ်ခြံစည်းရိုး လမ်းအတိုင်း နှစ်နိုင်ငံ နှစ်ဘက်ညှိနှိုင်းပြီး မြေပြင်လှည့်ကင်း ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ နှစ်နိုင်ငံ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာ မေလ ၂၇ ရက်နေ့၊ ဇွန်လ ၁၀ ရက်နေ့၊ ဇွန်လ ၁၁ ရက်နေ့တို့မှာ မြေပြင်လှည့်ကင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ကုန်းမြေနယ်နိမိတ်တွင် နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းချက်အရ ပူးပေါင်းညှိနှိုင်း ကင်းလှည့်မှုကို ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီမှာ ၁၄ ကြိမ်၊ မတ်လမှာ ၇ ကြိမ်၊ မေလမှာ ၁၆ ကြိမ်၊ ဇွန်လမှာ ၃ ကြိမ်၊ စုစုပေါင်း အကြိမ် ၄၀ နဲ့ ရေကြောင်း ကင်းလှည့်ခြင်းကိုလည်း နတ်မြစ်ကြောင်းအတိုင်း စုစုပေါင်း ၄ ကြိမ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> […]
91. ကော့ကရိတ်မြို့မှာ ရွှေဆိုင် အနုကြမ်းစီးသူကို ဖမ်းဆီး	-MCN
ဖွင့်ရန်။ ကရင်ပြည်နယ်၊ ကော့ကရိတ်မြို့ရှိ ဖြူစင်သန့် ရွှေဆိုင်မှာ ဇွန်လ ၁၀ ရက်နေ့က ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကို လူတစ်ဦးက သေနတ်နဲ့ ပစ်ခတ်ပြီး အနုကြမ်းစီးမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ ရဲတပ်ဖွဲ့က ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရာမှာ ကော့ကရိတ်မြို့နယ်၊ ဆိပ်ဖူးကုန်းရွာနေ အလား (ခ) ကျင်ဦး (ခ) အောင်ကျင်သိန်းကို ၃၆ နာရီအတွင်း ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။ အလားကို အမှုဖွင့် စစ်ဆေးနေပါတယ် >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ကော့ကရိတျမွို့မှာ ရှဆေိုငျ အနုကွမျးစီးသူကို ဖမျးဆီး ကရငျပွညျနယျ၊ ကော့ကရိတျမွို့ရှိ ဖွူစငျသနျ့ ရှဆေိုငျမှာ ဇှနျလ ၁၀ ရကျနကေ့ ဆိုငျပိုငျရှငျကို လူတဈဦးက သနေတျနဲ့ ပဈခတျပွီး အနုကွမျးစီးမှု ဖွဈပှားခဲ့ပါတယျ။ ရဲတပျဖှဲ့က ပွဈမှုကြူးလှနျသူကို စုံစမျးစဈဆေးရာမှာ ကော့ကရိတျမွို့နယျ၊ ဆိပျဖူးကုနျးရှာနေ အလား (ခ) ကငျြဦး […]
90. ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကို ဦးလှဆွေ တောင်းပန်	-MCN
ဖွင့်ရန်။ မေလ ၁၇ ရက်နေ့ထုတ် Bullet News Journal မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ မှားယွင်း သုံးသပ် ဖော်ပြခဲ့တဲ့အတွက် ဦးလှဆွေက ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကို တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။ “၂၀၁၈ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ အကြို ဟောကိန်း ဘုလက် မှာတမ်း” ဆောင်းပါးမှာ ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ဘတ်ဂျက် လျာထားငွေကိစ္စ၊ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး အရည်အချင်းကိစ္စ စတာတွေကို မှားယွင်း သုံးသပ် ဖော်ပြတဲ့အတွက် ဇွန်လ ၁၂ ရက်နေ့မှာ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က ဆောင်းပါးရှင် ဦးလှဆွေကို ခေါ်ယူတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ ဦးလှဆွေက ဆောင်းပါးပါ မှားယွင်းဖော်ပြချက်တွေကို တောင်းပန်ခဲ့ပြီး ဇွန်လ ၁၄ ရက်နေ့ထုတ် ဂျာနယ်မှာ တောင်းပန်စာ […]
89. မြန်မာ့စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးမှု ၂၀၁၈ မှာ ၇ ရာခိုင်နှုန်း တိုးမြှင့်ဖို့ မျှော်မှန်း	-MCN
ဖွင့်ရန်။ အရှေ့အာရှနဲ့ ပစိဖိတ်ဒေသတွေမှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေး အခြေအနေ တဖြည်းဖြည်း ဖွံ့ဖြိုးလာပြီး စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှု ရာခိုင်နှုန်းကို ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်မှာ ၆ ဒသမ ၇ ရာခိုင်နှုန်းကနေ ၇ ရာခိုင်နှုန်းအထိ တိုးမြှင့်ရန် မျှော်မှန်းထားကြောင်း နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံး ဝန်ကြီး ဦးကျော်တင့်ဆွေက ပြောပါတယ်။ မနေ့က ဇွန်လ ၁၂ ရက်နေ့က ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ကျင်းပတဲ့ (၂၄) ကြိမ်မြောက် အာရှအနာဂတ်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာဆွေးနွေးပွဲ ဒုတိယမြောက်နေ့ ဖွင့်ပွဲမှာ ဝန်ကြီး ဦးကျော်တင့်ဆွေက ပြောသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီ အစိုးရအနေနဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ ပြုလုပ်နေကြောင်း၊ အထူးသဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို ဦးစားပေး လုပ်ငန်းတွေအဖြစ် ဆောင်ရွက်နေကြောင်းလည်း ပြောကြားသွားပါတယ်။ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> မွနျမာ့စီးပှားရေး […]
88. ဂူအတွင်းမှ ပြန်ကယ်ခဲ့သူတွေမှာပါတဲ့ နိုင်ငံမဲ့ သုံးဦးကို ထိုင်းနိုင်ငံသား ဖြစ်ခွင့်ပေးမယ်	-MCN
ဖွင့်ရန်။ ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေက နိုင်ငံမြောက်ပိုင်း လိုဏ်ဂူအတွင်းမှ ကယ်ဆယ်ခဲ့တဲ့ လူငယ် ၁၂ ဦးနဲ့ နည်းပြတို့ထဲက ၃ ဦးကို နိုင်ငံသား ခံယူခွင့်ပေးသွားမယ်လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။ ထိုင်းပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးက ပြန်ကယ်ခဲ့တဲ့ လူငယ် ၁၃ ဦးထဲမှာ ၃ ဦးက နိုင်ငံမဲ့ ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ထိုင်းအစိုးရက လိုအပ်တဲ့ စာရွက်စာတမ်းများ ကူညီပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး အဲဒီ လူငယ် ၃ ဦး ဟာ တစ်စုံတရာ ငြင်းဆိုမှု မရှိဘူးဆိုရင် ၆ လအတွင်း ထိုင်းနိုင်ငံသား ဖြစ်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရဖို့ တစ်ချို့ဆိုရင် ၁၀ ကျော်ကြာ စောင့်ဆိုင်းနေရပါတယ်။ ထိုင်း လူငယ်ဘောလုံးအသင်း နည်းပြနဲ့ အခြား ကလေးငယ်နှစ်ဦးတို့ဟာ ထိုင်းနိုင်ငံရောက်ရှိနေတဲ့ နိုင်ငံမဲ့ ၅ သိန်းထဲမှာ ပါဝင်နေတယ်လို့ […]
87. တရုတ်စီချွမ် ရှိ ဓာတုစက်ရုံ တစ်ခုမှာပေါက်ကွဲမှုဖြစ် ၂၀ နီပါးသေဆုံး	-MCN
ဖွင့်ရန်။ တရုတ်နိုင်ငံ စီချွမ်မြိုမှာ ဇူလိုင် ၁၂ ရက်နေ့က ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့လို့ လူပေါင်း ၁၉ ဦးသေဆုံးပြီး ၁၂ ဦးဒဏ်ရာရသွားခဲ့ပါတယ်။ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာ ဟာ စီချွမ်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ရီဘင် ဟန်ဒါ နည်းပညာ ကုမ္ပဏီရဲ့ ဓါတုစက်ရုံမှာဖြစ်တယ်လို့ သတင်းတွေကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်စက်ရုံဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးမီးခိုးငွေ့များပျံနှံနေခဲ့ပြီး ညနေ ၆ နာရီဝန်းကျင်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းကိုအတိကျမသိသေးဘဲစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ စက်ရုံဟာ ဆေးဝါး နဲ့ အစားစာတွေ ထုတ်လုပ်တဲ့စက်ရုံ ဖြစ်ပါတယ်။ စက်ရုံ သုံးထပ် အဆောက်အဦးမှာ မီးလောင်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ပြီး သံမဏိ ဖရိန်တွေ ပြုတ်ကျခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တုန်းကလည်း အခုလို ဓာတုသိုလှောင်ရုံတစ်ခုပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားခဲ့လို့ လူပေါင်း ၁၇၃ ဦး သေဆုံခဲ့ဖူးပါတယ်။ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> တရုတျစီခြှမျ ရှိ ဓာတုစကျရုံ တဈခုမှာပေါကျကှဲမှုဖွဈ ၂၀ […]
86. ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ပြစ်ဒဏ်ခံဖို့ နိုင်ငံ ပြန်လာ	-MCN
ဖွင့်ရန်။ ရာထူးမှ ပြတ်သွားခဲ့တဲ့ ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း နဝတ်ရှာရစ် ဟာ ထောင်ဒဏ် ၁၀ နှစ်ပြစ်ဒဏ်ခံဖို့ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကို ပြန်လာခဲ့ကြောင်း သတင်းတွေကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ရှာရစ်နဲ့ သူ့သမီးဖြစ်သူတိုဟာ ထောင်ဒဏ်ကျခံဖို့ ဗြိတန်နိုင်ငံမှ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ ကို ပြန်ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပါကစ္စတန် ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဟာ အကျင့်ပျက်လာဘ်စားမှုတွေကြောင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးခံရပြီး ရာထူးမှ ဖြုတ်ချခံရသူဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့အမူကို ဆက်လက်စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ရာ ပါကစ္စတန်တရားရုံးက ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်မှာ ထောင်ဒဏ် ၁၀ နှစ် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ သူနဲ့အတူ သမီးဖြစ်သူနဲ့ သမက်ဖြစ်သူတို့လည်း ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံရပါတယ်။ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ပါကစ်စတနျဝနျကွီးခြုပျဟောငျး ပွဈဒဏျခံဖို့ နိုငျငံ ပွနျလာ ရာထူးမှ ပွတျသှားခဲ့တဲ့ ပါကစ်စတနျဝနျကွီးခြုပျဟောငျး နဝတျရှာရဈ ဟာ ထောငျဒဏျ ၁၀ နှဈပွဈဒဏျခံဖို့ ပါကစ်စတနျနိုငျငံကို ပွနျလာခဲ့ကွောငျး သတငျးတှကေဖျောပွခဲ့ပါတယျ။ ရှာရဈနဲ့ သူ့သမီးဖွဈသူတိုဟာ […]
85. မူးယစ်ဆေးရောင်းသူနဲ့ ဘင်္ဂါလီ မွတ်စလင် အလောင်း နှစ်လောင်း တွေ့ရှိ	-MCN
ဖွင့်ရန်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ၊ ကောက်ဘဇား၊ တက္ကနတ်ဖ်မှာ ဘင်္ဂါလီ မွတ်စလင် ဒုက္ခသည် အလောင်း တစ်လောင်း အပါအဝင် အလောင်း နှစ်လောင်း တွေ့ရှိရတယ်လို့ ရဲက သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ တစ်ဦးက ရှမ်ရှူး ဟူဒါ (၂၇ နှစ်) ဖြစ်ပြီး သူဟာ ရဲက အလိုရှိနေတဲ့ ထိပ်တန်း မူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းဝယ်သူ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ဦးက ရာဟင် အူလာ (၃၀ နှစ်) ဖြစ်ပြီး တက္ကနတ်ဖ်ရှိ လေဒါ ဒုက္ခသည်စခန်းမှာ နေထိုင်လေ့ရှိသူ ဖြစ်တယ်လို့ တက္ကနတ်ဖ် ရဲစခန်းက ပြောပါတယ်။ သူတို့ နှစ်ယောက် အလောင်း ရေထဲ မျောပါလာတာကို လေဒါ ရဲစခန်းက ရဲတပ်ဖွဲ့တွေ ကင်းလှည့်စဉ် တွေ့ရှိခဲ့ကြတာ ဖြစ်တယ်လို့ ဒေးလီးစတား သတင်းက ဖော်ပြပါတယ်။ […]
84. ပင်လုံညီလာခံ တက်ရောက်တဲ့ ‘ဝ’ ခေါင်းဆောင် နှစ်ဦး ဆေးကုသမှု ခံယူရ	-MCN
ဖွင့်ရန်။ ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ – (၂၁) ရာစု ပင်လုံ တတိယအစည်းအဝေး တက်ရောက်နေတဲ့ UWSA ‘ဝ’ အဖွဲ့ ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးပေါက်ယူယိ နဲ့ ပြင်ပဆက်ဆံရေး ဌာနကြီးမှူး ဦးကျောက်ကော်အမ်းတို့ဟာ ကျန်းမာရေး အနည်းငယ် ချွတ်ယွင်းတဲ့အတွက် ဆေးကုသမှု ခံယူခဲ့ရပါတယ်။ သူတို့ နှစ်ဦးဟာ နေပြည်တော်ရှိ ခုတင်(၁၀၀၀)ဆံ့ အထွေထွေရောဂါကု ဆေးရုံကြီးမှာ တက်ရောက် ဆေးကုသမှု ခံယူရတာဖြစ်ပြီး မနေ့က ဇူလိုင် ၁၃ ရက်မှာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က သွားရောက် တွေ့ဆုံ အားပေးစကား ပြောခဲ့ပါတယ်။ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ပငျလုံညီလာခံ တကျရောကျတဲ့ ‘ဝ’ ခေါငျးဆောငျ နှဈဦး ဆေးကုသမှု ခံယူရ ပွညျထောငျစု ငွိမျးခမျြးရေးညီလာခံ – (၂၁) ရာစု […]
83. မလေးရှားမှာ မြန်မာတစ်ဦး လူကုန်ကူးမှုနဲ့ ထောင် ၃ နှစ်ကျ	-MCN
ဖွင့်ရန်။ မလေးရှားနိုင်ငံမှာ မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ဦးဟာ လူ ခြောက်ဦးကို လူကုန်ကူးတယ်ဆိုတဲ့ ပြစ်မှုနဲ့ ထောင်ဒဏ် သုံးနှစ် ချမှတ်ခံရပါတယ်။ ဆိုင်းဘုတ် လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူ အောင်နိုင်စိုး (၃၄ နှစ်) ကို သူအဖမ်းခံရတဲ့ မနှစ်က ၂၀၁၇ ခုနှစ် မေလ ၉ ရက်က စပြီး ထောင်ဒဏ် သုံးနှစ် ကျခံစေဖို့ ဗဟိုတရားရုံး တရားသူကြီး အာမက် ရှာရီယာက အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသား ငါးဦးနဲ့ အမျိုးသမီး တစ်ဦးတို့ကို မြန်မာနိုင်ငံကနေ မလေးရှားနိုင်ငံ၊ ဂျလန် အရူမူဂမ် ပီလိုင် မနှစ်က မေလ ၉ ရက်နေ့မှာ ခေါ်ယူခဲ့ကြောင်း အောင်နိုင်ဦးက ဝန်ခံခဲ့တယ်လို့ သည် စတား သတင်းက ဖော်ပြပါတယ်။ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> မလေးရှားမှာ […]
82. ထောင်နဲ့ချီတဲ့ ဘင်္ဂါလီ ဒုက္ခသည်တွေ အထည်ချုပ်စက်ရုံတွေမှာ အလုပ်လုပ်နေ	-MCN
ဖွင့်ရန်။ ထောင်နဲ့ချီတဲ့ ဘင်္ဂါလီ မွတ်စလင် ဒုက္ခသည်တွေဟာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ၊ စစ်တကောင်းမြို့ရှိ အထည်ချုပ် စက်ရုံတွေမှာ အလုပ်လုပ်နေတယ်လို့ စုံစမ်းလေ့လာမှု တစ်ရပ်က ဖော်ပြပါတယ်။ WWD သတင်းဂျာနယ်ရဲ့ လေ့လာချက်အရ ဘင်္ဂါလီ ဒုက္ခသည်တွေဟာ အထည်ချုပ် စက်ရုံတွေမှာ အလုပ်ရှာခဲ့ကြပြီး သူတို့ ဘယ်သူဘယ်ဝါ ဆိုတာကို အလုပ်ရှင်နဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တွေ မသိအောင် နေနေရတယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ လုပ်ခကို ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက် လျော့နည်းပြီး ရပေမယ့် ဒုက္ခသည်တွေ အလုပ်လုပ်ခွင့် မရှိတာကြောင့် အလုပ်ပြုတ်ပြီး အဖမ်းခံရမယ့် အန္တရာယ်လည်း ရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်။ ဆစ်ဒီကူ ချောင်ဒူရီဆိုသူ ဒုက္ခသည် အလုပ်သမားက သူ အလုပ်လုပ်နေတာ ၃ နှစ် ရှိပြီ ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ သူဘယ်သူဆိုတာ လျှို့ဝှက်ထားရကြောင်း၊ ဒုက္ခသည်တွေကို အလုပ်လုပ်ခွင့် ပါမစ်ပေးရင် […]
81. ချားလ်စ်မင်းသားတို့ ခရီးစဉ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံကို မလာဖို့ သတိပေးခံခဲ့ရ	-MCN
ဖွင့်ရန်။ ဗြိတိန် အိမ်ရှေ့မင်းသား ချားလ်စ်နဲ့ ဇနီး ကာမီလာ ဘောင်းစ် တို့ရဲ့ မနှစ်က ၂၀၁၇ ခုနှစ် အရှေ့တောင်အာရှ ခရီးစဉ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံကို မသွားဖို့ သတိပေးခံခဲ့ရတယ်လို့ အိက်စ်ပရက်စ် သတင်းဌာနက ဖော်ပြပါတယ်။ ချားလ်စ်နဲ့ ကာမီလာ ဘောင်းစ်တို့ရဲ့ အရှေ့တောင်အာရှ ၁၁ ရက်ကြာ ခရီးဟာ အကုန်အကျ အလွန်များတဲ့ ခရီးစဉ် ဖြစ်ခဲ့ပြီး သူတို့ဟာ အိန္ဒိယ၊ မလေးရှား၊ ဘရုနိုင်းနဲ့ စင်ကာပူကို သွားရောက်ခဲ့ပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးစဉ်ကိုတော့ နိုင်ငံရေး အခြေအနေကြောင့် ချန်ထားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ တော်ဝင် မိသားစုရဲ့ ခရီးစဉ်ကို ဗြိတိန် နိုင်ငံခြားရေးရုံးက စီစဉ်တာ ဖြစ်ပြီး ခရီးစဉ် မတိုင်ခင် နိုင်ငံခြားရေးရုံးက နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးကို သုံးသပ်ခဲ့တယ်လို့ ပေါက်ကြားလာတဲ့ […]
80. မြန်မာလုပ်သားတွေ ဂျပန်သွားရောက် အလုပ်လုပ်ဖို့ ခက်ခဲနေဆဲ (ရုပ်/သံ)	-MCN
#ပြည်တွင်းသတင်း	(3d ago)
ဖွင့်ရန်။ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ လုပ်သားလိုအပ်ချက်တွေမြှင့်တက်နေပေမယ့် မြန်မာလုပ်သားတွေခေါ်ယူရမှာ အခက်အခဲတွေ ရှိနေသေးတယ်လို့ ဂျပန်လုပ်ငန်းရှင်တွေက ပြောပါတယ်။ ဒီသတင်း MCN သတင်းထောက် ကေသွယ်က ပေးပို့ထားပါတယ်။ ဂျပန်ုနိင်ငံမှာ လုပ်သားလိုအပ်ချက်တွေအများအပြားရှိနေတဲ့အတွက် နိုင်ငံခြားသားလုပ်သားတွေကို အများအပြားခေါ်ယူနေတာပါ။ ဒီလိုခေါ်ယူရာမှာ မြန်မာလုပ်သားတွေ ခေါ်ယူမှုတွေမြင့် တက်လာပေမယ့် လက်တွေ့မှာ မြန်မာနိုင်ငံသား အလုပ်သင်လုပ်သား ခေါ်ယူမှုတွေမှာ အခက်အခဲတွေရှိနေသေးတယ်လို့ ဂျပန်နိုင်ငံသား လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးကပြောပါတယ် ။ Sound Bite MR .HIROKI TAKAHASHI ဂျပန်နိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင် ဒါအပြင် မြန်မာလုပ်သားတွေကို အလုပ်သင်လုပ်သားတွေအဖြစ်ခေါ်ယူရမှာ အခြားနိုင်ငံခြားသားတွေခေါ်ယူ တဲ့စနစ်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုခေါ်ယူတဲ့စနစ် မတူတဲ့ အခြေအနေဟာလည်း မြန်မာလုပ်သားတွေခေါ်ယူဖို့ အဟန့်အတားတွေဖြစ်နေတာပါ။ လက်ရှိ မြန်မာလုပ်သားတွေအတွက် ပြည်တွင်းမှာ လုပ်ခလစာ နိမ့်းပါးနေတဲ့အတွက် ဂျပန်နိုင်ငံကို သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်မှုတွေ မြင့်တက်နေတာဖြစ်ပါတယ် ။ Sound Bite […]
79. NCA မှာ မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့ ပါဖို့ နည်းလမ်းရှာနေပြီ (ရုပ်/သံ)	-MCN
ဖွင့်ရန်။ ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင်လုံဒုတိယနေ့မှာ ပြည်ထောင်စုသဘောတူစာချုပ် အစိတ်အပိုင်း အဖြစ်လာမယ့် အချက် ၁၄ ကိုအတည်ပြုနိုင်ဖို့ NCA မထိုးရသေးတဲ့ မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေပါဝင် ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီသတင်းကို MCN သတင်းထောက် မောင်ထက် ကပေးပို့ထားပါတယ်။ နေပြည်တော်မှာ ကျင်းပနေတဲ့ ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင်လုံ ဒုတိယနေ့မှာ ပြည်ထောင်စုသဘောတူစာချုပ် အစိတ်အပိုင်း အဖြစ်အတည်ပြုနိုင်ဖို့ တင်သွင်းထားတဲ့ အချက် ၁၄ ချက်ကို သက်ဆိုင်ရာအစုအဖွဲ့လိုက် ဆွေးနွေးမှုတွေ ပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပြီး မြောက်ပိုင်းကအဖွဲ့တွေ ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ် ။ လက်ရှိမှာ မြောက်ပိုင်း ၇ ဖွဲ့နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်း စဉ်မှာပါဝင်ဖို့ တိုက်တွန်းထားပြီး ဒီတိုက်တွန်းချက်ဟာ စိတ်ရင်းစေတနာမှန်နဲ့ တိုက်တွန်းတာလို့ ယူဆမိတဲ့အတွက် NCA မှာပါဝင်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းကိုရှာဖွေသွားမယ်လို့ KIO အဖွဲ့ရဲ့ ဒုတိယခေါင်းဆောင် […]
78. လူငယ်တွေရဲ့ အတွေးအခေါ်တွေ အပါယ်ခံဖြစ်နေဆဲ (ရုပ်/သံ)	-MCN
ဖွင့်ရန်။ နိုင်ငံအတွက် အကျိုးရှိမယ့် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား လူငယ်တွေရဲ့ အတွေးအခေါ်အကြံဥာဏ်တွေကို တာဝန်ရှိသူတွေက အသိအမှတ်ပြုလုပ်ဆောင်ပေးဖို့ ကျောင်းသားလူငယ်တွေက မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ ဒီသတင်းကို MCN သတင်းထောက် မောင်ထက်က ပေးပို့ထားပါတယ်။ အစိုးရသစ်တက်လာပြီးနောက်ပိုင်း တက္ကသိုလ်တွေမှာ ကျောင်းသားတွေရဲ့ ဆွေးနွေးဟောပြောမှုတွေ နည်းပညာနဲ့ အတွေးအခေါ်ပြိုင်ပွဲတွေကို ပြုလုပ်လာပါတယ်။ ဒီပြိုင်ပွဲတွေက ထွက်ပေါ်လာတဲ့ လူငယ်တွေရဲ့ အကြံညဏ်တွေကို တာဝန်ရှိသူတွေဘက်က အသိအမှတ်ပြုလုပ်ဆောင်ပေးဖို့ ကျောင်းသားတွေက မျှော်လင့်နေတာပါ။ Soundbites-ကိုရဲလင်းအောင် (တတိယနှစ်၊လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာ၊ရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ်) အခုလို ကျောင်းသားလူငယ်တွေ ပါဝင်ဆွေးနွေးအကြံပြုတာတွေနဲ့ ပက်သက်ပြီး အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေဘက်က သဘောထားကို မသိရပေမယ့် ပုဂ္ဂလိက အဖွဲ့အစည်းတွေဘက်က ကျောင်းသားလူငယ်တွေ ဆွေးနွေးပြောဆိုအကြံပြုမှုတွေကို အသိအမှတ်ပြုလုပ်ဆောင်ပေးတာတွေ ရှိနေပါတယ်။ Soundbites-မမြမြတ်ချယ်ချယ် (Fifth Year Civil Enginerring၊မှော်ဘီနည်းပညာတက္ကသိုလ်) ဒါ့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံဟာ အစိုးရအပြောင်းအလဲမှာ ပညာရေးကဏ္ဍာကို မြင့်တာလာတာတွေ့ရသလို ကျောင်းသားလူငယ်တွေကို […]
77. လိပ်ကျရေတံခွန်ကို ခရီးသွားဇုန်အဖြစ် ဖော်ဆောင်မယ် (ရုပ်/သံ)	-MCN
ဖွင့်ရန်။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး သပိတ်ကျင်းမြို့နယ်ထဲက လိပ်ကျရေတံခွန်ကို ခရီးသွားဇုန်အဖြစ် အကောင်အထည်ဖော်သွားဖို့ ရှိနေပါတယ် ။ ဒီသတင်းကို MCN မုံရွာသတင်းထောက် တင်မာဆွေကပေးပို့ထားပြီး အောင်သူ ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၊ သပိတ်ကျင်းမြို့နယ်ထဲက လိပ်ကျကျေးရွာအနီးမှာ လိပ်ကျရေတံခွန်တည်ရှိတာဖြစ်ပြီး အရင်က လမ်းပါမ်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲတဲ့အတွက် လူသိ့နည်းနေတာဖြစ်ပေမယ့် အခုအခါလမ်းပါမ်း ဆက်သွယ်ရေး ကောင်းလာတဲ့အတွက် လူသိများလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာ အဲ့ဒီရေတံခွန်ဟာ လူအများစိတ်ဝင်စားတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အတွက် အထက်မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးသွားလုပ်ငန်းတစ်ခု ဖော်ဆောင်ပေးဖို့ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်သို့ တင်ပြထားတယ်လို့ ဒေသခံ တစ်ဦးကပြောပါတယ်။ Sound Bite——–ဦးမောင်ကြီး(ဒေသခံ) သပိတ်ကျင်းမြို့နယ်၊အုံးဇုံးအုပ်စု၊၀က်သေကျေးရွာ လက်ရှိမှာ လိပ်ကျရေတံခွန်ကို ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှူ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ်အကောင်အထည်ဖော် ဖို့ လုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ပေါ်လာပါက ဒေသခံတွေရဲ့ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေ ရရှိလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Sound Bite——–ဒေါက်တာအောင်နိုင်(ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်) သပိတ်ကျင်းမြို့နယ်၊ဇရက်ကွင်းကျေးရွာ […]
76. ကျောင်းသားပွဲတော် ၂၀၁၈ ကျင်းပ (ရုပ်/သံ)	-MCN
ဖွင့်ရန်။ လူငယ် တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်း စွမ်းဆောင်ရည်တွေကို ချပြနိုင်ဖို့ ကျောင်းသားပွဲတော် ၂၀၁၈ ကို ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ဒီသတင်းကိုတော့ MCN သတင်းထောက် မင်းပြည့်နိုင် ကပေးပို့ထားပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံက ကျောင်းသားလူငယ်တွေရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်း စွမ်းဆောင်ရည်တွေကို ချပြခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားပွဲတော် ၂၀၁၈ ကို ဇူလိုင်လ ၁၂ ရက်နေ့နဲ့ ၁၃ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့ မြန်မာကွန်ဗန်းရှင်းစင်တာ(MCC) မှာ ကျင်းပခဲ့တာပါ။ အင်းတာဗျူ အောင်ချမ်းမြင့် (ဒုဥက္ကဌ) ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းနည်းပညာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂ အနောက်ပိုင်းနည်းပညာတက္ကသိုလ်၊ သန်လျင်နည်းပညာတက္ကသိုလ်၊ မြန်မာနိုင်ငံရေကြောင်းပညာတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်၊ ဒဂုံတက္ကသိုလ်နဲ့ အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှု ပညာဒီဂရီကောလိပ်စတဲ့ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ (၇) ခုက ဦးဆောင်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဖျော်ဖြေမှုကဏ္ဍ၊ ဆွေးနွေးရေးကဏ္ဍ၊ တင်ပြမှုကဏ္ဍနဲ့ ပညာရေးကဏ္ဍ စတဲ့ ကဏ္ဍကြီး ၆ ခုနဲ့ […]
75. ၂၀၁၈ ခုနှစ်လူကုန်ကူးအစီရင်ခံစာမှာ မြန်မာ အဆင့်ကျဆင်း	-MCN
ဖွင့်ရန်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်လူကုန်ကူးအစီရင်ခံစာမှာ မြန်မာဟာ အခြေအနေဆိုးတဲ့ အဆင့်ရောက်သွားတာဟာ တပ်မတော်နဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေရဲ့ ကလေးစစ်သား စုဆောင်းမှုတွေကြောင့်လို့ TIP အစီရင်ခံစာ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ် လူကုန်ကူးမှုအစီရင်ခံစာအရ မြန်မာဟာ Tier2လုို့ခေါ်တဲ့ အဆင့်မှာ ရှိနေပြီး ၂၀၁၈ အစီရင်ခံစာအရ Tier3ထိ ပြန်လည်ကျဆင်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူကုန်ကူးတားဆီးကာကွယ်ရေးဆုိုင်ရာ အစီရင်ခံစာအရ အဆင့်သတ်မှတ်ချက် (၃)ခုပြီး အဆင့် (၁) ဖြစ်တဲ့ Tier 1 ကတော့ လူကုန်ကူးမှုကုို နှိမ်နှင်းရာမှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အနိမ့်ဆုံးစံသတ်မှတ်ချက်နဲ့ အံဝင်အောင်လ လုပ်နိုင်တဲ့ နိုင်ငံတွေ ကိုသက်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ် ။ အဆင့်(၂) ဖြစ်တဲ့ Tier2ကတော့ အနိမ့်ဆုံးစံသတ်မှတ်ချက်မမှီလုို့ စောင့်ကြည့်ခံရတဲ့ နုိုင်ငံတွေဖြစ်ပြီး […]
74. ထိုင်းလူငယ်တွေ ပိတ်မိနေတဲ့ လိုဏ်ဂူကို ပြတိုက်လုပ်မယ်	-MCN
#နိုင်ငံတကာသတင်း	(3d ago)
ဖွင့်ရန်။ ထိုင်းလူငယ်ဘောလုံးအသင်းမှ လူငယ် ၁၂ ဦးနဲ့နည်းပြတို့ သီတင်းပတ်နှစ်ပတ်ကြာ ပိတ်မိနေတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းလိုဏ်ဂူကို ပြတိုက် အဖြစ် လုပ်ဆောင်ဖို့ စီစဉ်နေပါတယ်။ အဆိုပါ ပြတိုက်အတွင်း ကလေးငယ်များကို ကယ်ဆယ်မှုလုပ်ခဲ့တာတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ခင်းကျင်းပြသ သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခုလိုမျိုးပြတိုက် လုပ်ရတာဟာ ထိုင်းနိုင်ငံအတွက် အဓိက ဆွဲဆောင်မှုတွေဖြစ်စေဖို့ ရည်ရွယ်တာလို့ ကယ်ဆယ်ရေး အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်က ပြောပါတယ်။ ကလေးငယ် အားလုံးနဲ့ နည်းပြတို့ကို ဇူလိုင် ၁၀ ရက်နေ့မှာ ရေကြီးနေတဲ့ လိုဏ်ဂူအတွင်းမှ ဘေးကင်းစွာနဲ့ ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကလေးငယ်တွေနဲ့ နည်းပြတို့ကို လက်ရှိအချိန်မှာဆေးရုံတင်ပို့ကာ ကျန်းမာရေး စစ်ဆေး ကုသနေပါတယ်။ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ထိုငျးလူငယျတှေ ပိတျမိနတေဲ့ လိုဏျဂူကို ပွတိုကျလုပျမယျ ထိုငျးလူငယျဘောလုံးအသငျးမှ လူငယျ ၁၂ ဦးနဲ့နညျးပွတို့ သီတငျးပတျနှဈပတျကွာ ပိတျမိနတေဲ့ ထိုငျးနိုငျငံမွောကျပိုငျးလိုဏျဂူကို […]
73. မြောင်းမြ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေ ပြည်သူတစ်ဦးကို ၆၆ (ဃ)နဲ့ တရားစွဲ	-MCN
ဖွင့်ရန်။ ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်နေ့က မြောင်းမြမြို့နယ် အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ ငါးမြင်းချောင်း ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွင်းကလေးကျေးရွာက ပြည်သူတွေနဲ့ သွားရောက် တွေ့ဆုံခဲ့ကြတဲ့ ဓာတ်ပုံကို Kaung Htet Linn အကောင့် ပိုင်ရှင်က ယူပြီးတင်ခဲ့တဲ့အအတွက် သူ့ကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ က ပုဒ်မ ၆၆ ဃ နဲ့ တရားစွဲဆို လိုက်ပါတယ်။ Kaung Htet Linn တင်ခဲ့တဲ့ပုံဟာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တွေလာရောက်တာကို ကျောင်းသားကလေးငယ် တွေ လက်ပိုက်ထားတဲ့ပုံကို ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့မျက်နှာကို ဖျက်ထားပြီး ခေတ်အဆက်ဆက် ကလေးတွေ အသုံးချခံဖြစ်နေတုန်းလား လူကြီးတွေလာတိုင်း လက်ကလေးပိုက် လက်အုပ်ချီနေရတုန်းလား ပြောင်းလဲချင် တာလား မပြောင်းလဲချင်တာလား ဆိုပြီး လူမှုကွန်ယက် ဖေ့ဘွတ်ခ် စာမျက်နှာမှာ တင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ။ အခုလို လူမှုကွန်ယက် […]
72. မောင်တောမြို့က ဥပဒေမဲ့နေထိုင်သူတွေကို ရှင်းလင်းရာ လက်ပစ်ဗုံးနဲ့ လက်နက်တွေ သိမ်းဆည်းရမိ	-MCN
ဖွင့်ရန်။ မောင်တောမြို့နယ်၊ သင်္ဘောကွေ့ကျေးရွာက မီးလောင်ပြင်မှာ ဥပဒေမဲ့ တဲအိမ်တွေ ဆောက်လုပ်ပြီး ၀င်ရောက်နေထိုင်သူတွေကို ဇူလိုင်လ ၉ ရက်နေ့က သက်ဆိုင်ရာက ဖယ်ရှားရှင်းလင်းခဲ့ရာ လက်ပစ်ဗုံး နဲ့ တုတ်၊ ဓား စတဲ့ လက်နက်တွေကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အဲဒီလို ဥပဒေမဲ့ နေထိုင်သူတွေရဲ့ စည်းရုံးဦးဆောင်နေသူ ရဲ့ နေအိမ်ကနေ စနက်တံပါ လက်ပစ်ဗုံးတလုံး၊ တုတ်၊ ဓား၊ လက်ကိုင်စကားပြောစက်များ၊ ကျည်ကာအကျီင်္၊ ကျည်ကာဖိုက်ဘာဦးထုပ်၊ ကင်မရာ ပစ္စည်း၊ ဆေးရုံသုံးပစ္စည်းများ၊ ကွန်ပျူတာနဲ့ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ ဖုန်းနဲ့ဆင်းကတ်တွေကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်။ မြို့နယ်အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနက ဖေဖော်ဝါရီ ၂၁ ရက်နေ့က ဥပဒေမဲ့ ဝင်ရောက်နေထိုင်သူတွေကို သက်ဆိုင်ရာက တရားဝင်ခွင့်ပြုချက် တစ်စုံတစ်ရာ မရရှိဘဲ နေထိုင်မှုမပြုရန် တားမြစ်ထားခဲ့ပြီး လိုက်နာမှု မရှိပါက […]
71. လူနာတင်ယာဉ် အသင်း ၅၀ ပူးပေါင်းပြီး စုပေါင်းကွန်ရက် ဖွဲ့စည်း (ရုပ်/သံ)	-MCN
#ပြည်တွင်းသတင်း	(4d ago)
ဖွင့်ရန်။ အရေးပေါ်အခြေအနေမှာ ပြည်သူတွေ အသက်အန္တရာယ်ကင်းစေဖို့ လူနာတင်ယာဉ် အသင်း ၅၀ ပူးပေါင်းပြီး စုပေါင်းကွန်ရက်ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ ဒီသတင်းကိုတော့ MCN သတင်းထောက် မြတ်မင်းသူက ပေးပို့ထားပါတယ်။ မြိတ်ခရိုင်အတွင်း မြို့နယ် ၄ မြို့နယ်က အရေးပေါ်လူနာတင်ယာဉ်တွေ စုပေါင်းပြီး ခရိုင်အတွင်းက ယာဉ်တိုက်မှုတွေရဲ့ အရေးပေါ်အခြေအနေမှာ ပြည်သူတွေ အသက်အန္တရာယ်ကင်းစေဖို့နဲ့ အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာကို လူနာတင်ယာဉ်တွေ အချိန်မှီရောက်ရှိလာစေဖို့ မြိတ်ခရိုင်အရေးပေါ် လူနာတင်ယာဉ်ကား အသင်း စုပေါင်းကွန်ရက်ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့တာပါ။ Sound Bite ဦးအောင်မြတ်သူ (အတွင်းရေးမှူး) မြိတ်ခရိုင် အရေးပေါ် လူနာတင်ယာဉ်ကား အသင်း စုပေါင်း ကွန်ရက် အဲဒီကွန်ရက်ထဲမှာ မြိတ်ခရိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ မြိတ်၊ ကျွန်းစု၊ ပုလောနဲ့ တနင်္သာရီမြို့နယ်က ပရဟိတလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ အရေးပေါ် လူနာတင်ယာဉ်အသင်းတွေ ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး အခုလို […]
70. ခွင့်ရက် နဲ့ အလုပ်ပိတ်ရက်ကို သိအောင် ရှင်းလင်းပေးဖို့ လိုအပ်နေ (ရုပ်/သံ)	-MCN
ဖွင့်ရန်။ ခွင့်ရက်နဲ့ အလုပ်ပိတ်ရက်အကြောင်းကို အလုပ်သမားတွေ သိအောင် အလုပ်ရှင်တွေက ရှင်းလင်းပေးဖို့ လိုနေတယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံစက်မှုလက်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းပေါင်းစုံ အလုပ်သမားသမဂ္ဂများ အဖွဲ့ချုပ်က ပြောပါတယ်။ ဒီသတင်းကို MCN သတင်းထောက် တင်မောင်ထွေးက ပေးပို့ထားပါတယ်။ အလုပ်သမား အများစုက ဥပဒေပါ ရပိုင်ခွင့်တွေဖြစ်တဲ့ ခွင့်ရက်နဲ့ အလုပ်ပိတ်ရက်အကြောင်း သိရှိနားလည်မှု အားနည်းနေတာကြောင့် အလုပ်ရှင်တွေဘက်က ရှင်းလင်းပေးဖို့ လိုအပ်နေတာပါ ။ အဲ့ဒီအတွက် အလုပ်သမားတွေ ခွင့်ရက်နဲ့ အလုပ်ပိတ်ရက်ဥပဒေဆိုင်ရာ အကြောင်းတွေကို သိရှိနားလည်အောင် မြန်မာနိုင်ငံစက်မှုလက်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းပေါင်းစုံ အလုပ်သမားသမဂ္ဂများ အဖွဲ့ချုပ်က ဇူလိုင်လ ၄ ရက်နေ့က လှိုင်သာယာမြို့နယ် စက်မှုဇုန်တွေမှာ စာရွက်ဖြန့်ဝေ လှုပ်ရှားမှု ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် ။ Soundbite ဒေါ်နွဲ့ယဉ်ဝင်း (လက်ထောက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး၊ မြန်မာနိုင်ငံစက်မှုလက်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းပေါင်းစုံ အလုပ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်) […]
69. ကျေးလက် အမျိုးသမီးတွေကို ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာတွေ အသိပေးမှု လုပ်ဆောင်မယ် (ရုပ်/သံ)	-MCN
ဖွင့်ရန်။ မြန်မာအမျိုးသမီးတွေကို အကာအကွယ်ပြုနိုင်တဲ့ ဥပဒေတွေကို ကျေးလက်ဒေသတွေအထိ အသိပညာ ပေးလုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ဆောင်သွားဖို့ ရှိနေပါတယ်။ ဒီသတင်းကိုတော့ MCN သတင်းထောက် မင်းပြည့်နိုင် က ပေးပို့ထားပါတယ်။ ကျေးလက်ဒေသတွေမှာရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ မိမိတို့ကိုအကာအကွယ်ပေးနေတဲ့ ဥပဒေတွေနဲ့ ပတ်သက် ပြီး သိရှိမှုအပိုင်းမှာ အားနည်းချက်တွေရှိနေတာပါ ။ အဲ့ဒီအတွက် ကျေးလက်ကအမျိုးသမီးတွေကို ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာတွေ အသိပညာပေးမှုတွေကို အာရှဖောင်ဒေးရှင်း နဲ့ ဒါန-ရှေ့ဆောင်မြန်မာအဖွဲ့အ စည်း တို့ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် ။ ဒေါ်မီကီကျော်မြင့် (အကြီးတန်းအစီအစဉ်နှင့်အစိုးရဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားရေး အရာရှိ) အာရှဖောင်ဒေးရှင်း (The Asia Foundation) ဒါအပြင် လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာ အမျိုးသမီးတွေကြုံတွေနေရတဲ့ သက်ငယ်မုဒိမ်နဲ့ပတ်သက်လို့ အထူးဥပဒေတစ်ရပ်ပြဌာန်းပေးဖို့ ကိုလည်းအရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကလုပ်ဆောင်နေတာပါ ။ သက်ငယ်မုဒိန်းမှုကို ကြီးလေးတဲ့ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်နိုင်ဖို့က လက်ရှိမှာ ခက်ခဲနေသေးတဲ့အတွက် အထူးဥပဒေတစ်ရပ်လို အပ်နေတယ်လို့ […]
68. ၂၁ ရာစု ပင်လုံညီလာခံကို တရုတ် အထူးကိုယ်စားလှယ် တက်ရောက်	-MCN
ဖွင့်ရန်။ နေပြည်တော်မှာ ဒီနေ့ ဇူလိုင် ၁၁ ရက်မှာ စတင်ကျင်းပတဲ့ ၂၁ ရာစု ပင်လုံညီလာခံ တတိယ အစည်းအဝေးကို တရုတ်နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ အာရှရေးရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် ဆွန် ဂေါင်ကျီယန် တက်ရောက်ပါတယ်။ မြန်မာအစိုးရရဲ့ ဖိတ်ကြားချက်အရ တက်ရောက်တာ ဖြစ်တယ်လို့ တရုတ်နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနက ပြောကြောင်း ချိုင်းနား သတင်းမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ငြိမ်းချမ်းဖြစ်စဉ်အတွက် အားထုတ်မှု၊ အမျိုးသား ပြန်လည် ရင်ကြားစေ့ရေး လုပ်ဆောင်မှုတွေကို ထောက်ခံကြောင်း၊ အောင်မြင်မယ်လို့လည်း မျှော်လင့်ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြောခွင့်ရှိသူ ဟွာ ချွန်ယင်က ပြောပါတယ်။ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ၂၁ ရာစု ပငျလုံညီလာခံကို တရုတျ အထူးကိုယျစားလှယျ တကျရောကျ နပွေညျတျောမှာ ဒီနေ့ ဇူလိုငျ ၁၁ […]
67. သေနတ် တစ်ချက် ဖောက်လိုက်ရင် သဘောတူ ထားတာတွေ ပျက်ပြယ်	-MCN
ဖွင့်ရန်။ ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ သေနတ်တစ်ချက် ဖောက်လိုက်ရင် သဘောတူထားတာတွေ ပျက်ပြယ်တယ်လို့ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောပါတယ်။ ဒီနေ့ နေပြည်တော်မှာ ကျင်းပတဲ့ (၂၁) ရာစု ပင်လုံ တတိယ အစည်းအဝေးမှာ အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဗဟိုဌာန ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်း ပဋိပက္ခတွေရဲ့ ဇစ်မြစ်ဟာ နိုင်ငံရေး ပြဿနာ ဖြစ်တယ်လို့လည်း သူက ပြောသွားပါတယ်။ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ကတော့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တွေ အနေနဲ့ အောက်ခြေက ကိုယ့်လူကိုယ် ထိန်းကြဖို့နဲ့ အဓိပ္ပာယ်မဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေ မပေးဖို့ သူ့ရဲ့ အဖွင့်မိန့်ခွန်းမှာ ပြောသွားပါတယ်။ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> […]
66. အင်္ဂလန် ဘောလုံးအသင်းနိုင်ရင် အားလပ်ရက်ပေးဖို့ တောင်းဆို	-MCN
#နိုင်ငံတကာသတင်း	(4d ago)
ဖွင့်ရန်။ ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲမှာ အင်္ဂလန် ဘောလုံးအသင်းသာ နိုင်ခဲ့ရင် လာမယ့် တနင်္လာနေ့ကို ဘဏ်တွေရဲ့ ပိတ်ရက်အဖြစ် သတ်မှတ်ပေးဖို့ လူ ၂ သိန်းကျော်က လက်မှတ်ရေးထိုး တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဗြိတိန်နိုင်ငံ၊ ရှက်ဖီးလ်ဒ်နေ လိုင်ယမ် ဘက်ဆန်က လက်မှတ်ရေးထိုးရေးကို လှုံ့ဆော်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူက ရယ်စရာ အနေနဲ့ လက်မှတ်ရေးထိုး တောင်းဆိုတဲ့ လှုံ့ဆော်မှုကို လုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ထောက်ခံသူ များပြားလာပြီးတဲ့နောက် တကယ်လို ဖြစ်လာတယ်လို့ လိုင်ယမ် ဘက်ဆန်က ပြောပါတယ်။ အသက် ၂၆ နှစ်အရွယ် ဘက်ဆန်က တကယ်လို့သာ ဘဏ်ပိတ်ရက်အဖြစ် သတ်မှတ်ပေးမယ်ဆိုရင် အင်္ဂလန်အတွက် သိပ်ကောင်းမှာပါ၊ လူတွေအတွက်လည်း အနိုင်ရမှုအတွက် ပျော်ရွှင်ပွဲဆင်နွှဲဖို့ အခွင့်အရေး ရလိမ့်မယ်လို့ ပြောပါတယ်။ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> အင်ျဂလနျ ဘောလုံးအသငျးနိုငျရငျ အားလပျရကျပေးဖို့ […]
65. Iron Man လိုဝတ်စုံ အမေရိကန်လေတပ်မှာ အသုံးပြုနိုင်ဖို့ စမ်းသပ်နေ	-MCN
ဖွင့်ရန်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု စင်စင်နတီ နည်းပညာတက္ကသိုလ်က အင်ဂျင်နီယာတွေဟာ လေတပ်သုတေသန ဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာ စွမ်းအင်သိုလှောင် ထားနိုင်တဲ့ ဝတ်စုံကို ထုတ်လုပ်ဖို့ ကာဘွန်နဲ့ စမ်းသပ်နေကြတာပါ။ သုတေသန ပညာရှင်တွေဟာ ရုပ်ရှင် ဇာတ်လမ်းထဲက ‘Iron Man’ ရဲ့ ဝတ်စုံလို ကာဘွန်အမျှင်တွေ ထွက်လာတဲ့ စွမ်းအားမျိုး ထုတ်နိုင်ပြီး စွမ်းအင်တွေထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့ ဝတ်စုံကို ထုတ်လုပ်ဖို့ စီစဉ်နေကြတာပါ။ ကာဘွန်တွေကို အပူပေးတဲ့အခါမှာ ရှည်လျားတဲ့အမျှင်တွေ ထွက်လာမှာ ဖြစ်ပြီး အဲ့ဒီအမျှင်နဲ့ စွမ်းအားမြင့် ဝတ်စုံကို ထုတ်လုပ်မှာပါ။ အဲ့ဒီက ဝတ်စုံက ထွက်လာတဲ့ စွမ်းအင်ဟာ ကိုယ်ရဲ့ ဖုန်းကိုတောင် အားပြန်သွင်းပေးနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လေယာဉ်မှူးဟာ ဒီဝတ်စုံကို ဝတ်ဆင်ထားရင် တိုက်လေယာဉ်တွေရဲ့ စွမ်းအားကိုတောင် ပြန်လည်ဖြည့် တင်းပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပေမဲ့ အဲ့ဒီလိုလုပ်ဆောင်ဖို့ အချိန်ကြာမြင့် […]
64. ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မြန်မာနိုင်ငံ လာမယ်	-MCN
ဖွင့်ရန်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မာမွတ် အလီဟာ ရခိုင်ပြည်နယ် အခြေအနေကို လေ့လာဖို့ မြန်မာနိုင်ငံကို လာရောက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ နေရပ်ပြန်သူတွေ လက်ခံရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အိမ်ယာချထားမှု၊ သက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ စတာတွေ လေ့လာဖို့ မကြာခင် သွားရောက်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနက ပြောကြောင်း ဘီဒီနယူးစ် သတင်းမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မာမွတ် အလီဟာ ARSA အကြမ်းဖက်သမားတွေက ဟိန္ဒူတွေကို သတ်ဖြတ်ကြောင်း ဖော်ပြထားတဲ့ နိုင်ငံတကာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် အဖွဲ့ (AI) ရဲ့ အစီရင်ခံစာကို ယုတ္တိမရှိဘူးလို့ လူသိရှင်ကြား ပြောဆိုခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး မွနျမာနိုငျငံ လာမယျ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ […]
63. မြန်မာနဲ့ လာအိုကို အမေရိကန်က ပြည်ဝင်ခွင့် ကန့်သတ်	-MCN
ဖွင့်ရန်။ အမေရိကန်ကနေ ပြည်နှင်ဒဏ် ပေးတဲ့သူတွေကို လက်ခံဖို့ ငြင်းဆန်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ လာအိုနိုင်ငံတို့ကို အမေရိကန်က ပြည်ဝင်ခွင့် ဗီဇာ ကန့်သတ်လိုက်ပါတယ်။ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုက ပြန်ပို့လိုတဲ့ နိုင်ငံသားတွေကို လက်ခံဖို့ မြန်မာနဲ့ လာအိုဟာ အကြောင်းပြချက်မဲ့ နှောင့်နှေးနေတယ်လို့ အမေရိကန် ပြည်တွင်း လုံခြုံရေးဌာနရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ဖော်ပြထားတယ်လို့ တိုင်းမဂ္ဂဇင်းက ရေးသားထားပါတယ်။ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးအဆင့်ကနေ ညွန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရာထူး အဆင့် အပါအဝင် အရာရှိကြီး အားလုံးနဲ့ သူတို့ရဲ့ မိသားစုဝင်တွေကို အလုပ်သဘောပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အလည်အပတ်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဗီဇာကန့်သတ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> မွနျမာနဲ့ လာအိုကို အမရေိကနျက ပွညျဝငျခှငျ့ ကနျ့သတျ အမရေိကနျကနေ ပွညျနှငျဒဏျ ပေးတဲ့သူတှကေို လကျခံဖို့ ငွငျးဆနျတဲ့ မွနျမာနိုငျငံနဲ့ […]
62. ငြိမ်းချမ်းရေး ရင်းမြစ် လိုတယ်လို့ တပ်ချုပ် ပြော	-MCN
ဖွင့်ရန်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ သဘာဝ သယံဇာတ ရင်းမြစ်တွေ ပေါကြွယ်ဝပေမယ့် ငြိမ်းချမ်းရေး ရင်းမြစ် လိုနေတယ်လို့ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က ပြောပါတယ်။ ဒီနေ့ ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက်နေ့ နေပြည်တော်မှာ ကျင်းပတဲ့ ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံ – (၂၁) ရာစု ပင်လုံ တတိယ အစည်းအဝေးမှာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က ပြောသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခွဲထွက်ရေးကို မပြောဖို့၊ ရွေးကောက်ပွဲကိုသာ ပြောဖို့နဲ့ အားသာချက်ဟာ တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေး စာချုပ် (NCA) ဖြစ်တယ်လို့လည်း ပြောသွားပါတယ်။ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ငွိမျးခမျြးရေး ရငျးမွဈ လိုတယျလို့ တပျခြုပျ ပွော မွနျမာနိုငျငံမှာ သဘာဝ သယံဇာတ ရငျးမွဈတှေ […]
61. နီပေါ လေကြောင်းလိုင်းက မြန်မာကို တိုးချဲ့ ပျံသန်းမယ်	-MCN
ဖွင့်ရန်။ နီပေါ လေကြောင်းလိုင်းက မြန်မာ၊ တရုတ်နဲ့ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံတို့ကို တိုးချဲ့ ပျံသန်းပြေးဆွဲမယ်လို့ သတင်းထုတ်ပြန် ထားပါတယ်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ် အကုန်မှာ လက်ရှိ ဝန်ဆောင်မှု ၈ ခုအပြင် A330-200 လေယာဉ်နဲ့ နေရာသစ် ၁၁ ခုကို တိုးချဲ့ ပျံသန်း ဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့ စီစဉ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တိုးချဲ့ ပျံသန်းပြေးဆွဲမယ့် အထဲမှာ ဂျပန်၊ တောင်ကိုရီးယား၊ ဆော်ဒီအာရေဗျ တို့ ပါဝင်ပါတယ်။ ၁၉၅၈ ခုနှစ်မှာ ရွိုင်ယယ် နီပေါ လေကြောင်းလိုင်းကို တည်ထောင်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ နီပေါ လေကြောင်းလိုင်း ကော်ပိုရေးရှင်းလို့ အမည်ပြောင်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> နီပေါ လကွေောငျးလိုငျးက မွနျမာကို တိုးခြဲ့ ပြံသနျးမယျ နီပေါ လကွေောငျးလိုငျးက မွနျမာ၊ […]
60. မြန်မာ တရားမဝင် ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား ၈ ဦး ဖမ်းမိ	-MCN
ဖွင့်ရန်။ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ကန်ချနဘူရီ၊ ဆိုင်ယော့ခ်ရှိ စစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာ မြန်မာ တရားမဝင် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား ၈ ဦးကို ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား ဥပဒေအရ ဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့ ဘန်ကောက်ပို့စ် သတင်းစာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ သူတို့ဟာ ဆန်ခလဘူရီနဲ့ မောင် ဒိစတြိတ်အကြား ဘတ်စ်ကားနဲ့ ခရီးသွားစဉ် ရပ်တန့်ရှာဖွေရာမှာ ဖမ်းမိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာ အလုပ်သမားတွေမှာ ခရီးသွားလာခွင့် အထောက်အထား တစ်ယောက်မှ မရှိခဲ့ပါဘူး။ စစ်ဆေးမှုအရ သူတို့ဟာ လအတော်ကြာ ကတည်းက ထိုင်းကို ရောက်နေပြီး အလုပ် လုပ်ကိုင်ခွင့် လက်မှတ်မရှိဘဲ အလုပ်ရှင်က အလုပ် လုပ်ခွင့်ပေးထားတာလို့ ပြောကြပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားတွေ အလုပ်သမား လက်မှတ်နဲ့ မှတ်ပုံတင် လုပ်ခွင့်ဟာ ဇွန်လ ၃၀ ရက်ကတည်းက ကုန်ဆုံးခဲ့ပြီ […]
59. ဂျပန်ရေကြီးမြေပြိုမှု သေဆုံးသူ ၁၆၀ နီးပါးအထိမြင့်တက်လာ	-MCN
ဖွင့်ရန်။ ဂျပန်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ဆိုးရွားလွန်းလှတဲ့ ရာသီဥတုအခြေအနေကြောင့် ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေ လုပ် ဆောင် နေတဲ့ ကြားက သေဆုံးသူ ၁၆၀ နီးပါးအထိ မြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ အခုမိုးရွာသွန်းမှုဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၃၆ နှစ်အတွင်း အဆိုးဝါးဆုံးအခြေအနေတစ်ခုလည်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ စစ်သား အင်အား ၇သောင်းခွဲ ၊ ရဟတ်ယာဉ် အစီး ၈၀ နီးပါး အသုံးပြုထား ပါတယ်။ ပျောက်ဆုံးနေသူတွေလည်း ၆၀ နီးပါးရှိပြီး မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့် ရေကြီးမြေပြိုမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်ကာ သေဆုံးသူများပြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ဂပြနျရကွေီးမွပွေိုမှု သဆေုံးသူ ၁၆၀ နီးပါးအထိမွငျ့တကျလာ ဂပြနျမှာ ဖွဈပှားခဲ့တဲ့ ဆိုးရှားလှနျးလှတဲ့ ရာသီဥတုအခွအေနကွေောငျ့ ကယျဆယျရေးလုပျငနျးတှေ လုပျ ဆောငျ နတေဲ့ ကွားက သဆေုံးသူ ၁၆၀ နီးပါးအထိ မွငျ့တကျလာခဲ့ပါတယျ။ […]
58. သမ္မတထရမ့်က တရုတ်ကို ဒေါ်လာ ၂၀၀ ဘီလီယံအထိ အခွန်ကောက်ဖို့ စီစဉ်	-MCN
ဖွင့်ရန်။ အမေရိကန် သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာ အမေရိကန် နိုင်ငံထဲကို တင်သွင်းတဲ့ တရုတ် ကုန်စည်တွေအတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၀၀ ဘီလီယံအထိ အခွန်ကောက်ကောက်ရေး အကောင်ထည်ဖော်ဖို့ စတင်နေကြောင်း ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ အဆိုပါလုပ်ရပ်ဟာအမေရိကန် နဲ့ တရုတ်နိုင်ငံကြား ဖြစ်နေတဲ့ ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲကို အရှိန်မြင်လာဖွယ်ရှိနေ ပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံဟာ ပြီးခဲ့တဲ့သောကြောနေ့က တရုတ် ကုန်စည်များကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၄ ဘီလီယံကောက်ခံမှု စတင်လုပ်ခဲ့ရာ တရုတ်ကလည်း အမေရိကန်ရဲ့ လုပ်ရပ်ကို တုံပြန်မှုအဖြစ် တရုတ် ကုန်စည်တွေကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၄ ဘီလီယံ ကောက်ခံခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန်ကုန်သွယ်ရေး ကိုယ်စားလှယ်ရောဘတ် လိုက်တီဇာက တရုတ်ရဲ့အခွန်ကောက်မှုကို တုံ့ပြန်ဖို့ အတွက် နောက်ထပ် အခွန် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း တိုးမြင့် ကောက်ခံသွားမယ်လို့ပြောပါတယ် >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> အမရေိကနျ သမ်မတ ထရမျ့က […]
57. အစ္စရေးက ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသကို ဖြတ်ပြီး ကုန်စည်တင်ပို့မှု	-MCN
ဖွင့်ရန်။ အစ္စရေးနိုင်ငံဟာ ဂါဇာကမ်းမြောင်ကို ဖြတ်သန်းပြီးတော့ အဓိက ကုန်စည်တွေ ပို့ဆောင်နေတာကို ပိတ်လိုက်တယ်လို့ သတင်းတွေကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ပါလက်စတိုင်းတို့က အစ္စရေးပိုင်နက်အတွင်း စိမ့်ဝင်ဖို့ ကြိုးပမ်းမှု နဲ့ တိုက်ခိုက်မှုတွေကို လက်တုံပြန်တဲ့အနေနဲ့ အခုလိုမျိုး ဂါဇာ ဒေသကို ဖြတ်သန်းကာ ကုန်စည် တင်ပို့မှုတွေကို ပိတ်သိမ်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ အစားစာ ၊ဆေးဝါး အပါဝင် လူသားချင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေ တင်ပို့မှုတွေကိုသာ ခွင်ပြုမှာဖြစ်တယ်လို့ အစ္စရေး ဘက်ကပြောထားပါတယ်။ အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ် နေတန်ယာဟု ဟာ ဂါဇာဒေသကို လွမ်းမိုးဖို့ ကြိုးပမ်းနေတဲ့ ဟားမက်စ် စစ်သွေးကြွအုပ်စုကို ကြီးမားတဲ့လက်တုံပြန်မှုတွေလုပ်ဖို့ ဆန္ဒရှိနေပါတယ်။ ဟားမက်စ် စစ်သွေးကြွအုပ်စု ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ကအစ္စရေးတို့ဟာ လူသားအပေါ် ရာဇာဝတ်မှုအသစ်တွေ ကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ ပါလက်စတိုင်းတို့ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလတည်းက ဂါဇာ – အစ္စရေးနယ်စပ် မှာပေါက်ကွဲစေတဲ့ ပစ္စည်းတွေ ချိတ်ဆွဲထားတဲ့ […]
56. မြိတ် အဝေးပြေးကားဝင်း က CB Bank ATM စက် ဖောက်ထွင်းခံရ	-MCN
ဖွင့်ရန်။ မြိတ် အဝေးပြေးကားဝင်းသစ်က CB Bank ATM စက် တစ်လုံး ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းက ဖောက်ထွင်းခံလိုက်ရပါတယ်။ အဲဒီ CB Bank ATM စက်ကို အဝေးပြေးကားဝင်းသစ် ဧရီယာ အတွင်းက YOU & ME FOOD COURT စားသောက်ဆိုင် အောက်ထပ်တွင် ထားရှိတာဖြစ်ပြီး အခုလို ဖောက်ထွင်းခံခဲ့ရတာကို CCTV မှတ်တမ်းတွေ ကနေတဆင့် သိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဖောက်ထွင်းသူမှာ ATM စက်ရဲ့ အပြင်ဘက်တံခါးကိုဖွင့်ပြီး ငွေထည့်ထားတဲ့ အံဆွဲကို ဖွင့်ဖို့ ကြိုးစားပေမယ့် မအောင်ခဲ့ပါဘူး။ အဆိုပါ ဖောက်ထွင်းမှု ဖြစ်ပြီးနောက် ဘဏ်ဝန်ထမ်းများနဲ့ တာဝန်ရှိ သူတွေက ATM စက်ကိုသွားရောက် စစ်ဆေးရာ ငွေကြေး ပျောက်ဆုံးမှု မရှိကြောင်း […]
55. အင်္ဂလန် – ခရိုအေးရှားတို့ ကစားမယ့် ကမ္ဘာ့ဖလား အကြိုဗိုလ်လုပွဲ	-MCN
ဖွင့်ရန်။ အင်္ဂလန်အသင်းဟာ ၁၉၉၀ နောက်ပိုင်း ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲအကြို ဗိုလ်လုပွဲကို ပထမဆုံးအကြိမ် တက်ရောက်ခွင့်ရလို့ စိတ်ဓာတ် တက်ကြွနေပါတယ်။ အင်္ဂလန်အသင်းဟာ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာ ခြေစွမ်းပိုင်းက ပုံမှန်ခြေစွမ်းလောက်သာ ရှိပေမယ့် ကံကောင်းမှု တွေကြောင့် နိုင်ပွဲတွေရနေခဲ့ပြီးဟာရီကိန်းကို အဓိက အားထားနေရပါတယ်။ စတာလင်း၊ အလီ၊ ဒိုင်ယာ၊ ဒန်နီရို့စ်တို့ဟာ ခြေစွမ်းပုံမှန်မရှိဘဲ ဟာရီကိန်း မရုန်းနိုင်ရင် ဂိုးရဖို့ ခက်ခဲတတ်ပါတယ်။ ခရိုအေးရှားကတော့တစ်ပွဲပြီးတစ်ပွဲ ခြေစွမ်း ပိုမိုတည်နေငြိမ်နေပြီး အသင်းလိုက်စိတ်ဓာတ် မာကျောမှု ရှိသလို ခံစစ်၊ တိုက်စစ်မျှပါတယ်။မန်ဆူကစ်၊ ပါရီဆစ်၊ လူကာမိုဒရစ်၊ ရာကီတစ်တို့ တွဲလုံးတွေဟာ ပြိုင်ဘက် နောက်တန်းကို အလုပ်ရှုပ်စေခဲ့သလို အခုပွဲမှာလည်းအင်္ဂလန်နောက်တန်းကို အခက်တွေ့ စေနိုင်ပါတယ်။ ကစားသမား စုဖွဲ့မှုပိုင်းနဲ့ စိတ်ဓာတ်ပိုင်း မာကျောတဲ့ ခရိုအေးရှားအသင်း အနိမ့်ဆုံး သရေကစားနိုင်ဖွယ် ရှိပါတယ်။ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> […]
54. ထိုင်းဂူအတွင်း ပိတ်မိနေတဲ့ လူ ၁၃ ဦးကို အောင်မြင်စွာ ကယ်ထုတ်နိုင်	-MCN
ဖွင့်ရန်။ ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းရှိ လိုဏ်ဂူအတွင်း သီတင်းပတ်နှစ်ပတ်ကျော် ကြာပိတ်မိနေတဲ့ ထိုင်းလူငယ်ဘောလုံး အသင်းမှ ကလေးငယ် ၁၂ ဦး နဲ့ နည်းပြတို့ကို ဇူလိုင် ၁၀ ရက် ညပိုင်းက အောင်မြင်စွာ ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ သတင်းတွေက ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဇူလိုင် ၁၀ ရက်နေ့က ပိတ်မိနေသူ နောက်ဆုံး ၅ ဦးကို ကယ်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ရာ စုစုပေါင်း ၁၃ ဦးကယ် ထုတ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်းဘောလုံးအသင်းမှ လူငယ်တွေနဲ့နည်းပြတို့ကို ရေကြီးနေတဲ့ လိုဏ်ဂူ အတွင်းမှ ခဲ့ရာခဲဆစ် ခေါ်ထုတ်ခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကယ်ထုတ်လာတဲ့ လူ ၁၃ ဦးကို ကျန်းမာရေး ပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့ ချင်းရိုင်ဆေးရုံ ကြီးကိုတင်ပို့ထားပါတယ်။ ထိုင်း ကလေးငယ်တွေနဲ့ နည်းပြတို့ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန် ၂၃ ရက်နေ့တည်းကလိုဏ်ဂူအတွင်း ပိတ်မိနေခဲ့တာဖြစ်ပြီး မိုးရွာသွန်းမူများကြောင့်ရေကြီးမူ၊ […]
53. ငြိမ်းချမ်းရေးဟာ ချောတိုင်တက်သလိုပဲလို့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောမူတူးစေးဖိုး ပြော	-MCN
ဖွင့်ရန်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးဟာ ချောတိုင်တက်သလိုပဲ ဖြစ်ပြီး မကျဆင်းဖို့ လိုတယ်လို့ ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောမူတူးစေးဖိုးက ပြောပါတယ်။ ဒီနေ့ ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက်နေ့ နေပြည်တော်မှာ ကျင်းပတဲ့ ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံ – (၂၁) ရာစု ပင်လုံ တတိယ အစည်းအဝေးမှာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောမူတူးစေးဖိုးက ချောတိုင် တက်သလိုမျိုးဖြစ်လို့ ဆွဲမချဖို့လည်း လိုတယ်လို့ ပြောသွားပါတယ်။ တိုင်းရင်းသား တန်းတူညီမျှရေးနဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့် အပြည့်အဝ ရရှိရေးကိုလည်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောမူတူးစေးဖိုးက ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ငွိမျးခမျြးရေးဟာ ခြောတိုငျတကျသလိုပဲလို့ ဗိုလျခြုပျကွီး စောမူတူးစေးဖိုး ပွော မွနျမာနိုငျငံမှာ ငွိမျးခမျြးရေးဟာ ခြောတိုငျတကျသလိုပဲ ဖွဈပွီး မကဆြငျးဖို့ လိုတယျလို့ ကရငျအမြိုးသား […]
52. ဒီမိုကရေစီ ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု ဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားမယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြော	-MCN
ဖွင့်ရန်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီ ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု ဖြစ်အောင် ဆက်ပြီး ကြိုးစားမယ်လို့ အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဗဟိုဌာန ဥက္ကဋ္ဌလည်း ဖြစ်တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောပါတယ်။ ဒီနေ့ ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက်နေ့ နေပြည်တော်မှာ ကျင်းပတဲ့ ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံ – (၂၁) ရာစု ပင်လုံ တတိယ အစည်းအဝေးမှာ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေး ပြဿနာကို ဖြေရှင်းရာမှာ ဆက်လက် လျှောက်လှမ်းနေဖို့ လိုတယ်လို့လည်း သူက ပြောသွားပါတယ်။ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ဒီမိုကရစေီ ဖကျဒရယျ ပွညျထောငျစု ဖွဈဖို့ ကွိုးစားမယျလို့ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ ပွော မွနျမာနိုငျငံမှာ ဒီမိုကရစေီ ဖကျဒရယျ ပွညျထောငျစု […]
51. ၂၁ ရာစု ပင်လုံညီလာခံဟာ ရခဲလှတဲ့ ဆုံချက်တစ်ခု ဖြစ်	-MCN
ဖွင့်ရန်။ ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံ – (၂၁) ရာစု ပင်လုံ တတိယအစည်းအဝေးဟာ ရခဲလှတဲ့ ဆုံချက်တစ်ခု ဖြစ်တယ်လို့ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောပါတယ်။ ဒီနေ့ နေပြည်တော်မှာ ကျင်းပတဲ့ (၂၁) ရာစု ပင်လုံ တတိယ အစည်းအဝေးမှာ အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဗဟိုဌာန ဥက္ကဋ္ဌလည်း ဖြစ်တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်စုကြည်က ပြောသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေး စာချုပ် (NCA) ဟာ အင်အားစု အားလုံး စုစည်းနိုင်အောင် လုပ်ပေးတဲ့ ဆုံချက်ဖြစ်ကြောင်း၊ NCA ဟာ ရပ်ဆိုင်းနေတာ မဟုတ်ကြောင်းလည်း နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်က ပြောသွားပါတယ်။ (နိုင်ငံရေး) ပုံ – screen […]
50. အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာ ကျင်းပမယ့် ဂိမ်းပြိုင်ပွဲအတွက် မြန်မာ Mobile Legends အသင်းကို ရွေးချယ် (ရုပ်/သံ)	-MCN
#ပြည်တွင်းသတင်း	(5d ago)
ဖွင့်ရန်။ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာ ကျင်းပမယ့် Mobile Legends Southeast Asia Cup 2018 ပြိုင်ပွဲအတွက် မြန်မာလက်ရွေးစင် Mobile Legends အသင်းကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီသတင်းကို တော့ MCN သတင်းထောက် မောင်ထက် ကပေးပို့ ထားပါတယ်။ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာ ကျင်းပမယ့် Mobile Legends Southeast Asia Cup ဂိမ်းပြိုင်ပွဲအတွက် မြန်မာလက်ရွေးစင်အသင်းကို အွန်လိုင်းအဆင့်ပြိုင်ပွဲက အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ ထိပ်ဆုံးဆန်ကာတင် ၈ သင်းထဲက Team Ghouls အသင်းကို ရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဇူလိုင်လ ၇ ရက်နဲ့ ၈ ရက်နေ့တွေက ရန်ကုန်မြို့ Juntion Square ဈေးဝယ်စင်တာမှာ မြန်မာ့လက်ရွေးစင် Mobile Legends အသင်း ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ အခမ်းအနား ကျင်းပခဲ့တာပါ။ […]
49. အကြီးစား ရေကာတာစီမံကိန်းတွေကြောင့် ဒေသခံတွေ စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲ ရှိနေ (ရုပ်/သံ)	-MCN
ဖွင့်ရန်။ မြန်မာနိုင်ငံ အရှေ့တောင်ပိုင်းဒေသက အကြီးစားရေကာတာစီမံကိန်းတွေကြောင့် ဒေသခံတွေအနေနဲ့ စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေအပြင် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေ ရှိနေတယ်လို့ ကရင်လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့က ပြောပါတယ်။ ဒီသတင်းကို MCN သတင်းထောက် ကေသွယ်က ပေးပို့ထားပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ အရှေ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာ အကြီးစားရေကာတာစီမံကိန်း ၁၀ ခုကို ၂၀၂၂ ခုနှစ်မှာ အပြီးသတ်ဆောက်လုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီထဲက ရွှေကျင်၊ သောက်ရေခပ်နဲ့ ပသိဆည်စီမံကိန်း သုံးခု ကို ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေက အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ မြေယာသိမ်း ဆည်းခံရတာတွေကြောင့် အလုပ်လက်မဲ့ဘ၀နဲ့ စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲတွေ့ကြုံနေရတဲ့အပြင် လူ့အခွင့် အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေ ရှိနေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့ Orchid ဟိုတယ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့တောင်ပိုင်းဒေသမှာ ရေကာတာ စီမံကိန်းတွေကြောင့် ဒေသခံတွေအပေါ် ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုတွေအကြောင်း သတင်းစာရှင်း လင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ […]
48. ကိုရဲလွင် (မဇ္ဈိမလှိုင်း) ကွယ်လွန်	-MCN
ဖွင့်ရန်။ မဇ္ဈိမလှိုင်း၊ ပန်းရဲ့လမ်းတို့ရဲ့ ဂီတမှူးကိုရဲလွင်ဟာ ဒီနေ့ ဇူလိုင် ၁၀ ရက်၊ ညနေ ၄ နာရီ ၁၀ မိနစ် အချိန် အသက် ၇၁ နှစ် အရွယ်မှာ ကွယ်လွန်သွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အသက် ၁၉ နှစ်ကတည်းက ဂီတလောကထဲကို ဝင်ခဲ့တဲ့ ကိုရဲလွင်ဟာ စက်မှုတက္ကသိုလ် (RIT) မှာ ပညာသင်ကြားစဉ် ကတည်းက ခင်မောင်တိုး၊ ကိုမောင်မောင် (မဇ္ဈိမလှိုင်း)၊ တင်မောင်လှိုင်တို့နဲ့ အတန်း မတိမ်းမယိမ်း ဖြစ်ခဲ့ပြီး အဆောင်ညတွေမှာ သီချင်းတွေ ရေးဆိုတီးခဲ့ကြပါတယ်။ ကိုရဲလွင်ဟာ ပြဿနာအုပ်စု၊ လိဝစ္ဆီများ၊ မဇ္ဈိမလှိုင်း၊ ပန်းရဲ့လမ်း ဂီတအဖွဲ့တွေမှာ တောက်လျှောက် ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ပန်းခရမ်းပြာ၊ နဒီမင်္ဂလာ၊ ဒွိဟစိတ်နဲ့ သုညမှာ စတဲ့ နာမည်ကျော် သီချင်းတွေကို […]
47. တတိယအကြိမ်မြောက် မြန်မာစွန့်ဦးတီထွင် ပွဲတော် ကျင်းပမယ် (ရုပ်/သံ)	-MCN
ဖွင့်ရန်။ တတိယအကြိမ်မြောက် မြန်မာစွန့်ဦးတီထွင်ပွဲတော်ကို လာမယ့် သြဂုတ်လဆန်းပိုင်း ရန်ကုန်မြို့မှာ ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသတင်းကို MCN သတင်းထောက် အောင်သူက ပေးပို့ထားပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ လူငယ်စွန့်ဦးတီထွင် လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းက ဦးဆောင်ပြုလုပ်တဲ့ တတိယအကြိမ်မြောက် မြန်မာ့စွန့်ဦးတီထွင်ပွဲတော်ကို ရန်ကုန်မြို့ တပ်မတော်ခန်းမမှာ သြဂုတ်လ (၃)ရက်နေ့ကနေ (၅)ရက်နေ့အထိ ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဇူလိုင်လ(၁၀)ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့ မြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်များနဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ် (UMFCCI)ခန်းမမှာ မြန်မာ့စွန့်ဦးတီထွင်ပွဲတော်ပြုလုပ်ဖို့ရှိနေတာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြု လုပ်ခဲ့တာပါ။ Sound Bite———–ဦးထွန်းထွန်းနိုင်(ဥက္ကဋ္ဌ) မြန်မာနိုင်ငံလူငယ်စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း အဲ့ဒီပြပွဲမှာ ဆန်းသစ်တီထွင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ဦးစားပေးတင်ပြသွား မှာဖြစ်ပြီး နည်းပညာအခြေခံတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဝန်ဆောင်မှုကို အခြေခံတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ ပေါ်ပေါက်လာစေဖို့ ရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Sound Bite———–ဦးထွန်းထွန်းနိုင်(ဥက္ကဋ္ဌ) မြန်မာနိုင်ငံလူငယ်စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း အခုပြသမယ့် တတိယအကြိမ်မြောက်မြန်မာစွန့်ဦးတီထွင်ပွဲတော်မှာ ကနဦးတီထွင်လုပ်ငန်းတွေအတွက် လိုအပ်နေတဲ့ နည်းပညာအထောက်အကူနဲ့ ငွေကြေးအရင်းအနှီးအတွက် […]
46. ပြည်ပအလုပ်အကိုင် ရှာဖွေရေး အေဂျင်စီ ၁၆ ခုကို အရေးယူ	-MCN
ဖွင့်ရန်။ လိုင်စင် ထုတ်ပေးထားတဲ့ ပြည်ပအလုပ်အကိုင် အကျိုးဆောင် လိုင်စင်ရ အေဂျင်စီ ၂၅၆ ခုအနက် အေဂျင်စီ ၁၆ ခုကို ကာလကန့်သတ်ချက်နဲ့ ပိတ်သိမ်းထားပါတယ်။ ပြည်ပအလုပ်အကိုင် အကျိုးဆောင် လိုင်စင်ရ အေဂျင်စီ ၄ ခုကိုတော့ ပြည်ပ အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ဥပဒေနဲ့ အရေးယူထားပြီး တရားမဝင် အလုပ်သမား စုဆောင်းကာ ငွေကြေးကောက်ခဲ့သူ ၄၅ ဦးကို တရားစွဲဆိုထားပါတယ်။ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာနက ပြည်ပကို အလုပ်သမားတွေ တရားဝင်စေလွှတ်ခြင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ ၁၉၉၉ ခုနှစ် ပြည်ပအလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ဥပဒေအရ ပြည်ပအလုပ်အကိုင် အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ရ အေဂျင်စီတွေကို လိုင်စင်တွေ ထုတ်ပေးနေပြီး စည်းကမ်း မလိုက်နာတဲ့ အေဂျင်စီတွေကို အရေးယူနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ပွညျပအလုပျအကိုငျ ရှာဖှရေေး […]
45. ဂျော်ဂျီယာမှာ သေနတ် ယူဆော့တဲ့ ၄ နှစ်ကလေးငယ် သေနတ်မှန်ပြီး သေဆုံး	-MCN
#နိုင်ငံတကာသတင်း	(5d ago)
ဖွင့်ရန်။ ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံမှာ အသက် ၄ နှစ်အရွယ် ယောကျာ်းကလေးဟာ မိဘတွေက အိပ်ယာအောက်မှာ ဝှက်ထားတဲ့ သေနတ်ကို တွေ့ရှိလို့ ယူဆော့ပြီးနောက် သူ့ဦးခေါင်းကို ပစ်မိပြီး သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ ဇူလိုင်လ ၇ ရက်နေ့က အော်ဂက်စတာရှိ သူတို့မိသားစု နေအိမ် ဂျပ်စတင် ဖော့စ် ဂျူနီယာ (၄ နှစ်) ဟာ သေဆုံးနေတာကို တွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ ကလေးငယ်ရဲ့ ဖခင် ဂျပ်စတင် ဖော့စ် စီနီယာ (၂၇ နှစ်) ကို ပေါက်ကွဲစေတတ်သော လက်နက် တရားမဝင် ကိုင်ဆောင်မှုနဲ့ ဖမ်းဆီးထားပါတယ်။ သေနတ်ကို အိပ်ယာအောက်မှာ ဝှက်ထားတာ ဖြစ်ပြီး အဲဒီသေနတ်ကို တွေ့ရှိရာက ဦးခေါင်းကို သေနတ်မှန် သေဆုံးတာ ဖြစ်တယ်လို့ မိဘတွေက ရဲကို ထွက်ဆိုချက် ပေးထားပါတယ်။ […]
44. တရုတ်အသံလွှင့်ဌာနနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး ကာတွန်း အစီအစဉ် လွှင့်မယ်	-MCN
ဖွင့်ရန်။ မြန်မာ့အသံနှင့် ရုပ်မြင်သံကြား (MRTV) နဲ့ ကွမ်ရှီးပြည်သူ့ အသံလွှင့်ဌာန (GXBS) တို့ ပူးပေါင်ပြီး တရုတ် ကာတွန်း အစီအစဉ် တစ်ခုကို ထုတ်လွှင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ် ကာတွန်းကား အစီအစဉ်ကတော့ ”တောပျော်မျောက်ကလေး ကျွမ့်ကျွမ့်” ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပြီး လာမယ့် သြဂုတ်လက စတင်က တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း မနက် ၉ နာရီခွဲအချိန် MRTV မှာ ပြသမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ MRTV နဲ့ GXBS တို့ ပူးပေါင်းထုတ်လွှင့်မယ့် ကာတွန်းအစီအစဉ် စတင်ဆောင်ရွက်တဲ့ အခမ်းအနားကို မနေ့က ဇူလိုင် ၉ ရက်နေ့ နေပြည်တော်မှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> တရုတျအသံလှငျ့ဌာနနဲ့ ပူးပေါငျးပွီး ကာတှနျး အစီအစဉျ လှငျ့မယျ မွနျမာ့အသံနှငျ့ ရုပျမွငျသံကွား (MRTV) […]
43. သတင်းထောက် အမည်ခံပြီး ငွေညှစ်သူ ၄ ဦးကို ဖမ်းဆီး	-MCN
ဖွင့်ရန်။ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ဖောင်းပြင်မြို့နယ်၊ သရက်ကုန်း ကျေးရွာမှာ နေပြည်တော်က တာဝန်ပေးထားတဲ့ မီဒီယာပေါင်းစုံ အဖွဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီး ခြိမ်းခြောက် ငွေညှစ်သူ ၄ ဦးကို ဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။ ဇူလိုင် ၉ ရက်နေ့မှာ သတင်းထောက် အမည်ခံထားသူ ၄ ဦးက စာသင်ကျောင်းနဲ့ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ ဆောက်ဖို့ သစ် ၁ တန်တွေ့ထားလို့ ဓာတ်ပုံရိုက်ထားကြောင်း၊ သစ်စက်လုပ်ကိုင်သူ ၁၀ ဦးရဲ့ မှတ်ပုံတင်တွေကို ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး တစ်ဦးကို ၁ သိန်းခွဲနှုန်းနဲ့ ၁၅ သိန်း တောင်းခံခဲ့တဲ့အတွက် စာသင်ကျောင်းအတွက် စုထားတဲ့ ငွေကျပ် ၁၀ သိန်းကို ပေးခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီငွေတောင်းခံမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နေပြည်တော်တိုင်း (မ်) မှုခင်းသတင်းထောက် (မော်လိုက်ခရိုင် တာဝန်ခံ) တွေဖြစ်တဲ့ မောင်ဆန်း (၃၆ နှစ်)၊ […]
42. ချက်ဇ်တရားရေး ဝန်ကြီး နုတ်ထွက်	-MCN
ဖွင့်ရန်။ ချက်ဇ် သမ္မတနိုင်ငံက တရားရေးဝန်ကြီး တာတာနာ မာလာဟာ ဝန်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ယူပြီး ၁၃ ရက်အကြာမှာ နုတ်ထွက်သွားပါတယ်။ တက္ကသိုလ်တက်စဉ်က သူ့ရဲ့ ဘွဲ့ယူကျမ်းမှာ စာကူးချထားတာတွေ ရှိတယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်ကြောင့် အခုလို ရက်ပိုင်းအတွင်း ဝန်ကြီးရာထူးက နုတ်ထွက်သွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မာလာ (၃၆ နှစ်) ဟာ သူနုတ်ထွက်ကြောင်း၊ သူ့ကို တိုက်ခိုက်ချင်တဲ့အတွက် အခုလို စွပ်စွဲတာဖြစ်ကြောင်း၊ သူ့မှာ အပြစ်မရှိကြောင်း မနေ့က ဇူလိုင် ၉ ရက်မှာ ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ချက်ဇ် ရေဒီယိုကတော့ မာလာရဲ့ ဘွဲ့ယူကျမ်းမှာ အညွှန်ဖော်မပြထားတဲ့ စာပိုဒ်တွေရှိကြောင်း၊ မူရင်းအတိုင်း ကူးချထားတဲ့အတွက် သူ့ကျမ်းထဲက စာထဲမှာ မူရင်းအမှားအတိုင်း ၂ ကြိမ်ပါနေကြောင်း ပြောပါတယ်။ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ခကျြဇျတရားရေး ဝနျကွီး […]
41. ကနေဒါမှာ အပူလှိုင်းကြောင့် သေဆုံးသူ ၇၀ ခန့်ရှိ	-MCN
ဖွင့်ရန်။ ကနေဒါနိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း ကွိဘက်ခ် ပြည်နယ်မှာ အပူလှိုင်းနဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ ရောဂါတွေကြောင့် သေဆုံးသူ ၇၀ ခန့် ရှိတယ်လို့ အာဏာပိုင်တွေက ပြောပါတယ်။ မွန်ထရီယယ်မှာ သေဆုံးသူကတင် ၃၄ ဦးရှိတယ်လို့ ပြည်နယ် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက အတည်ပြုပါတယ်။ ကနေဒါ အရှေ့ပိုင်းမှာ အပူလှိုင်းဟာ ဇူလိုင်လ အစောပိုင်းကတည်းက ဖြစ်ပေါ်နေတာ ဖြစ်ပြီး ကွိဘက်ခ်မှာ အဆိုးဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ သေဆုံးမှုတွေဟာ အပူရှိန် မြင့်တက်တာနဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ ရောဂါတွေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်တုန်းကလည်း မွန်ထရီယယ် ဧရိယာမှာ အပူလှိုင်းကြောင့် သေဆုံးသူ ၁၀၀ ခန့် ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ကနဒေါမှာ အပူလှိုငျးကွောငျ့ သဆေုံးသူ ၇၀ ခနျ့ရှိ ကနဒေါနိုငျငံ အရှပေို့ငျး ကှိဘကျချ ပွညျနယျမှာ […]
40. လျူရှောက်ဘိုရဲ့ ဇနီးကို တရုတ်နိုင်ငံကနေ ထွက်ခွာခွင့်ပြု	-MCN
ဖွင့်ရန်။ ကွယ်လွန်သူ နိုဘလ်ဆုရှင် လျူရှောက်ဘိုရဲ့ ဇနီးကို တရုတ်အာဏာပိုင်တွေက ဒီနေ့ ဇူလိုင် ၁၀ ရက်နေ့မှာ တရုတ်နိုင်ငံကနေ ထွက်ခွာခွင့် ပြုလိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အသက် ၅၇ နှစ်အရွယ် လျူ ရှီယာကို တရားစွဲဆိုခြင်း မပြုဘဲ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်ကတည်းက နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ထားတာဖြစ်ပြီး အခု တရုတ်နိုင်ငံကနေ ထွက်ခွာခွင့် ပြုတာဖြစ်တယ်လို့ နီးစပ်သူတွေက ပြောပါတယ်။ မစ္စက် လျူဟာ ဖင်လန်နိုင်ငံ၊ ဟယ်လ်ဆင်ကီကို သွားမယ့် လေယာဉ်ပေါ်လို့ နီးစပ်သူတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။ ထောင်ဒဏ် ၁၁ နှစ် ချမှတ်ခံထားရတဲ့ နိုင်ငံရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ လျူရှောက်ဘိုဟာ မနှစ်က သေဆုံးသွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> လြူရှောကျဘိုရဲ့ ဇနီးကို တရုတျနိုငျငံကနေ ထှကျခှာခှငျ့ပွု ကှယျလှနျသူ နိုဘလျဆုရှငျ […]
39. ကျောက်မဲမြို့နယ်မှာ သေနတ်နဲ့ ပစ်ခတ်ခံရလို့ ကုန်တင်ယာဉ်မောင်း သေဆုံး	-MCN
ဖွင့်ရန်။ ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း၊ ကျောက်မဲမြို့နယ်၊ မန်တန် ကျေးရွာအနီး ပြည်ထောင်စု ကားလမ်းမကြီးပေါ်မှာ နွားတွေ တင်လာတဲ့ ကုန်တင်ယာဉ်ကို လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ ပစ်ခတ်လို့ ယာဉ်မောင်း သေဆုံးသွားပါတယ်။ မနေ့က ဇူလိုင်လ ၉ ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းမှာ လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ ပစ်ခတ်ခံရတာ ဖြစ်ပြီး ယာဉ်မောင်းဟာ သေနတ် ဒဏ်ရာ ၂ ချက်ရပြီး သေဆုံးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဇွန်လ ၁၁ ရက်နေ့ကလည်း နွားတင်ဆောင်လာတဲ့ ယာဉ်ကို အခု အခင်းဖြစ်ပွားတဲ့ နေရာအနီးမှာပဲ သေနတ်နဲ့ ပစ်ခတ်လို့ ယာဉ်မောင်းနဲ့ တခြားတစ်ဦး ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ သေဆုံးသွားတဲ့ ယာဉ်မောင်းကို နောင်ချိုမြို့က ကရုဏာရှင် လူမှုကူညီရေးအသင်း မော်တော်ယာဉ်နဲ့ ကျောက်မဲ ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကို ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ကြောကျမဲမွို့နယျမှာ သနေတျနဲ့ […]
38. (၁၆) ကြိမ်မြောက် UPDJC အစည်းအဝေး ကျင်းပ	-MCN
ဖွင့်ရန်။ (၁၆) ကြိမ်မြောက် ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှု ပူးတွဲ ကော်မတီ(UPDJC) အစည်းအဝေးကို မနေ့က ဇူလိုင် ၉ ရက်နေ့ နေပြည်တော်၊ ဝဏ္ဏသိဒ္ဓိရပ်ကွက်ရှိ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြ်ိမ်းချမ်းရေး ဗဟိုဌာန (NRPC) မှာ ကျင်းပပါတယ်။ (၁၆) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးကို ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှု ပူးတွဲကော်မတီ (UPDJC) ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌတွေ ဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံရုံး ဝန်ကြီး ဦးကျော်တင့်ဆွေ၊ ဒေါက်တာ တင်မျိုးဝင်း၊ ဒေါက်တာ ဆလိုင်းလျန်မှုန်းဆာခေါင်း၊ ဦးသုဝေ၊ ပူးတွဲကော်မတီဝင်တွေ ဖြစ်ကြတဲ့ အစိုးရ၊ လွှတ်တော်၊ တပ်မတော် အစုအဖွဲ့၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများ အစုအဖွဲ့နဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီများ အစုအဖွဲ့တို့က UPDJC ကိုယ်စားလှယ်တွေ၊ အကျိုး ဆောင်တွေနဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေ တက်ရောက်ကြပါတယ်။ […]
37. နည်းပြ အင်းနရစ်ကို စပိန် လက်ရွေးစင် နည်းပြသစ်ခန့်	-MCN
ဖွင့်ရန်။ စပိန်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဟာ လစ်လပ်နေတဲ့ နည်းပြနေရာမှာ ဘာစီလိုနာ နည်းပြဟောင်း အင်းနရစ်ကို အစားထိုး ခန့်အပ်လိုက်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ဖလား ပြိုင်ပွဲမှာ စပိန် အသင်းနည်းပြအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ နည်းပြ ဟီယာရိုဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းက ရာထူးမှ ထွက်ခဲ့ပြီးနောက် အင်းနရစ်ကို အစားထိုး ခန့်အပ်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ စပိန်အသင်းဟာ ကမ္ဘာ့ဖလား ပြိုင်ပွဲမတိုင်ခင် ရက်ပိုင်းအလိုက နည်းပြ လိုပီတီဂူကို ရာထူးက ထုတ်ခဲ့ပြီးနောက် ဟီယာရိုကို အစားထိုး ခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်။ စပိန်အသင်းဟာ နည်းပြ အန်းနရစ်ကို ၂ နှစ်စာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။ စပိန်အသင်းဟာ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ မတိုင်ခင် ရေပန်းစားခဲ့ပေမယ့် ပြိုင်ပွဲကနေ စောစီးစွာ ထွက်ခဲ့ရပါတယ်။ နည်းပြ အင်းနရစ်ဟာ ဘာစီလိုနာ အသင်းကို တာဝန်ယူခဲ့သူဖြစ်ပြီး ဘာစီလိုနာ အသင်းနည်းပြ အဖြစ် […]
36. (၂၁) ရာစုပင်လုံ တတိယ အစည်းအဝေး ဖွင့်ပွဲ တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့်မယ်	-MCN
ဖွင့်ရန်။ မနက်ဖြန် ကျင်းပမယ့် ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံ – (၂၁) ရာစု ပင်လုံ တတိယ အစည်းအဝေး ဖွင့်ပွဲကို ရုပ်သံတွေနဲ့ လူမှုကွန်ရက်တွေ ပေါ်ကနေ တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နေပြည်တော်ရှိ ကွန်ဗင်းရှင်း ဗဟိုဌာန (၂) မှာ ကျင်းပမယ့် အဲဒီ အခမ်းအနားကို MRTV, mntv, SKY Net Up to Date, SKY Net တိုင်းရင်းသား၊ SKY Net Hluttaw, မြဝတီ (MWD)၊ MWD (Varity)၊ မြန်မာ့အသံ ရေဒီယို အစီအစဉ်၊ MIR (Radio) နဲ့ MOI Webportal Myanmar Facebook, MRTV Facebook, […]
35. “မြန်မာနိုင်ငံတွင် အမျိုးသမီးနှင့် ဥပဒေ” စကားဝိုင်း ကျင်းပမယ်	-MCN
ဖွင့်ရန်။ “မြန်မာနိုင်ငံတွင် အမျိုးသမီးနှင့် ဥပဒေ” ဆိုင်ရာ စကားဝိုင်းကို ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက်နေ့ ရန်ကုန်မြို့၊ လှိုင်မြို့နယ်ရှိ International Business Center (IBC) မှာ ကျင်းပမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခမ်းအနားကို အာရှဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ် ဒေါင်တာ ကင်မ် အန် ဘီ နင်၊ ဒါနရှေ့ဆောင် မြန်မာက ဒေါ်မြင့်မြင့်ဦးတို့က အဖွင့်မှာစကား ပြောကြားပြီး ဆွေးနွေးပွဲကို ဆက်လက် ကျင်းပမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အာရှဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့ ဒါနရှေ့ဆောင် မြန်မာက ကျင်းပပြုလုပ်မယ့် အဲဒီ အခမ်းအနားမှာ “မြန်မာ အမျိုးသမီးများအပေါ် သက်ရောက်နေသော အဓိက ဥပဒေများ” လက်စွဲစာအုပ်ကိုလည်း ဖြန့်ဝေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> “မွနျမာနိုငျငံတှငျ အမြိုးသမီးနှငျ့ ဥပဒေ” စကားဝိုငျး ကငျြးပမယျ […]
34. ဂျော်ဒန်ရှိ ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားတွေကို အကာအကွယ်ပေးဖို့ လှုပ်ရှာမှု စတင်	-MCN
ဖွင့်ရန်။ ဂျော်ဒန်နိုင်ငံရှိ မြန်မာ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ သီရိလင်္ကာ၊ နီပေါနဲ့ အင်ဒိုနီးရှားက ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားတွေရဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို အကာအကွယ်ပေးဖို့ ရည်ရွယ်တဲ့ စီမံကိန်းတစ်ခုကို အာရပ် ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား အရင်းအမြစ် စင်တာ (MRC) က စတင်လိုက်ပါတယ်။ ဂျော်ဒန် နိုင်ငံမှာ ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သား ၂ သိန်း ၃ သောင်း ရှိပါတယ်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ အာဆီယံနဲ့ အာရပ် ကုန်သွယ်ရေး သမဂ္ဂ ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်း (ATUC) တို့ရဲ့ နားလည်မှု စာချွန်လွှာအရ အခု စီမံကိန်းကို အကောင်အထည် ဖော်တာ ဖြစ်တယ်လို့ ဘယ်လ်ဘာဝါဘာ သတင်းဌာနက ဖော်ပြပါတယ်။ ဒီစီမံကိန်းဟာ ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားတွေ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ပြဿနာတွေကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ့ (ILO) […]
33. မြန်မာနဲ့ ကုလ အေဂျင်စီတွေ ချုပ်ဆိုတဲ့ MOU ကို ထုတ်ဖော်ပြသဖို့ တောင်းဆို	-MCN
ဖွင့်ရန်။ မြန်မာအစိုးရနဲ့ ကုလသမဂ္ဂ အေဂျင်စီတွေ ဖြစ်တဲ့ ကုလသမဂ္ဂ ဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် (UNDP) နဲ့ ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး (UNHCR) တို့အကြား ဒုက္ခသည်တွေ နေရပ်ပြန်ရေး လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ နားလည်မှု စာချွန်လွှာ (MOU) ကို ထုတ်ဖော်ပြသဖို့ Transparency International Bangladesh (TIB) က တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဘင်္ဂါလီ မွတ်စလင် ဒုက္ခသည်တွေ နေရပ်ပြန်ရေး အစီအစဉ်တွေကို ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ထုတ်ပြဖို့ တောင်းဆိုတာ ဖြစ်တယ်လို့ ဒေးလီးစတား သတင်းမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ နိုင်ငံတကာကို ပေါက်ကြားလာတယ်ဆိုတဲ့ နားလည်မှု စာချွန်လွှာမှာ ဘင်္ဂါလီ မွတ်စလင်တွေ နိုင်ငံသား ဖြစ်ရေး၊ နိုင်ငံအတွင်း လွတ်လပ်စွာ သွားခွင့်ရှိရေးတို့နဲ့ ပတ်သက်လို့ အငြင်းပွားစရာတွေ ရှိတယ်လို့ သိရကြောင်း […]
32. ဗြိတိန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး အစားထိုး ခန့်အပ်	-MCN
ဖွင့်ရန်။ ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ် ထရီဆာမေဟာ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး ဂျရမီ ဟန့်ကို နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးအသစ်အဖြစ် အစားထိုး ခန့်အပ်လိုက်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဘောရစ် ဂျွန်ဆင်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက ဝန်ကြီးရာထူးကနေ နုတ်ထွက်သွားခဲ့ရာ မစ္စတာ ဟန့်ကို နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးသစ်အဖြစ် ခန့်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မစ္စတာ ဂျွန်ဆင်ဟာ ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ် ထရီဆာမေရဲ့ ဥရောပသဂ္ဂကနေ ခွဲထွက်မှု အစီစဉ်တွေကို ဝေဖန်မှုတွေ လုပ်ခဲ့ပြီးနောက် ရာထူးက ထွက်သွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မစ္စတာ ဂျွန်ဆင်နဲ့အတူ ဥရောပ သမဂ္ဂကနေ ဗြိတိန် နုတ်ထွက်ရေးဆိုင်ရာ ဝန်ကြီး ဒေးဗစ် ဒါဗီနဲ့ အငယ်တန်း အရာရှိတွေလည်း လိုက်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ ဗြိတိန်ဟာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မေလ ၂၉ ရက်နေ့မှာ ဥရောပသမဂ္ဂကနေ ထွက်ဖို့ စီစဉ်ထားပေမယ့် နှစ်ဖက်စလုံးဟာ တိကျတဲ့ […]
31. ဂျပန်နိုင်ငံမှာ စံချိန်တင် မိုးသည်းထန် ရေကြီးမှုကြောင့် သေဆုံးသူ ၁၂၂ ဦး ကျော်လာ	-MCN
ဖွင့်ရန်။ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ စံချိန်တင် မိုးရွာသွန်းပြီး ရေကြီးမှုတွေကြောင် သေဆုံးသူ မြင့်တက်လာခဲ့ပြီး လူ ၁၂၂ ဦးအထိ သေဆုံးသွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ရေကြီး၊ မြေပြိုမှုတွေကြောင့် လူ ဒါဇင်ချီ ပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်ပြီး လျှပ်စစ်မီးတွေလည်း ပြတ်တောက်ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင်လ ၅ ရက်နေ့ ကတည်းက ဂျပန်နိုင်ငံ အနောက်ပိုင်းမှာ ပှံမှန်မဟုတ်တဲ့ မိုးရွားသွန်းမူတွေ ဖြစ်ခဲ့ပြီး ရေကြီး၊ မြေပြိုမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူပေါင်း ၂ သန်းကျော်ကို ဘေးလွတ်ရာကို ရွှေပြောင်းပေးထားရတယ်လို့ ဂျပန် အာဏာပိုင်တွေက ပြောပါတယ်။ ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဟာ ပျောက်ဆုံးနေသူတွေကို အချိန်လု ကယ်နေရပြီး ရွံ့နွံတွေမှာပါ ရှာဖွေကယ်ဆယ်မှုတွေ လုပ်ခဲ့ရပါတယ်။ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ဂပြနျနိုငျငံမှာ စံခြိနျတငျ မိုးသညျးထနျ ရကွေီးမှုကွောငျ့ သဆေုံးသူ ၁၂၂ ဦး […]
30. ကယ်ဆယ်ရေး ဒုတိယနေ့မှာ ဂူအတွင်းပိတ်မိနေသူ ကလေး ၄ ဦး ထပ်ကယ်နိုင်	-MCN
ဖွင့်ရန်။ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ချင်းရိုင်ခရိုင်၊ မယ်ဆိုင်မြို့ရှိ လိုဏ်ဂူအတွင်း ပိတ်မိနေတဲ့ ကလေးငယ်တွေ အနက်က နောက်ထပ် ၄ ဦးကို ကယ်ဆယ်ရေး ဒုတိယနေ့မှာ ထပ်မံ ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဂူအတွင်း ပိတ်မိနေတဲ့ ကလေးငယ်တွေကို ဇူလိုင် ၈ ရက်နေ့က ကယ်တင်ဖို့ စတင် ကြိုးပမ်းနိုင်ခဲ့ရာ ညပိုင်းမှာ ၄ ဦး ကယ်ထုတ်ခဲ့တဲ့အတွက် စုစုပေါင်း ၈ ဦး ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းမှာ ပါဝင်သူတစ်ဦးက “ကလေးငယ် စုစုပေါင်း ၈ ဦးကို ရေကြီးနေတဲ့ ဂူထဲက ကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်” လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ကယ်ထုတ်ခဲ့တဲ့ ကလေးငယ်တွေကို ရဟတ်ယာဉ်နဲ့ ချင်းရိုင် ဆေးရုံကြီးကို ပို့ဆောင်ထားပါတယ်။ ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေက ဂူအတွင်းက ကယ်ထုတ်ခံရတဲ့ ကလေးငယ်တွေ ပျော်ရွင်နေပြီး […]
29. လေထုညစ်ညမ်းမှုကြောင့် တရုတ်အစိုးရ အရာရှိ ၄ ထောင်ကျော် အပြစ်ပေးခံရ	-MCN
ဖွင့်ရန်။ တရုတ်အစိုးရက လေထုညစ်ညမ်းမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ ယမန်နှစ်အတွင်း တာဝန်ရှိသူ အရာရှိ ၄ ထောင်ကျော်ကို ထောင်ဒဏ်တွေ အပါအဝင် အပြစ်ပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်သမ္မတ ရှီကျင့်ဖျင် ဦးဆောင်ပြီး နိုင်ငံအတွင်း သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ဆိုးရွားစွာ ဖြစ်ပေါ်မှုကို တိုက်ဖျက်တဲ့ အနေနဲ့ လေထုညစ်ညမ်းမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ အရေးယူဖို့ ပျက်ကွက်သူတွေကို ထောင်ဒဏ် ပြစ်ဒဏ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်အစိုးရက ဒေသပေါင်း ၁၀ ခုက အစိုးရတာဝန်ရှိသူ ၄၃၀၅ ဦးကို ထောင်ဒဏ်၊ ငွေဒဏ်တွေ ချမှတ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ မေလ အစောပိုင်း ကတည်းက တရုတ်အစိုးရဟာ နိုင်ငံတဝန်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ချိုးဖောက်မှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြန်စစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> လထေုညဈညမျးမှုကွောငျ့ တရုတျအစိုးရ အရာရှိ ၄ […]
28. Reuters သတင်းထောက် ၂ ဦးကို စွဲချက်တင်ဖို့ အမိန့်ချမှု နိုင်ငံတကာ တုံ့ပြန်	-MCN
ဖွင့်ရန်။ Reuters သတင်းထောက် ၂ ဦးဖြစ်တဲ့ ကိုဝလုံးနဲ့ ကိုကျော်စိုးဦးတို့ကို နိုင်ငံတော်အစိုးရ လျှို့ချက်အက်ဥပဒေနဲ့ စွဲချက်တင်ဖို့ အမိန့်ချမှတ်လိုက်မှုအပေါ် နိုင်ငံတကာက ပြန်လည် တုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်။ Reuters ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ အယ်ဒီတာချုပ် စတီဖင် ဂျေ အက်ဒလာက ဒီအမှုဟာ အခြေအမြစ် မရှိဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ ရန်ကုန်ရှိ အမေရိကန် သံရုံးကတော့ ဒီ အမိန့်ချမှတ်မှုဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စာနယ်ဇင်း လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး နောက်ပြန်သွားတာ ဖြစ်တယ်လို့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဥရောပ သမဂ္ဂနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စ ယန်ဟီးလီက အမှုကို ရုပ်သိမ်းပြီး သတင်းထောက်တွေကို လွှတ်ပေးဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့တွေ ဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံတကာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ (AI)၊ […]
27. ဘင်္ဂါလီ ဒုက္ခသည်တွေ နေရပ်ပြန်ဖို့ အလှမ်း ဝေးသေးတယ်လို့ ICRC အကြီးအကဲ ပြော	-MCN
ဖွင့်ရန်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှရှိ ဘင်္ဂါလီ ဒုက္ခသည်တွေ မြန်မာနိုင်ငံကို နေရပ်ပြန်ဖို့ အလှမ်း ဝေးသေးတယ်လို့ နိုင်ငံတကာ ကြက်ခြေနီ ကော်မတီ (ICRC) ဥက္ကဋ္ဌ မစ္စတာ ပီတာ မော်ရာက ပြောပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံကို လာရောက် လေ့လာခဲ့တဲ့ မစ္စတာ ပီတာ မော်ရာက ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊ ဂျနီဗာမြို့မှာ France 24 သတင်းဌာနကို ပြောကြားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ် အခြေအနေဟာ အလွန်အမင်း အထိအခိုက် မခံတဲ့ အနေအထား ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်တဲ့ အရပ်သား အစိုးရက အခြေအနေကို တိုးတက်အောင် လုပ်ဖို့ ဆန္ဒရှိပေမယ့် ဒုက္ခသည်တွေ နေရပ်ပြန်ရေးဟာ အလှမ်းဝေးသေးတယ်လို့ မစ္စတာ ပီတာ မော်ရာက ခန့်မှန်းသုံးသပ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ […]
26. ဘယ်လ်ဂျီယံ – ပြင်သစ်တို့ ကစားမယ့် ကမ္ဘာ့ဖလား အကြိုဗိုလ်လုပွဲ	-MCN
ဖွင့်ရန်။ နှစ်သင်းစလုံးဟာ ကစားသမား စုဖွဲ့မှုပိုင်း၊ ခြေစွမ်းပိုင်း ကောင်းမွန်နေတာကြောင့် အကြိတ်အနယ် ရှိလာမယ့်ပွဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လ်ဂျီယံအသင်းဟာ ကွာတားဖိုင်နယ်မှာ နာမည်ကြီး ဘရာဇီးကို အနိုင်ရခဲ့လို့ စိတ်ဓာတ် တက်ကြွနေပါတယ်။ ဘယ်လ်ဂျီယံဟာ ဟာဇက်၊ လူကာကူ၊ ဒီဘရိုင်းတို့နဲ့ စုဖွဲ့မှုပိုင်း ကောင်းနေပြီး တစ်ပွဲထက် တစ်ပွဲ ခြေစွမ်းကောင်းမွန်နေပါတယ်။ ပြင်သစ်အသင်းကလည်း ခံစစ်၊ တိုက်စစ် မျှတနေပြီး နောက်ဆုံး ကစားခဲ့တဲ့ပွဲတွေမှာ နိုင်ပွဲရအောင် ရုန်းကစားနိုင်ပါတယ်။ ဒမ်ဘီလီ၊ ဂရက်ဇ်မန်း၊ မက်ပီ၊ ကန်တီ၊ ပေါ့ဘာ၊ ဂီရော့ဒ်၊ ပါဗက်တို့ရဲ့ တိုက်စစ်ဟာ ပြိုင်ဘက်နောက်တန်းကို အလုပ်ရှုပ်စေနိုင်ပါတယ်။ ပြင်သစ် အသင်းဟာ ဘယ်လ်ဂျီယံ အသင်းထက် အတွေ့အကြုံပိုင်း ကောင်းမွန်နေတာကြောင့် ဘယ်လ်ဂျီယံ တိုက်စစ်ကို ထိန်းချုပ် ကစားနိုင်မှာဖြစ်ပေမယ့် ပြင်သစ်ရဲ့ တန်ပြန်တိုက်စစ်တွေကို ဘယ်လ်ဂျီယံအသင်း […]
25. မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့ ညီလာခံ ကျင်းပ	-MCN
ဖွင့်ရန်။ မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်စပ် လုံခြုံရေး အခြေအနေ တိုးတက်ဖို့ ရည်ရွယ်တဲ့ နှစ်နိုင်ငံ နယ်ခြားစောင့် တပ်ဖွဲ့တို့ရဲ့ ၄ ရက်ကြာ ညီလာခံကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ၊ ဒါကာမြို့မှာ မနေ့က ဇွန် ၉ ရက်မှာ စတင်ကျင်းပပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ နယ်ခြားစောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ (BGP) က ရဲမှူးချုပ် မျိုးသန်း ဦးဆောင်တဲ့ ၁၁ ဦးပါအဖွဲ့နဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ နယ်ခြားစောင့်တပ် (BGB) တို့ ပီလ်ခါနာရှိ BGB ရုံးချုပ်မှာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပတာ ဖြစ်တယ်လို့ ဒေးလီးစတား သတင်းမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ BGB ဘက်က ဗိုလ်မှူးချုပ် အနီဆာ ရာမန် ဦးဆောင်တဲ့ ၁၅ ဦးပါအဖွဲ့ အပြင် နိုင်ငံခြားရေးနဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်ရေး တာဝန်ရှိသူတွေပါ ပါဝင် […]
24. မိုးထိမိုးမိ ရွှေတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်း ရပ်ဆိုင်းခဲ့ရလို့ ၀န်ထမ်း ငါးထောင်ကျော် အလုပ်မရှိဖြစ်ခဲ့ရ (ရုပ်/သံ)	-MCN
#ပြည်တွင်းသတင်း	(6d ago)
ဖွင့်ရန်။ မိုးထိမိုးမိ ရွှေတူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းတွေ ရပ်ဆိုင်းခဲ့ရတာကြောင့် ၀န်ထမ်း ၅၀၀၀ ကျေ်ာ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရလို့ အမျိုးသားကြီးပွားတိုးတက်ရေး ရွှေတူးဖော်ထုတ်လုပ်မှု အုပ်စုလီမီတက်က ပြောပါတယ်။ ဒီသတင်းကို MCN သတင်းထောက် အောင်သူက ပေးပို့ထားပါတယ်။ အမျိုးသားကြီးပွားတိုးတက်ရေး ကုမ္ပဏီဟာ သတ်မှတ် ရွှေပမာဏာ နိုင်ငံတော်ကို အကြွေးမပေးသွင်းနိုင်တာ ကြောင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဖေဖေ်ာဝါရီလက ရွှေထုတ်လုပ်ခွင့် ပါမစ် လုံးဝ ရပ်ဆိုင်းခံခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို ရပ်ဆိုင်းလိုက်ရတာကြောင့် ၀န်ထမ်း ၅၀၀၀ ကျော်လောက် အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေပြီလို့ အမျိုးသားကြီးပွားတိုးတက်ရေး ရွှေတူးဖော်ထုတ်လုပ်မှု အုပ်စုလီမိတက် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုးထွန်းရှိန်က ပြောပါတယ်။ Soundbites-ဦးစိုးထွန်းရှိန် (ဥက္ကဋ္ဌ) အမျိုးသားကြီးပွားတိုးတက်ရေးရွှေတူးဖော်ထုတ်လုပ်မှုအုပ်စုလီမိတက် ဒါ့အပြင် နိုင်ငံတော်က အခုလို လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်းလိုက်တာကြောင့် ဘီလီယံနဲ့ချီတဲ့ ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေပြီး ဒီဆုံးရှုံးမှုတွေအတွက် ၀န်ကြီးဌာန […]
23. မြောက်ကိုရီးယား အစ္စရေးကို အကျပ်ကိုင်ပြီး ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံ တောင်းခံဖူး	-MCN
#နိုင်ငံတကာသတင်း	(6d ago)
ဖွင့်ရန်။ ရန်သူတွေ ဝိုင်းနေတဲ့ အစ္စရေး နိုင်ငံအနေနဲ့ ရန်ဘက်ဖြစ်တဲ့ အီရန်နိုင်ငံကို ဒုံးကျည် နည်းပညာ မရောင်းစေချင်ရင် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံ ပေးရမယ်လို့ မြောက်ကိုရီးယားက ၁၉၉၉ ခုနှစ်မှာ ခြိမ်းခြောက် အကျပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံကို ငွေသားနဲ့ ပေးချေဖို့ မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ အကျပ်ကိုင်မှုကို အစ္စရေးက လက်မခံခဲ့ဘူးလို့ ဝေါစထရိ ဂျာနယ်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အစ္စရေးက စားနပ်ရိက္ခာ အကူအညီပေးမယ်လို့ ကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်။ အခုလို ခြိမ်းခြောက် အကျပ်ကိုင် ပြောဆိုမှုဟာ မြောက်ကိုရီးယား ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ အစ္စရေးက ကိုယ်စားလှယ်တို့ ဆွီဒင်နိုင်ငံ၊ စတော့ဟုမ်းမြို့ရှိ ကဖေးဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ ဖြစ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> မွောကျကိုရီးယား အစ်စရေးကို အကပျြကိုငျပွီး ဒျေါလာ ၁ […]
22. Reuters သတင်းထောက် ၂ ဦးကို စွဲချက်တင်ဖို့ အမိန့်ချ	-MCN
ဖွင့်ရန်။ Reuters သတင်းထောက် ကိုဝလုံးနဲ့ ကိုကျော်စိုးဦးတို့ ၂ ဦးကို နိုင်ငံတော်အစိုးရ လျှို့ချက်အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃ (၁) (ဂ) နဲ့ စွဲချက်တင်ဖို့ အမိန့်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ ဒီနေ့ ဇူလိုင်လ ၉ ရက်နေ့ ရန်ကုန်တိုင်း မြောက်ပိုင်းခရိုင် တရားရုံးမှာ ဒုတိယ ခရိုင်တရားသူကြီး ဦးရဲလွင်က စွဲချက်တင်ဖို့ အမိန့်ချလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုစွဲချက်တင်လိုက်တဲ့ နိုင်ငံတော်အစိုးရ လျှို့ချက်အက်ဥပဒေ ပုဒ်မဟာ ထောင်ဒဏ် ၁၄ နှစ်အထိ ချမှတ်နိုင်တဲ့ ပုဒ်မ ဖြစ်ပါတယ်။ ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်နေ့မှာ သတင်းထောက် ကိုဝလုံးကို ဆက်လက် စစ်ဆေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုဝလုံးက ကျွန်တော်တို့ တရားရုံးမှာ ရင်ဆိုင်မယ်၊ နောက်ဆုတ်မှာ၊ စွန့်လွှတ်မှာ၊ တုန်လှုပ်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ တရားရုံးကနေ […]
21. ဒလမြို့နယ်ရှိ သောက်ရေကန်မှာ ငါးတွေ သေဆုံးလို့ စစ်ဆေးနေ	-MCN
ဖွင့်ရန်။ ရန်ကုန်တိုင်း၊ ဒလမြို့နယ်၊ ညောင်ကုန်းရပ်ကွက်၊ မျက်ရှင်တော် ဆုတောင်းပြည့် မဟာသင်္ကြန် ဘုရားကြီးဝင်းအတွင်းရှိ သောက်ရေကန်ထဲမှာ ငါးတွေ သေဆုံးနေတဲ့အတွက် စစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ အလျား ၃၇၅ ပေ၊ အနံ ၂၇၅ ပေ၊ အနက် ၁၃ ပေခန့်ရှိ ကန်ထဲမှာ ဇူလိုင်လ ၇ ရက်နေ့က ငါးမြစ်ချင်း၊ ငါးသိုင်းခေါင်းပွ၊ ငါးကြင်း ၂၆ ကောင် သေဆုံးနေတာကို တွေ့ရှိခဲ့တဲ့အတွက် မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ၊ ရေသန့်ဌာနက လာရောက်စစ်ဆေးပြီး ရေနမူနာကို ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ၊ ရေသန့်ဌာန ဓာတ်ခွဲခန်းကို ပေးပို့ စစ်ဆေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်ဆေးနေစဉ်ကာလအတွင်း သောက်ရေကန်ထဲက ရေကို အသုံးမပြုဖို့ ခေတ္တ ပိတ်ထားပါတယ်။ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ဒလမွို့နယျရှိ သောကျရကေနျမှာ ငါးတှေ […]
20. ဂျပန်နိုင်ငံ သက်ကြီးရွယ်အိုစောင့်ရှောက်ရေး လုပ်ငန်းတွေမှာ မြန်မာလုပ်သား စေလွှတ်မယ်	-MCN
ဖွင့်ရန်။ ဂျပန်နိုင်ငံ သက်ကြီးရွယ်အိုစောင့်ရှောက်ရေး လုပ်ငန်းတွေအတွက် မြန်မာအလုပ်သမားတွေ စေလွှတ်နိုင်ဖို့ အေဂျင်စီတွေနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းက တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံကို အလုပ်​သမားတွေ စေလွှတ်​နိုင်​​ရေးအတွက် မူဝါဒတွေချမှတ်ပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်တာကြောင့် အေဂျင်စီတွေနဲ့ တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းခဲ့ပြီး အလုပ်သင်အလုပ်သမားတွေအဖြစ်စေ လွှတ်နိုင်တော့မယ်လို့ အလုပ်သမား လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဝင်းရှိန်က ပြောပါတယ်။ သွားရောက်လုပ်ကိုင်မယ့် မြန်မာအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့ ဂျပန်​ဘာသာစကားကို အနည်းဆုံး N4 ​အောင်​မြင်​ ထားဖို့ လိုအပ်​ပြီး နှစ်အလိုက် အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲတွေကို အဆင့်လိုက် ဖြေဆိုသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ဂပြနျနိုငျငံ သကျကွီးရှယျအိုစောငျ့ရှောကျရေး လုပျငနျးတှမှော မွနျမာလုပျသား စလှေတျမယျ ဂပြနျနိုငျငံ သကျကွီးရှယျအိုစောငျ့ရှောကျရေး လုပျငနျးတှအေတှကျ မွနျမာအလုပျသမားတှေ စလှေတျနိုငျဖို့ အဂေငျြစီတှနေဲ့ ပွီးခဲ့တဲ့ရကျပိုငျးအတှငျးက တှဆေုံ့ဆှေးနှေးခဲ့ပါတယျ။ ဂပြနျနိုငျငံကို အလုပျ​သမားတှေ စလှေတျ​နိုငျ​​ရေးအတှကျ မူဝါဒတှခေမြှတျပွငျဆငျပွီးဖွဈတာကွောငျ့ အဂေငျြစီတှနေဲ့ တှဆေုံ့ညှိနှိုငျးခဲ့ပွီး အလုပျသငျအလုပျသမားတှအေဖွဈစေ […]
19. လေသေနတ်နဲ့ စနောက်စဉ် ကျည်ထွက်ပြီး ဒဏ်ရာရ	-MCN
ဖွင့်ရန်။ ပဲခူးတိုင်း၊ ဝေါမြို့နယ်၊ အဗျားဘိုတဲ ကျေးရွာမှာ လေသေနတ်နဲ့ စနောက်စဉ် ကျည်ထွက်ပြီး သေဆုံးမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ ဇူလိုင်လ ၆ ရက်နေ့မှာ ဝေလင်းခိုင် (၁၈ နှစ်) က မိသားစုနဲ့ အိမ်မှာ ထမင်းစားနေတဲ့ စိန်ပန်းအောင် (၁၄ နှစ်) ဆီ ရောက်လာပြီး လေသေနတ်နဲ့ စိန်ပန်းအောင်ရဲ့ လည်ပင်းကို ထောက်ပြီး စနောက်စဉ် ကျည်ထွက်ပြီး ခဲကျည် ဖောက်ဝင် ဒဏ်ရာ ရခဲ့ပါတယ်။ စိန်ပန်းအောင်ကို ဝေါမြို့နယ် ဆေးရုံ တင်ပို့ကုသပေမယ့် စိုးရိမ်ရတဲ့အတွက် ပဲခူးပြည်သူ့ ဆေးရုံကြီးကို လွှဲပြောင်း ကုသခဲ့ရပါတယ်။ ဝေလင်းခိုင်ကို ဝေါမြို့မ ရဲစခန်းက အမှုဖွင့် စစ်ဆေးနေပါတယ်။ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> လသေနေတျနဲ့ စနောကျစဉျ ကညျြထှကျပွီး ဒဏျရာရ ပဲခူးတိုငျး၊ ဝေါမွို့နယျ၊ […]
18. လှေနစ်မြုပ်မှုမှာပါတဲ့ တရုတ် ခရီးသွားတွေအတွက် အမှန်တရား ဖြစ်စေရမယ်လို့ ထိုင်း ကတိပြု	-MCN
ဖွင့်ရန်။ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဖူးခက်ကမ်းခြေမှာ ဇူလိုင် ၅ ရက်နေ့က ခရီးသွားဧည့်သည်တွေ တင်ဆောင်လာပြီး နစ်မြုပ်ခဲ့တဲ့ လှေပေါ်ပါ တရုတ်နိုင်ငံသားတွေအတွက် အမှန်တရား ရှာဖွေပေသွားမယ်လို့ ထိုင်းအစိုးရက ကတိပြုလိုက်ပါတယ်။ ဖူးခက် ကမ်းလွန်မှာ နိုင်ငံခြား ခရီးသွားတွေပါတဲ့ လှေနစ်မြုပ်ခဲ့ရာ ၄၂ ဦး သေဆုံးပြီး နောက်ထပ် ၁၄ ဦး ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ အခု နိုင်ငံခြား ခရီးသွားတွေပါတဲ့ လှေနစ်မြုပ်သေဆုံးသူ ဦးရေဟာ ၂၀၀၄ ခုနှစ် နောက်ပိုင်း နိုင်ငံခြား ခရီးသွားတွေ ဘေးအန္တရာယ် ကြုံမှုမှာ အဆိုးရွားဆုံး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုင်း ခရီးသွားဝန်ကြီး ဝီရာဆက်က အစိုးရအနေနဲ့ လှေနစ်မြှပ်တာကို အဓိကထား စုံစမ်းစစ်ဆေးနေတယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ရဲတွေက Phoenix နှစ်ထပ် လှေပေါ်ပါ လှေဝန်ထမ်းတွေကို စုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ်။ လှေဟာ […]
17. စပိန်နည်းပြ ဟီယာရို ရာထူးက နုတ်ထွက်	-MCN
ဖွင့်ရန်။ ကမာ့္ဘဖလား ဘောလုံးပြိုင်ပွဲမှာ စပိန်အသင်း နည်းပြအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ ဟီယာရိုဟာ နည်းပြရာထူးကနေ နုတ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဟီယာရိုဟာ အရင် ရယူခဲ့တဲ့ ဘောလုံးအသင်း အာကစားဒါရိုက်တာ တာဝန်ကိုလည်း ပြန်ရယူသွားမှာ မဟုတ်ကြောင်း စပိန်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်က သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ ကစားဖို့ ရက်ပိုင်းအလိုမှာ နည်းပြ လိုပီတီဂူကို ရာထူးကနေ ထုတ်ခဲ့ပြီး ဟီယာရိုကို နည်းပြအဖြစ် ခန့်ကာ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲကို ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ စပိန်အသင်းဟာ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ ရှုံးထွက်အဆင့်မှာ ရုရှားကို ရှုံးနိမ့်ကာ ပြိုင်ပွဲကနေ ထွက်ခဲ့ရပါတယ်။ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ “ဟီယာရုံဟာ သူရဲ့အရင် အားကစားဒါရိုက်တာ ရာထူးကို ပြန်ရယူမှာ မဟုတ်ဘူး၊ စပိန်လက်ရွေးစင် နည်းပြရာထူးကို တာဝန်ယူမှာ မဟုတ်တော့ဘူး၊ ဟီယာရိုဟာ စိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေ ရယူဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားတယ်” လို့ […]
16. ဗြိတိန် ခွဲထွက်မှုဆိုင်ရာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး နုတ်ထွက်	-MCN
ဖွင့်ရန်။ ဥရောပ သမဂ္ဂ (EU) ကနေ ဗြိတိန် ခွဲထွက်ရေးမှာ အဓိက ညှိနှိုင်းရေးမှူးဖစ်တဲ့ ဝန်ကြီး ဒေးဗစ် ဒါဗီဟာ မနေ့က ဇူလိုင် ၈ ရက်နေ့မှာ ရာထူးကနေ နုတ်ထွက်စာ တင်လိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာ EU ကနေ ဗြိတိန် ခွဲထွက်ရေး ဆန္ဒမဲပေး သဘောတူခဲ့ချိန်က စပြီး ဝန်ကြီး ဒေးဗစ် ဒါဗီက ဦးဆောင် ညှိနှိုင်းနေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗြိတိန် ခွဲထွက်ရေးမှာ ပျော့ပြောင်းတဲ့ အစီအစဉ်ကို ကက်ဘိနက်က ထောက်ခံအောင် လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ ဗြိတိန် ဝန်ကြီးချုပ် ထရီဆာမေက ပြောကြားပြီး ရက်ပိုင်းအကြာမှာ နုတ်ထွက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ဗွိတိနျ ခှဲထှကျမှုဆိုငျရာ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး နုတျထှကျ ဥရောပ သမဂ်ဂ […]
15. ဂျပ်စတင် ဘီဘာက ဟေလီ ဘော်လ်ဒွင်ကို လက်ထပ်ခွင့်တောင်း	-MCN
ဖွင့်ရန်။ ဆက်ဆံရေး ရှိနေတာ ၁ လကြာပြီးနောက် ကမ္ဘာကျော် အဆိုတော် ဂျပ်စတင် ဘီဘာက မော်ဒယ် ဟေလီ ဘောလ်ဒွင်ကို လက်ထပ်ခွင့် တောင်းလိုက်ပါတယ်။ အသက် ၂၄ နှစ်အရွယ် ဘီဘာက အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ် ဘောလ်ဒွင်ကို ဇူလိုင်လ ၇ ရက်နေ့ညက ဘဟားမားမှာ ရှိတဲ့ စားသောက်ဆိုင် တစ်ဆိုင်မှာ လက်ထပ်ခွင့် တောင်းခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ သတင်းတွေက ဖော်ပြပါတယ်။ ဘီဘာက လက်ထပ်ခွင့်တောင်းဖို့ မပြောခင် ဘီဘာရဲ့ ကိုယ်ရံတော်တွေက ဆိုင်မှာ ရှိတဲ့သူတွေရဲ့ ဖုန်းတွေကို မသုံးဖို့ တားမြစ်ခဲ့တယ်လို့ သတင်းတွေမှာ ရေးသားထားပါတယ်။ ဟေလီ ဘော်လ်ဒွင်ဟာ သရုပ်ဆောင် စတီဖင် ဘော်လ်ဒွင်ရဲ့ သမီးဖြစ်ပါတယ်။ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ဂပျြစတငျ ဘီဘာက ဟလေီ […]
14. လူငယ်တွေအတွက် ပညာရေးလမ်းကြောင်းရွေးချယ်ဖို့ ပညာရေးပွဲတော် ပြုလုပ် (ရုပ်/သံ)	-MCN
ဖွင့်ရန်။ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်မြင်ပြီးတဲ့ လူငယ်တွေအတွက် ပညာရေးလမ်းကြောင်းရွေးချယ်ဖို့ ပညာရေးပွဲတော် ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီသတင်းကိုတော့ MCN သတင်းထောက် မြတ်မင်းသူကပေးပို့ ထားပါတယ်။ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း ဖြေဆိုအောင်မြင်ပြီးတဲ့ လူငယ်တွေအတွက် နိုင်ငံတကာ တက္ကသိုလ်တွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး ကျောင်းဆက်တက်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေနဲ့ အလုပ်ကိုင် အခွင့်လမ်းတွေကို တစ်စုတစည်းတည်းရှာဖွေနိုင်ဖို့အတွက် အင်တာနက်ဂျာနယ်ပညာရေးပွဲတော် ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပြပွဲကို ဇူလိုင်လ ၆ ရက်နေ့ က ရန်ကုန်မြို့ UMFCCI မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပြခန်းပေါင်း ၂၀ ကျော် ပါဝင်ပြသခဲ့ပါတယ် ။ Soundbite ……. အောင်သူ (တာဝန်ခံအယ်ဒီတာ) အင်တာနက်ဂျာနယ် အဲဒီ့ပြပွဲမှာ ပြည်တွင်းက ဖွင့်ထားတဲ့ကောလိပ် ကျောင်းတွေ အပြင် နိုင်ငံတကာ တက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေ ပါဝင်ပြသခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံက လူငယ်တွေအနေနဲ့ပညာရေးမှာ အားနည်းမှုတွေရှိနေတဲ့အတွက် နိုင်ငံတကာကို ယှဉ်နိုင်ဖို့ ပိုမိုကြိုးစားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ […]
13. တောင်ကိုရီးယား ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ မြောက်ကိုရီးယားကို ရောက်ရှိ	-MCN
ဖွင့်ရန်။ ကြက်ခြေနီ အဖွဲ့ရဲ့ အကူအညီနဲ့ နိုင်ငံ နှစ်ဖက်မှာ ရှိနေတဲ့ မိသားစုဝင်တွေ ပြန်လည် ဆုံဆည်းရေး ပြင်ဆင်ဖို့ တောင်ကိုရီးယား ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာ မြောက်ကိုရီးယားကို ဒီနေ့ ဇူလိုင် ၉ ရက်မှာ ရောက်ရှိလာပါတယ်။ ကွဲကွာနေတဲ့ မိသားစုဝင်တွေ ပြန်လည် ဆုံတွေ့ဖို့ကို လာမယ့် သြဂုတ်လအတွင်း မောင့် ကွန်ဂန် ဟိုတယ်မှာ ပြုလုပ်ဖို့ လျာထားတယ်လို့ တောင်ကိုရီးယား မီဒီယာတွေက ဖော်ပြပါတယ်။ ရောက်ရှိလာတဲ့ ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့မှာ တောင်ကိုရီးယား ပေါင်းစည်းရေး ဝန်ကြီး၊ ကြက်ခြေနီအဖွဲ့ဝင်နဲ့ ဟွန်ဒိုင် အာဆန် ကုမ္ပဏီတို့က ကိုယ်စားလှယ်တွေ အပါအဝင် ၂၂ ဦး လိုက်ပါလာပါတယ်။ ဟွန်ဒိုင်း အာဆန် ကုမ္ပဏီက နှစ်ဖက် နိုင်ငံက မိသားစုဝင်တွေ တွေ့ဆုံရာမှာ အဆင်ပြေစေဖို့ […]
12. တူရကီမှာ ရထားလမ်းချော် တိမ်းမှောက်မှု ၂၄ ဦးသေ၊ ရာနဲ့ချီ ဒဏ်ရာရ	-MCN
ဖွင့်ရန်။ တူရကီနိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်းမှာ ရထားတစ်စီး လမ်းချော်တိမ်းမှောက်လို့ ၂၄ ဦး သေဆုံးပြီး ရာနဲ့ချီ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ မနေ့က ဇူလိုင် ၈ ရက်နေ့က ရထားပေါ်မှာ လူ ၃၆၀ ခန့် လိုက်ပါလာပြီး ရထားဟာ အက်ဒရင် ဒေသကနေ ဘူလ်ဂေးရီးယား နယ်စပ်ကို ဖြတ်ပြီး အစ္စတန်ဘူမြို့ရှိ ဟယ်ကာလီ ဘူတာရုံကို မောင်းနှင်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မိုးသည်းထန်မှုကြောင့် မြေတိုက်စားပြီး ရထားလမ်း ပျက်ဆီးခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ အာဏာပိုင်တွေက ပြောပါတယ်။ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> တူရကီမှာ ရထားလမျးခြျော တိမျးမှောကျမှု ၂၄ ဦးသေ၊ ရာနဲ့ခြီ ဒဏျရာရ တူရကီနိုငျငံ အနောကျမွောကျပိုငျးမှာ ရထားတဈစီး လမျးခြျောတိမျးမှောကျလို့ ၂၄ ဦး သဆေုံးပွီး ရာနဲ့ခြီ ဒဏျရာရရှိခဲ့ပါတယျ။ မနကေ့ ဇူလိုငျ […]
11. မြောက်ဥက္ကလာမှာ ယာဉ်တိုက်မှု အိန္ဒိယ နိုင်ငံသား ၁ ဦး သေဆုံး	-MCN
ဖွင့်ရန်။ ရန်ကုန်တိုင်း၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်မှာ ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ပွားရာ အိန္ဒိယနိုင်ငံသား ၁ ဦး သေဆုံးပြီး တခြား အိန္ဒိယနိုင်ငံသား ၁ ဦး ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဇူလိုင်လ ၇ ရက်နေ့က မစ္စတာ ရာဂျက် ချတ် ဒယာနီ (၃၉ နှစ်) မောင်းနှင်ပြီး မစ္စတာ ပရာနေ ဂျိုရှီ (၂၇ နှစ်) လိုက်ပါလာတဲ့ ကားက လမ်းဘေးမှာ ရပ်ထားတဲ့ YBS (16) ခရီးသည်တင်ယာဉ်ကို နောက်ကနေ ဝင်တိုက်မိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ ၂ ဦးစလုံးကို မြောက်ဥက္ကလာပ ဆေးရုံကို ပို့ဆောင်စဉ် မစ္စတာ ရာဂျက် ချတ် ဒယာနီ လမ်းမှာ သေဆုံးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ Guarav International ကုမ္ပဏီ […]
10. သတင်းမီဒီယာ ကောင်စီဝင်သစ် ရွေးကောက်ပွဲ သြဂုတ်လမှာ ကျင်းပမယ်	-MCN
ဖွင့်ရန်။ သတင်းမီဒီယာကောင်စီ ဒုတိယ သက်တမ်းမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ သတင်းမီဒီယာ ကောင်စီဝင်သစ် ရွေးကောက်ပွဲကို လာမယ့် သြဂုတ်လလယ်မှာ ကျင်းပမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ အမည်စာရင်း တင်သွင်းခြင်းနဲ့ သတင်းမီဒီယာကောင်စီဝင် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အဆိုပြုလွှာပုံစံကို မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းမီဒီယာကောင်စီ ဝက်ဘ်ဆိုက်နဲ့ Mm.presscouncil ကွန်ရက် စာမျက်နှာတို့မှာ ရယူနိုင်ပြီး ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် ကောင်စီရုံးကို လာရောက်ပြီး ဖြစ်စေ၊ mmpresscouncil@gmail.com ကို မေးလ်ပို့ပြီး ဖြစ်စေ ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားပြီး တင်သွင်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သတင်းမီဒီယာ ဥပဒေအရ ကောင်စီသက်တမ်းကို ၃ နှစ် ခွင့်ပြုထားပါတယ်။ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> သတငျးမီဒီယာ ကောငျစီဝငျသဈ ရှေးကောကျပှဲ သွဂုတျလမှာ ကငျြးပမယျ သတငျးမီဒီယာကောငျစီ ဒုတိယ သကျတမျးမှာ တာဝနျ ထမျးဆောငျဖို့ […]
9. ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲမှာ အကြိုက်ချင်း မတူလို့ ရုရှားလင်မယား ကွာရှင်း	-MCN
ဖွင့်ရန်။ ကမ္ဘာ့ဖလားမှာ ဘောလုံးအကျော်အမော်တွေကို အကြိုက်ချင်း မတူလို့ လှောင်ပြောင်ရာကနေ ရုရှားလင်မယား ကွာရှင်းတဲ့အထိ ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဇနီးက ပေါ်တူဂီအသင်းက ခရစ္စတီယာနို ရော်နယ်ဒိုကို အားပေးတာ ဖြစ်ပြီး ခင်ပွန်းဖြစ်သူက အာဂျင်တီးနား အသင်းက လိုင်ယွန်နယ် မက်ဆီကို အားပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လင်မယား နှစ်ဦးဟာ အားပေးတဲ့ အကြိုက်ချင်းမတူလို့ ကမ္ဘာ့ဖလား ဘောလုံးပွဲစဉ် တစ်လျှောက်လုံး စကားများနေခဲ့ကြတယ်လို့ ဒေသတွင်း မီဒီယာတွေက ဖော်ပြပါတယ်။ အာဂျင်တီးနားနဲ့ အိုက်စလန်တို့ ကစားကြတဲ့ ပွဲမှာ မက်ဆီရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ဇနီးက လှောင်ပြောင်တာကစပြီး ကွာရှင်းဖို့ ဖြစ်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ကမ်ဘာ့ဖလားပှဲမှာ အကွိုကျခငျြး မတူလို့ ရုရှားလငျမယား ကှာရှငျး ကမ်ဘာ့ဖလားမှာ ဘောလုံးအကြျောအမျောတှကေို အကွိုကျခငျြး မတူလို့ လှောငျပွောငျရာကနေ ရုရှားလငျမယား […]
8. ဒု သမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေနဲ့ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ပေါလစ်ဗျူရို အဖွဲ့ဝင်တို့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး	-MCN
ဖွင့်ရန်။ ဒုတိယ သမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေနဲ့ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ပေါလစ်ဗျူရို အဖွဲ့ဝင် ဗဟိုကော်မတီ ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီး မစ္စတာ ဟူအန် ခွန်မင်းတို့ မနေ့က ဇူလိုင်လ ၈ ရက် နေပြည်တော်မှာ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးကြပါတယ်။ တွေ့ဆုံစဉ် မီဒီယာကဏ္ဍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ခရီးသွားလာရေး ကဏ္ဍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတို့ကိုလည်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ ဆွေးနွေးပွဲကို ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ဖေမြင့်၊ သာသာနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီး သူရဦးအောင်ကို၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်၊ ပြန်ကြားရေး ဒုဝန်ကြီး ဦးအောင်လှထွန်းတို့ တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ဒု သမ်မတ ဦးမွငျ့ဆှနေဲ့ တရုတျကှနျမွူနဈပါတီ ပေါလဈဗြူရို အဖှဲ့ဝငျတို့ တှဆေုံ့ ဆှေးနှေး ဒုတိယ သမ်မတ ဦးမွငျ့ဆှနေဲ့ […]
7. ဘင်္ဂါလီ ဒုက္ခသည်စခန်းမှာ ရာဇဝတ်မှုတွေ မြင့်တက်နေ	-MCN
ဖွင့်ရန်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ၊ ကောက်ဘဇားရှိ ဘင်္ဂါလီ မွတ်စလင် ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာ ရာဇဝတ်မှုတွေ မြင့်တက်နေတယ်လို့ ဒေးလီးစတား သတင်းစာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၆ လအတွင်း ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာ လူသတ်မှု ၁၉ မှု ဖြစ်ခဲ့ပြီး အသတ်ခံရသူတွေထဲမှာ စခန်းခေါင်းဆောင် နှစ်ဦး ပါဝင်ပါတယ်။ လူသတ်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အဖမ်းခံရတဲ့ ဘင်္ဂါလီ မွတ်စလင် ၅၅ ဦး ရှိပါတယ်။ တခြားအမှုတွေကတော့ အဓမ္မပြုကျင့်မှု၊ ဖြားယောင်းသွေးဆောင်မှု၊ မူးယစ်ဆေးဝါးမှုတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒုက္ခသည် ၁ သန်းနီးပါးရှိတဲ့ ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၁ သောင်း ၂ ထောင် ထပ်မံ ချထားမယ်လို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အစိုးရက ကြေညာထားပါတယ်။ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ဘင်ျဂါလီ ဒုက်ခသညျစခနျးမှာ ရာဇဝတျမှုတှေ မွငျ့တကျနေ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့နိုငျငံ၊ […]
6. ဂျပန်ရေကြီးမြေပြိုမှု သေဆုံးသူ ၈၅ ဦးအထိရှိလာ၊ ၆၀ နီးပါပျောက်ဆုံးနေ	-MCN
ဖွင့်ရန်။ ဂျပန်နိုင်ငံ အနောက်ပိုင်းမှာ မိုးသည်းထန်မှုပြီး ရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့် သေဆုံးသူ ၈၅ ဦးအထိ မြင့်တက်လာနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုးရွားလွန်းတဲ့ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်ကြားမှာ ပျောက်ဆုံးနေတဲ့သူ ၆၀ နီးပါး ရှိနေပြီး ၇ သန်းလောက်ရှိတဲ့ ဒေသခံတွေဟာ သူတို့ရဲ့ နေအိမ်တွေကို စွန့်ခွာနေရတယ်လို့ ဂျပန်သတင်းတွေမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ကူရာရှီကီမြို့မှာ လူဦးရေ ၅ သိန်းခန့်ရှိပြီး ဂျပန်အနောက်ပိုင်းမှာ တည်ရှိတဲ့ အဲ့ဒီမြို့ဟာ ဇူလိုင်လတိုင်း ၃ ကြိမ် နီးပါး ဆိုးဆိုးရွားရွား မိုးရွာသွန်းလေ့ရှိတဲ့ နေရာတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခု တစ်ကြိမ် မိုးရွာသွန်းမှုကတော့ ဆိုးရွားတဲ့ သမိုင်းဝင် မိုးရွာသွန်းမှုဖြစ်လို့ အရေးပေါ်အခြေအနေအဖြစ် ဂျပန်မိုးလေဝသဌာနက ကြေညာထားပါတယ်။ ရုပ်သံလိုင်းတွေရဲ့ ထုတ်လွှင့်မှုတွေအရ ဒေသခံပြည်သူတွေ၊ အထူးသဖြင့် လူနာတွေဟာ ဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ပေးမယ့် […]
5. လိုဏ်ဂူမှာ ပိတ်မိနေသူတွေထဲက လူငယ် ၄ ဦးကို စတင် ကယ်ထုတ်	-MCN
ဖွင့်ရန်။ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ချင်းရိုင်ခရိုင်၊ မယ်ဆိုင်မြို့ရှိ ထမ့်လုံခွန်နမ့် လိုဏ်ဂူအတွင်း ပိတ်မိနေကြတဲ့ လူငယ် ဘောလုံးသမား ၁၂ ဦးနဲ့ နည်းပြတို့အနက် လူငယ် ၄ ဦးကို မနေ့က ဇူလိုင် ၈ ရက် ည ၇ နာရီခွဲ အချိန်မှာ စတင် ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ လူငယ် ၄ ဦးကို ရဟတ်ယာဉ်နဲ့ သယ်ဆောင်ပြီး ချင်းရိုင် ဆေးရုံကြီးကို တင်ပို့ ကုသထားပါတယ်။ ကယ်ဆယ်ရေးအတွက် လိုဏ်ဂူအတွင်းရှိ အောက်ဆီဂျင် အားလုံးနီးပါး အသုံးပြုခဲ့ရတဲ့အတွက် ထပ်မံဖြည့်တင်းဖို့ ၁၀ နာရီကနေ နာရီ ၂၀ အထိ အချိန်ယူရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူငယ်တွေကို ကယ်ဆယ်ရေးအတွက် နိုင်ငံတကာက ရေတပ် တပ်ဖွဲ့ဝင် ၅ ဦး၊ ရေငုပ်ကျွမ်းကျင်သူ ၁၃ […]
4. အနောက်တိုင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ အစကတည်းက မရှိဘူးလို့ စီးပွားရေး အကြံပေး ပြော	-MCN
ဖွင့်ရန်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အနောက်နိုင်ငံက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ အစကတည်းကကို မလာတာ ဖြစ်တယ်လို့ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ စီးပွားရေး အထူးအကြံပေး ဒေါက်တာ ရှောင် တာနယ်က ပြောပါတယ်။ သြစတြေးလျ စီးပွားရေး ပညာရှင် ဒေါက်တာ ရှောင် တာနယ်က အနောက်နိုင်ငံတွေက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြောရရင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ ရပ်တန့်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး၊ တကယ့် အမှန်တရားက အစကတည်းကကို မလာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်လို့ ပြောကြောင်း ဘလွန်းဘာ့ဂ် သတင်းဌာနရဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် အစိုးရ တက်လာပြီးနောက် အနောက်နိုင်ငံတွေက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေဟာ စောင့်ကြည့်ရေးဆိုတဲ့ မူနဲ့ ချဉ်းကပ်ခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆောင်းပါးမှာ ဆက်လက် ဖော်ပြပါတယ်။ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှာ […]
3. မြန်မာကို ICC တင်နိုင်ဖို့ အခွင့်အရေး နည်းတယ်လို့ ယန်ဟီးလီပြော	-MCN
ဖွင့်ရန်။ ဘင်္ဂါလီ မွတ်စလင်အရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အင်အားကြီးတဲ့ ပြည်ပ မိတ်ဆွေတွေ ရှိတဲ့အတွက် နိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ် တရားရုံး (ICC) တင်နိုင်ဖို့ အခွင့်အရေး နည်းတယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စ ယန်ဟီးလီက ပြောပါတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံရှိ ဘင်္ဂါလီ မွတ်စလင် ဒုက္ခသည်စခန်းကို ရောက်ရှိစဉ် မစ္စ ယန်ဟီးလီက အခုလို ပြောတာ ဖြစ်တယ်လို့ ဒေးလီးမေးလ် သတင်းမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာ ကျန်ရှိနေတဲ့ ဘင်္ဂါလီတွေကို ဖိနှိပ်မှုတွေ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ မစ္စ ယန်ဟီးလီက ဒါကာမြို့မှာ ပြုလုပ်တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောဆိုသွားပါတယ်။ ဘယ်နိုင်ငံတွေက မြန်မာနိုင်ငံကို အကာအကွယ်ပေးတယ်လို့ ပြောမသွားပေမယ့် ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး ကောင်စီမှာ မြန်မာနိုင်ငံကို […]
2. တရုတ် ယဉ်ကျေးမှုစင်တာ ဖွင့်လှစ်	-MCN
ဖွင့်ရန်။ တရုတ်-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ဖလှယ်ရေး တိုးမြှင့်ဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး ရန်ကုန်မြို့မှာ တရုတ် ယဉ်ကျေးမှု စင်တာကို ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ တရုတ် ယဉ်ကျေးမှု စင်တာဟာ မြန်မာ့ အနုပညာ၊ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ခရီးသွားလုပ်ငန်း ကဏ္ဍတွေမှာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ တရုတ် ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဒုတိယ ဝန်ကျင်ကြီး လီ ကျန်ဇောင်က ပြောတယ်လို့ ဆင်ဟွာသတင်းမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ယဉ်ကျေးမှု စင်တာတွေကို နှစ်နိုင်ငံလုံးမှာ အပြန်အလှန် ဖွင့်လှစ်ဖို့ ၂၀၁၅ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလမှာ သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ် ယဉ်ကျေးမှု စင်တာကို ရန်ကုန်မြို့၊ အလုံမြို့နယ်၊ မင်းရဲကျော်စွာလမ်းမှာ ဇူလိုင်လ ၇ ရက်နေ့က ဖွင့်လှစ်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ် […]
1. ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်းမှာ ဘင်္ဂါလီ ၁ သောင်းကျော် ထပ်မံထွက်ပြေးဟု ပြော	-MCN
ဖွင့်ရန်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်းမှာ ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံကို ထပ်မံထွက်ပြေးလာတဲ့ ဘင်္ဂါလီ မွတ်စလင် ၁၁၄၃၂ ဦး ရှိတယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီး ဇာအစ် အယ်လ် ဟူစိန်က ပြောပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး ကောင်စီမှာ ဘင်္ဂါလီ မွတ်စလင် အရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကြားနာမှုအတွင်း ဇာအစ် အယ်လ် ဟူစိန်က ပြောသွားတာ ဖြစ်တယ်လို့ အေးရှားနယူးစ် သတင်းမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ နိုင်ငံသား စိစစ်ခံရမည့်သူ၏ သက်သေခံကတ်ပြား ပြုလုပ်တဲ့ အစီအစဉ်ကို လက်ခံဖို့ဖို့ မြန်မာအစိုးရက ဘင်္ဂါလီ မွတ်စလင် ဒုက္ခသည်တွေကို ဖိအားပေးနေတယ်လို့လည်း သူက ပြောသွားပါတယ်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ် သြဂုတ်လအတွင်း ARSA အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ရဲ့ တိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်ပြီးနောက် ဘင်္ဂါလီ မွတ်စလင် […]